सहिद विजय घलेका बुवाको निधन
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम पश्चिम ३०, पुस । तत्कालिन नेकपा माओवादीले संचालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धका कमाण्डर सहिद दौलत घर्ति(बिजय घले)का बुवा हरिप्रसाद घर्तीको निधन भएको छ । घर्तीको ८४ वर्षको उमेरमा त्रिवेणि गाउँपालिका ५ जिवाङमा रहेको आफ्नै घरमा आज बिहान ४ बजे निधन भएको हो । वि.सं. १९९१ मा जन्मिएका घर्ती लामो समय देखि बिरामीले थलिनुभएको थियो । घर्तीका तीन छोरा मध्ये दुई छोरा सहिद भएका थिए । जेठा छोरा विजय घले र कान्छा छोरा रिमवहादुर घर्ती(मिलन) सहिद हुनुभएको थियो भने माइला छोरा त्रिवेणि गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ । घर्तीको...
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम पश्चिम २१, पुस । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका–२, मा २ सय ५० जना सर्वसाधारणको आँखाको जाँच भएको छ । रुकुम आँखा उपचार केन्द्र सल्लेको आयोजना तथा बाँफिकोट गाउँपालिका २ नम्वर वडाको व्यवस्थापनमा भएको आँखा जाँच कार्यक्रम मार्फत २ सय ५० जनाको आँखा जाँच गरिएको हो । मेलगैरी सहिद स्मृति पार्कमा भएको आँखा जाँच शिविरमा १ सय ५७ महिला तथा ९३ जना पुरुषले आँखा जाँच गराएका छन् । आँखा जाँच गराएका मध्य अधिकांशले कानको जाँच पनि गराएका छन् । सर्वसाधारणलो निःशुल्क आँखा जाँच गरिएको थियो भने आवश्यक केही औषधी...
गाँउमै आधुनिक घट्ट मिल संचालनमा
गोपालसिङ खड्का रुकुम पश्चिम पुष, ४ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी १४ को तिमीले, चौराहामा आधुनिक मिल र आधुनिक घट्ट संचालनमा आएको छ । स्थानीय नरेन्द्रकुमार बिष्टले करिव ३ लाख ५ हजारको लागतमा आधुनिक घट््ट र मिल संचालनमा ल्याउनुभयो । गाउँमा आधुनिक मिल र घट्ट संचालन भएपछि स्थानीयलाई पिठो पिस्न र तेल पेल्न सहज भएको छ । लेकको बस्तीमा पानीबाट चल्ने घट्ट र मिल नपाइने हुँदा आधुनिक मिल र घट्ट संचालनमा आएपछि गाउँमै मकै, गहुँ लगायतका खाद्यान्न पिस्न तथा तोरी लगायत पेलेर तेल निकाल्न सहज भएको भन्दै स्थानीय खुशि भएका छन्...
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष ४ । मेरुदण्ड भाँचिएर थलिएका रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका ५ अमिलाखोलाका बेगम केसीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ । उहाँलाई विदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरुले १३ लाख ४९ हजार एक सय ७२ रुपैंया सहयोग गरेका हुन् । केसी विगत ४ वर्षदेखि मेरुदण्ड भाँचिएर थलिनुभएको छ । बैदेशिक रोजगारीको शिलसिलामा भारतको सिम्ला पुगेका केसीको त्यहाँ नै मेरुदण्ड भाँचिएको हो । मेरुदण्ड भाँचिएपछि एक वर्ष अस्पतालको बेडमा बिताएका केसीले ३ वर्षदेखि ह्विलचेयरको साहारामा हुनुहुन्छ । केसीलाई विदेशबाट प्राप्त भएको सहयोग मंगलबार...
गरिब तथा जेहेनदार बिद्यार्थीलाई सिभिल बैंकको छात्रबृत्ति
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम पश्चिम ३, पुस । सिभिल बैंक लिमिटेडले रुकुम शाखाले छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ । आफ्नो आठौं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी बैंकले जिल्लाको पशुपति मावि मुसीकोट नगरपालिका २ रातामाटाकी एक छात्रालाई छात्रबृत्ति प्रदान गरेको हो । बिद्यालयमा कक्षा ६ मा अध्यनरत ६ मा अध्यनरत गरिब तथा जेहेनदार छात्रा अञ्जली खड्कालाई छात्रबृत्ति स्वरुप नगद ५ हजार प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । एक कार्यक्रमका विच बैंकका सहायक शाखा प्रवन्धक ओपेन्द्र बिष्टले छात्रृ बृत्ति प्रदान गरेका हुन् । बैंकले गत मंसिर १० गते आफ्नो आठौं वार्षिकोत्सव...
आठ महिनामा २ दर्जन बालबिवाह रोकिय
गोपालसिङ खड्का रुकुम पश्चिम पुष, ३ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका १४ मा बालबिवाह रोक्ने क्रम बढेको छ । गत बैशाखमा प्रत्येक घरपरिवारलाई पत्राचार गरे अनुसार वडा बालसंरक्षण समितिले प्रहरीको रोहवरमा बालविवाह रोक्ने गरेको छ । साविक नुवाकोट गाविसको वडा नम्बर १, २, ४ र ९ मा २० बर्ष उमेर नपुगेका केटाकेटीहरुलाई कानुन बमोजिम उमेर पूरा गरेर बिवाह गर्न सल्लाह दिदै बालविवाह रोक्ने गरेको वडा बाल संरक्षण समिति संयोजक भीमबहादुर केसीले बताउनुभयो । बैसाख देखि अहिलेसम्म झन्डै २ दर्जन बालविवाह रोकेको संयोजक केसीको भनाइ छ । उमेर...
८६ जनाको मोति बिन्दुको सफल सल्यक्रिया
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष ३ । आँखा उपचार केन्द्र रुकुम पश्चिममा दुइ दिने निशुल्क आँखा उपचार शिविर सम्पन्न भएको छ । नेपाल नेत्र ज्योती संघ, रुकुम आँखा उपचार केन्द्रले शिविरको आयोजना गरेको हो । शिविरको व्यवस्थापन मुसीकोट नगरपालिकाले गरेको हो भने राप्ती आँखा अस्पतालले प्राबिधिक सहयोग गरेको थियो । पुष १ र २ गते संचालन भएको शिविरमा ४ सय ५३ जनाले आँखा चेकजाँच गराएका छन् । जसमा २ सय ७७ महिला र १ सय ७६ पुरुषले आखा परिक्षण गराएको बताइएको छ । त्यस्तै ८६ जनाको मोति बिन्दुको सफल सल्यक्रिया भएको आयोजकले जनाएको छ । आँखाको अप्रेशन गरेका सबैलाई...
व्यक्तिगत घटना अनलाईनमा दर्ता
मदन बिसी रुकुम पूर्व पुष, ३ । रुकुम पुर्बको सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ५ ले अनलाइनमा ब्यतिगत घटना दर्ताको सुरुवात गरेको छ । वडा कार्यालयले जिल्लामै पहिलो पटक आजबाट अनलाइन प्रक्रिया प्रयोगमा ल्याएको हो । पञ्जिकरण विभागको ब्यतिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांकमा आबद्ध हुने लक्ष्य सहित ब्यक्तिगत घटना दर्तालाई अनलाइनमा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको लागु भएको र यसको सुरुवात वडा नम्बर ५ बाट गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत बिमला रोका श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो...
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष, ३ । मंसीर २७ गतेदेखि बेपत्ता रहेका एक वृद्धको शव ५ दिनपछि फेला परेको छ । रुकुम पश्चिम बाँफिकोट गाउँपालिका १० तल्लोठाँटीका ६४ वर्षीय गनबहादुर चन्द मंसीर २७ गतेदेखि बेपत्ता हुनुभएको थियो । बेपत्ता चन्द सोमबार साँझ भेरीखोला भिर भन्नेठाउँमा मृत अबस्थामा फेला परेपछि स्थानियले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । चन्दको भेरीखोला भिरबार लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने ईलाका प्रहरी कार्यालय बाँफिकोटका ईञ्चार्ज हरी पन्तले जानकारी दिनुभयो...
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष, २ । रुकुम पश्चिममा विषाक्त रक्सि खाँदा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका १२ मा विषाक्त रक्सि सेवन गर्दा तीन जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका ९ मगरराङजाका ६३ वर्षिय खम्बु कामी, मुसीकोट नगरपालिका ११ लहुँ भलाक्चाका ५४ वर्षिय कमानसिंह सार्की र मुसीकोट नगरपालिका १२ नयाँगाउँका २१ वर्षिय पलवहादुर विक रहेका छन् । उनिहरुले ओरेन्ज नामक रक्सि सेवन गरेको पाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव...
डिग्रे मन्दीरको नेतृत्व चुनावबाट
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष, २ । रुकुम पश्चिमको प्रमुख धार्मिक स्थल डिग्रे शाईकुमारी मन्दीर व्यवस्थापन समितिको नयाँ नेतृत्व चुनावबाट चुनिएको छ । शनिबार भएको तेस्रो साधारणसभामा नेतृत्वका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन भएको थियो । अध्यक्षमा लालवहादुर केसी निर्वाचित हुनुभएको छ । उहाँले आफ्ना प्रतिद्धन्दी शैलेन्द्र केसीलाई ४१ मतले पराजित गर्दै अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । कुल २ सय ५९ साधारण सदस्य मध्येमा २ सय १४ मत खसेको थियो । जसमा लालवहादुर केसीले १ सय १८ र उहाँका...
जवरजस्ती करणि आरोपमा युवक पक्राउ
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष, २ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले जवरजस्ती करणिको आरोपमा एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको सानीभेरी गाउँपालिका ७ सहरेकी १५ वर्षिया एक बालिकालाई जवरजस्ती करणि गरेको आरोपमा रुकुम पूर्व भुमे गाउँपालिका ९ चुनवाङका २१ वर्षिय मनोज ओली पक्राउ परेका हुन् । ओलीले गत मंसिर २८ गते सहरेमा जन्ति आएको बेला बालिकालाई जवरजस्ती करणि गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गोठमा बाख्रा बाध्न गएकी बालिकालाई जवरजस्ती गोठमा लिएर करणि गरेको प्रारम्भिक...
बिवाद उत्पन्न हुँदा ४ दिनदेखि सडक अवरुद्ध
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम पुष, २ । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा मुख्य सडक चौरजहारी, खोलागाउँ, नुवाकोट सडक खण्ड ४ दिनदेखि अवरुद्ध छ । मेलैनाउली, कालापाथर, मनकोट जोड्ने सडक स्थानीयले खन्न नदिएपछि मुख्य सडक नै अवरुद्ध गरिएको हो । वडामा गठित श्रम सहकारीले नगरपालिकामा योजनाको सम्झौता गरि सडक खन्ने क्रममा वडा न. ७ को मेलैनाउलीबाट खन्न नदिएपछि विवाद सुरु भएको बताइएको छ । सडक खन्न नदिएपछि मेलैनाउलीवासी र सडक निर्माण गर्ने सहकारीविचमा विच विवाद सुरु भएको हो । विवाद सुरु भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय...
सानीभेरी समाचार डेस्क पुष, २ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) रुकुम पश्चिम गाउँ पसेको छ । सुधृढ पार्टी र जनउत्तरदायि सरकार निर्माणका सन्दर्भमा सुझाव संकलन अभियान लिएर नेकपा गाउँ पसेको हो । यस अभियानका लागि नेकपाले जिल्लालाई तीन कमाण्डमा विभाजन गरेको छ । प्रत्येक कमाण्डको पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्व गरिरहेका छन् । मुसीकोट नगरपालिका र त्रिवेणि गाउँपालिका कमाण्डको केन्द्रीय सदस्य शेरवहादुर केसी, चौरजहारी नगरपालिका र सानीभेरी गाउँपालिका कमाण्डको केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मा(आर्ट) तथा आठबीसकोट नगरपालिका र बाँफिकोट...
बाँफिकोटमा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
प्रचण्ड खत्री रुकुम पश्चिम मंसीर, २९ । रुकुम पश्चिम बाँफिकोट गाउँपालिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार बाँफिकोट गाउँपालिकाको कोटमा पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा केन्द्रिय सदस्य बसन्त शर्मा कुशलले पर्टीको भाबि रणनितिको बारेमा कार्यकर्ताहरुलाई जानकारी गराउनुभएको छ । साथै पाटि एकताको प्रक्रिया टुङग्याउनको लागि सबै पक्षबाट लाग्नु पर्ने उहाँको भनाइ छ । जिल्लामा एकताले छिटै पुर्णता पाउने शर्माले बताउनुभयो...
सल्लीवजार देखि चौरजहारी सडक खण्डको स्तरवृद्धि काम अलपत्र
दुर्गा बिसी सल्यान मंसीर, २९ । सल्यानको सल्लीवजार देखि रुकुम चौरजहारी सडक खण्डको ५ किलोमिटर सडक स्तरवृद्धिको काम अलपत्र परेको छ । सल्लीवजार देखि बन्गाड कुपिण्डेको वडा नम्बर ५ त्रिवेणी वजार नजिकै सम्मको लागि सिग्मा गाल्वा कन्ट्रशनले ११ करोडमा कामको जिम्मा लिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय दाङ र कन्ट्रशनका नरहरी थपलिया बिच ३३ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ श्रावणमा सम्झौता भएको थियो । तर गाल्वा कन्ट्रशनका नरहरी थपलियाले ४९ लाख पेश्की बुझेर कामको जिम्मा दोस्रो व्यक्ती रामबहादुर विष्टलाई दिएका थिए । पेश्की...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २९ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले नगर बससेवा सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सर्वसाधारणलाई सस्तो र भरपर्दो यातायात सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै नगरपालिकाले ३ बस सञ्चालनको तयारी गरेको हो । गत असोज २० गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले सर्वसाधारणको सजिलोका लागि बस सञ्चालन कार्य्विधि पास गरिसकेको छ । कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार बस खरिदका लागि नगरपालिकाले सूचना जारीसमेत गरिसकेको छ । नगर बस सञ्चालनका लागि ३ बस खरिदका सूचना जारी गरिसकेको नगरप्रमुख विशाल शर्माले बताउनुभयो । आवश्यक प्रक्रिया...
दार्मामा जनता संग स्थानिय सरकार कार्यक्रम संचालन
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २८ । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले जनतासंग स्थानिय सरकार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । स्थानिय सरकारले हाल सम्म गरेका कामहरुको बारेमा जानकारी गराउने, जनताका गुनासा सुन्ने तथा सुझाब संकलन गर्ने उदेश्यले मंसीर ५ गतेबाट जनतासंग स्थानिय सरकार कार्यक्रम सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । हप्तामा एक पटक संचालन हुँदै आएको कार्यक्रम बिहिबार वडा नम्बर ६ मा संचालन गरिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी जनताहरुले काममा ढिला सुस्ती गरेर कर्मचारीहरुले दुख दिने गरेको, विकास निर्माणका काम समयमा नभएको जस्ता गुनासा गरेका छन् ।...
आठविसकोटमा भाडादर कायम
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २८ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले यातायातको भाडादर कायम गरेको छ । नगरपालिकाले नगरपालिका भित्र संचालन हुने जीप, बस तथा अटो रिक्साको भाडादर कायम गरेको हो । नगरले जीपका लागि प्रति किलोमिटर १५ देखि १७ रुपैंया कायम गरेको छ । सिधा बाटोमा प्रति किलोमिटर १५ र उकालोमा प्रति किलोमिटर १७ रुपैंया भाडादर कायम गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै बसका लागि प्रति किलोमिटर १० रुपैंया कायम गरिएको छ । अटो रिक्साका लागि भने रिजर्भमा प्रति किलोमिटर प्रति व्यक्ति ७५ र रिजर्भ बाहेक क्युमा प्रति...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर २८ । रुकुम पूर्वको एक विद्यालयले भैलो खेलेर संकलन भएको रकमबाट भवन निर्माण गरेको छ । जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका ६ रुकुमकोटमा रहेको रुक्मिणि माविले भैलो खेलेर संकलन भएको रकमबाट ६ कोठे पक्कि विद्यालय भवन निर्माण गरेको हो । बिद्यालयले २०७२ सालदेखि भैलो खेलि संकलन भएको ७ लाख र विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट ३४ लाख गरी कुल ४१ लाखको लगानिमा ६ कोठे पक्कि भवन निर्माण गरेको छ । विद्यालयले प्रत्येक वर्षको तिहारमा देउसि भैलो खेल्ने गरेको छ । भैलोबाट संकलन भएको रकम जथाभावि खर्च नगरी विद्यालयको भौतिक...
मोबाइल एप्स चलाउन इन्टरनेट नचाहिने
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम मंसीर, २७ । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकाको सुचना मोबाइलबाट जानकारी लिनको लागि इन्टरनेट आवश्यक नपर्ने भएको छ । नगरपालिकाले मोबाइल एप्स सञ्चालन गरेपछि नगरपालिका र वडा कार्यालय द्वारा प्रकासन गर्ने सुचनाको जानकारी लिन इन्टरनेट नचाहिने भएको हो । मोबाइल एप्स सञ्चालन भए सँगै सुचना जानकारी लिन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने, फोन गर्नुपर्ने र इन्टरनेट द्वारा हेर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने नगरपालिकाको कार्यालयले बताएको छ । नगर प्रमुख बिशाल शर्माका अनुसार सम्बन्धित वडा कार्यालयले र नगरपालिकाको...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २७ । राप्ती राजमार्ग अन्तरगत रुकुम पश्चिमको मुसीकोट ४ बैरागिठाँटीमा पर्ने बेलि ब्रिज जिर्ण बनेको छ । मर्मत गरिएको एक बर्षमै ब्रिज जिर्ण बनेको हो । २०६२ सालमा निर्माण भएको बेलिब्रिज जिर्ण बनेपछि गत वर्ष मर्मत गरिएको थियो । सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीको करिब २५ लाख लागतमा ब्रिजको मर्मत गरिएपनि मर्मतको एक वर्ष नबित्दै पुनः जिर्ण बनेको हो । पुलमा राखिएका फलामका पाता टुक्रिएर झर्न लागेका छन् । यसले गर्दा पुलमा दर्जन बढी ठुला ठुला प्वालहरु परेका छन् । केहि पाताहरु भने उप्किएर ठाडिएका छन् ।...
सरकारका विरुद्ध तानाबाना बुनिदै छः रक्षा मन्त्री पाखे्रल
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २६ । उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोख्रेलले सरकारलाई कमजोर बनाउनका लागि तानाबाना बुन्ने काम भैरहेको बताउनु भएको छ । मंगलबार रुकुम पूर्वको रुकुमकोटमा आयोजित प्रथम रुकुम पूर्व पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पोख्रेलले यस्तो बताउनुभएको हो । जनताको मत र विश्वास दुवै पाएर बनेको दुई तिहाईको सरकारलाई कसरी कमजोर बनाउँन सकिन्छ भनेर केहि तत्वहरु लागि परेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । साथै उहाँले सरकार बिरुद्धको कुनैपनि जालझेल सरकारलाई स्विकार्य नभएको बताउनुभयो...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २६ । मदिरा सेवन गरेका युवाहरुले रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मवहादुर केसीमाथी कुटपिट गरेका छन् । आफ्नै घरमा सुतेका अध्यक्ष केसीमाथी अत्यधिक मदिरा सेवन गरेका केहि युवाहरुले मंगलबार राति अध्यक्ष केसीमाथी कुटपिट गरेका हुन् । बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नम्वर ४ स्थित घरमा सुतिरहेका गाउँपालिका अध्यक्षमाथी विहेबाट फर्किरहेका युवाले ढुङ्गा प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । कुटपिटबाट अध्यक्ष केसीको टाउकामा ३ वटा टाँका लगाइएको छ । त्यस्तै कुटपिटबाट गालामा...
सिस्ने र पुथाउत्तरगंगाका दुर्गम बस्तीहरु संचार सेवामा जोडिए
मदन बिसी रुकुम पूर्व, मंसीर ९ । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाँउपालिका वडा नम्बर २ सुद्रीमा नेपाल टेलीकमको नमस्तेको टावर निर्माण भइ सञ्चालनमा आएको छ । टावरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइ टावर सञ्चालनमा आएपछि सिस्ने गाँउपालिकाका दुर्गम बस्तीहरु संचार सेवामा जोडिएका छन् । २ नम्बर वडाको सुद्रिमा रहेको टावर आजबाट सुचारु भएपछि सिस्ने गाउँपालिकाका बिकट गाउँहरु छिपखोला, दद्कुना, प्वाङ, नायगाड, सुर्दी तथा पुथाउत्तरगङगा गाउँपालिकाका नाखा, राङसी, जाङ, चारगाउँ र त्रीवेनी लगायत आसपासका बस्तिहरु टेलिफोन सेवामा जोडिएको सिस्ने गाउँपालिका वडा नं २ का...
किसानले फलाएको स्याउ विकेन
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ९ । रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँमा फलेको स्याउ बिक्रि नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगेको छ । बजार नपाउँदा किसानले फलाएका स्याउ बिक्रि हुन नसकेका हुन् । गत असोज महिनामै टिपिएका स्याउ बिक्रि नहुँदा कुहिने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । विशेष गरी पुथाउत्तरगंगा गाउ“पालिकाको १, २, ५, १० र ११ नम्वर वडामा धेरै स्याउ फल्ने गरेको छ । गाउँपालिकाका ६, ९, १२, १३ र १४ नम्वर वडाका विभिन्न ठाउ“मा पनि स्याउका बोट छन् । गाउ“पालिकाभर ३० हजार बढी स्याउका बोट रहेको बताईएको छ । जसमा ३ हजार...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ९ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका २ विजयश्वरीमा जीप दुर्घटना हुँदा १० जना घाईते भएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको सर्केनाबाट चौरजहारी तर्फ जादै गरेको रा १ ज ५३५ नम्बरको जीप सनिबार दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते मध्ये मध्य ७ जनालाई नेपालगञ्च रिफर गरिएको छ । नेपालगञ्च रिफर हुनेमा चौरजहारि नगरपालिका २ कि ४५ बर्षिय त्रिपुरा गौतम, ३ कि ३६ वर्षिय दिपा खत्री, वडा नम्वर ४ कि २५ वर्षिय रेवति भण्डारी, तुला डिसी, केसब केसी, ६ को नेहा खत्री रहेका छन् । अन्य तिन जनाको मिसन अस्पताल चौरजहारीमा...
मदन बिसी रुकुम पूर्व, मंसीर, ७ । रुकुम पूर्वमा आज दुईवटा सरकारी कार्यालयको उद्घाटन गरिएको छ । दुइ वटै कार्यालयको आज एक कार्यक्रमकाबिच प्रदेश नम्बर ५ का सामाजिक बिकास मन्त्री सुदर्शन बरालले उद्घाटन गर्नु भएको हो । जिल्लामा घरेलु तथा साना उद्योग बिकास समिति र जिल्ला जनश्वास्थ्य कार्यालय उद्घाटन गरिएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालय सिस्ने गाउँपालिका ६ छिप्रीदहमा राखिएको छ भन्ने जिल्ला जन स्वास्थ्य कार्यालय सिस्ने गाउँपालिका ५ चोकबजारमा राखिएको छ । कार्यालयको उद्घाटन गर्दै सामाजिक बिकास मन्त्री...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ७ । प्रथम रुकुम पूर्व पर्यटन साँस्कृतिक महोत्सवको उद्घाटन नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने भएको छ । सिस्ने गाउँपालिका रुकुमकोटमा हुने महोत्सवको उद्घाटन उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीले इश्वर पोखरेलले गर्ने पक्का भएको हो । महोत्सव मुल आयोजक समिति रुकुमपूर्व चेम्बर अफ कमर्शका अनुसार महोत्सव उद्घाटनको प्रमुख अतिथि पक्का भएको हो । आयोजकका अनुसार महोत्सवको उद्घाटन पनि केही दिन सरेको छ । महोत्सव उद्घाटनका प्रमुख अतिथि पक्का भएसँगै प्राविधिक र तयारीका कारण महोत्सव उद्घाटन तीन दिन पछि सरेको...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ६ । रुकुम पश्चिम त्रिवेणी गाउँपालिका ७ मा रहेको साधारण माध्यमिक विद्यालय मुरुडाँडामा विद्यार्थीहरुले अनिश्चितकालिन तालाबन्दी गरेका छन् । विद्यालयमा कम्युटर विषय तथा अन्य विषयको पनि नियमित पठनपाठन हुनुपर्ने माग राख्दै बुधबारदेखि विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । नयाँ शैक्षिसत्र सुरु भएदेखि कम्युटर विषय शिक्षक नियुक्त नगरिएको र गणित, विज्ञान लगाएतका अन्य विषयको पनि नियमित पठनपाठन नभएकोले विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको विद्यार्थीले बताएका छन् । विषय शिक्षक नियुक्त गरी तत्काल पठनपाठन सुचारु गर्न...
बाँफिकोटमा महिलाहरुको भेला सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ६ । रुकुम पश्चिम बाँफिकोट गाउँपालिकामा महिलाहरुको भेला सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनकला पुनको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले गाउँपालिकाबाट आर्थीक वर्ष २०७५÷०७६ का लागी विनियोजन गरिएको महिला लक्षीत १० लाख बजेट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । जस अन्तरगत ६० प्रतिशत बजेटबाट गलैचा उद्योग खोल्ने र ४० प्रतिशत बजेटबाट महिला हिंसा न्युनिकरण सम्बन्धि विभिन्न जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको त्यहाँबाट विपना बुढा चन्दले जानकारी दिनुभयो । भेलामा गाउँपालिका...
बेल्टापु मेला भलिबलको उपाधी सानीभेरी बोर्डिङलाई
नारायण ओली रुकुम पश्चिम, मंसीर ५ । रुकुम पश्चिम सानीभेरी गाउँपालिकाले परम्परागत बेलटापु मेलाको अबसरमा आयोजना गरेको खुला पुरुष भलिबलको उपाधि सानीभेरी एकेडेमी बोर्डीङ स्कुलले जितेको छ । १६ ओटा टिमलाई पछि पार्दै सानीभेरी ३ गरायला पेदिमा रहेको सानीभेरी एकेडेमी बोर्डिङ स्कूलले १ लाख १ हजार सहित कप, मेडल र प्रमाण पत्र हात पारेको छ । त्यस्तै उपविजेता बनेको चुलि युवाक्लब सुर्खेतले ५५ हजार सहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा सान्त्वना हुने सानीभेरी गाउँपालिका ५ र बाँफिकोटा गाउँपालिकाको टिमले २०÷२० हजार सहित मेडल र प्रमाणपत्र...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर ५ । बितेको एक वर्षमा रुकुम(पश्चिम)मा ५९ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । २०१८ जनवरी देखि हालसम्म विभिन्न शिर्षकमा ५९ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०१९ को वार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लामा एकवर्षको अबधिमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जिल्लामा सबै भन्दा बढि महिला बिरुद्ध हुने भेदभाव र...
साहित्यकारहरुको जमघट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर ५ । रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका ५ सेरीगाउँमा प्रसिद्ध साहित्यकारहरुको जमघट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा रुकुमको आयोजनामा जिल्लाका बिभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा सिर्जनशिल लेखन कक्षा उद्घाटन तथा साहित्यीक कार्यक्रमको अवसरमा नेपालकै प्रसिद्ध साहित्यकारहरु सगं जमघट तथा परिचयात्मक कार्यक्रम भएको होे । यस्तै कार्यक्रम रुकुम पश्चिम र पूर्बमा गरि ४ दिनसम्म जारी रहने बताइएको छ । मंगलबार बिहान नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, सेरीगाउँमा रहेको यमुनानन्द...
१६ दिने अभियानको नारा तय
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ४ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान सञ्चालनका बिषयमा छलफल तथा अन्तरक्रियात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ । नगरपालिका अन्तरगत महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण शाखाको आयोजनामा छलफल तथा अन्तरक्रियात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो । उप प्रमुख प्रेमकुमारी सुनारको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रियात्मक बैठकले यहि मंसिर ९ देखि २५ (ल्यख। द्दछ ( म्भअ। ज्ञण्) गतेसम्म सञ्चालन हुने लैंगिक हिंसा बिरुद्धको १६ दिने अभियान प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न लैगिक हिंसा बिरुद्ध १६ दिने अभियान,...
चौतारा मेलामा आयोजित भलिबलको विजेता यमाहा स्वरुम
डिल्लीराज विश्वकर्मा रुकुम पश्चिम, मंसीर ४ । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका स्थित राडीमा संचालित २४आँै चौतारा मेलाको अबसरमा आयोजित सर्बाधिक पुरस्कार राशीको खुल्ला पुरुष भलिबल प्रतियोगीताको उपाधि यमाहा स्वरुम आठविसकोटले जितेको छ । यमाहा स्वरुमले प्रतियोगितको बिजेता बन्दै एकलाख १० हजार सहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै उपविजेता थ्रिस्टार युवा क्लब गीजाले ७० हजार सहित कप, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा सान्त्वना हुने आठविसकोट नगरपालिका ८ दाजे र नलगाड नगरपालिका ९ तात्राको टिमले ४०÷४० हजार सहित मेडल र...
जनता मालिक आफु कामदारः गोपाल शर्मा
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर ४ । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्मा अनलले जनता मालिक र आफु कामदार भएको बताउनुभएको छ । जनताले आफुलाई कामदारको रुपमा निर्बाचित गराएको भन्दै जनताको मत पाएर मालिक बन्ने अधिकार आफुलाई नभएको उहाँले बताउनुभयो । रुकुम पश्चिम त्रिवेणि गाउँपालिका ४ खुम्चेरीमा मतदातासंग भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले भन्नुभयो “चुनावमा गरेका घोषना र प्रतिबद्धतालाई बिर्सेको छैन, बिकास भन्ने कुरा बिस्तारै हुने कुरा हो तपाईहरु नआत्तिनुहोस” । समृद्ध रुकुमको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार लागि परेको बताउदै शर्माले...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, ४ । राप्ती अंचलकै प्रसिद्ध धार्मीक स्थल रुकुमको डिग्रे शाइकुमारी मन्दिरमा हिजो सोमबारबाट मेला सुरु भएको छ । हरेक वर्ष हरिवोधनी एकादशी देखी कात्र्तिक शुक्लपुर्णिमा सम्म लाग्ने डिग्रे मेला सोमबारबाट सुरु भएको हो । मेलाको पहिलो दिन हिजो करिव ६ सय भन्दा बढी दर्शनार्थिले पुजापाठ गरेको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ । साथै लाखबत्ती बालेर पुजापाठ गरिएको छ । सोमबार पहिलो दिन दिउँसो १ वजे सम्मको भेटी ८ हजार ६ सय संकलन भएको बताईएको छ । हिजो एकादशी परेकोले पुजापाठ मात्र गरिएको र आज बिहानैबाट...
भूमेमा नागरिकता वितरण घुम्ती शिविर जारी
जयमान वुढामगर रुकुम पूर्व, मंसीर २ । रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरुमा गत कात्तिकको पहिलो साता देखि नागरिकता वितरण घुम्ती शिविर संचालन भैरहेको छ । भूमे गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वको समन्वयमा भूमेका विभिन्न ठाउँमा मतदाता नामावली परिचय पत्र तथा नागरिकता वितरणका काम भैराखेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले बताउनुभएको । शनिबार भूमे गाउँपालिकाको कार्यालय खाबाङ बगरमा संचालन गरिएको घुम्ती शिरिबाट महिला २३ जना र पुरुष १९ जना गरि ४२ जनाले नागरिकता लिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले...
पुनः मतगणनाको माग सहित परेको उजुरी खारेज
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २ । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका ६ को पुनः मत गणनाको माग गर्दै परेको उजुरी खारेज भएको छ । गत वर्ष भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मत पुनः गणना गर्नुपर्ने माग गर्दै तुलसीपुर उच्च अदालतमा मुद्दा परेको उजुरी खारेज भएको हो । ६ नम्वर वडा अध्यक्षमा पराजित पूर्णबहादुर मल्लले मत गणना प्रति चित्त नबुझेको भनेर फेरी मत गन्न माग गर्दै उच्च अतालतमा उजुरी दिनुभएको थियो । उच्च अदालतका न्यायधिश इश्वरराज आचार्यको इजालसले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले गरेको निर्णय सदर गरेको हो । मत परिणाम सार्वजनिक...
सानीभेरी समाचार डेस्क मंसीर, २ । रुकुम पश्चिममा एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमति र छोराको हत्या गरेका छन् । जिल्लाको त्रिवेणि गाउँपालिका १ बल्लेजुराका ४९ वर्षिय सत्तवहादुर बुढाले श्रीमति ४२ वर्षिया इन्द्रकला बुढा र छोरा ११ वर्षिय स्वयम प्रकाश बुढाको हत्या गरेका हुन् । बुढाले शनिबार राति २ बजेको समयमा श्रीमति इन्द्रकलालाई भरुवा बन्दुकले गोलि र छोरा स्वयम प्रकाशलाई खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले जनाएको छ । स्थानीयले खवर गरेपछि घटना स्थलमा पुग्दा आमा छोरा हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेको जिल्ला...
सानीभेरी समाचार डेस्क कार्तिक २९, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका ९ राडिमा चलिरहेको पिङ ढल्दा ५ जना घाईते भएका छन् । राडिमा जारी परम्परागत चौतारा मेलामा चलिरहेको पिङ डल्दा ५ जना घाईते भएको प्रहरीले जनाएको छ । घाईते हुनेमा आठबीसकोट नगरपालिका ४ आरुखोला गोतामकोटका ५२ वर्षीय कालिबहादुर बिक, उहाँकी श्रीमती ५१ वर्षीया बेलमती विक, वडा नं. ११ गोइरीकी १४ वर्षीया दिपा सिंह, वडा नं. ९ बटाला गाउँकी ७ वर्षीया विमला परियार र नलगाड नगरपालिका ८ हलचौर जाजरकोटका ९ वर्षीय लोकेन्द्र खत्री रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय...
देउसी भैलोबाट संकलित रकम सामाजिक कार्यमा
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक २९ । रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका २ सिस्नेखोलाको एक समुहले देउसी भैलोबाट उठेको रकमले एक गरिव गरिवारलाई सहयोग गरेको छ । समृद्ध दलित युवा समुहले सोहि वडाका गंगा चनाराको परिवारलाई २५ सय आर्थिक सहयोग गरेको हो । देउसी भैलोबाट उठेको ४५ हजार २ सय रकम मध्य २५ सय चनाराको परिवारलाई आर्थिक सहयोग, १५ हजारको सामाजिक कार्यमा प्रयोग हुने भाडा बर्तन, १६ हजार ५ सयको साउन्ड सिस्टम र बाध्यबादनका सामाग्री खरिद गरिएको युवा समुहका संयोजक प्रेमबहादुर नेपालीले बताउनुभयो । यसैबिच रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक २९ । रुकुम पूर्वमा न्यायिक समिति प्रति नागरिकको आकर्षण देखिएको छैन् । स्थानीय तह बनि न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा लामो समय भैसक्दा पनि जिल्लामा रहेका न्यायिक समितिमा निकै कम मात्र उजुरी परेका छन् । तीन वटा स्थानीय तह मध्ये एउटा स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन् । भुमे गाउँपालिका न्यायिक समितिमा कुनैपनि उजुरी आएको छैन् । दोस्रो चरणमा २०७४ को असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएसंगै न्यायिक समिति गठन भएपनि हालसम्म एउटा पनि उजुरी नआएको न्यायिक समिति...
सानीभेरी समाचार डेस्क कार्तिक २६, रुकुम पश्चिम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले अवको आन्दोलन विकास र उत्पादनको भएको बताउँनुभएको छ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका १ मा आयोजित पालाकोट धार्मिक तथा पर्यटन महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले राजनितिक आन्दोलन पुरा भएको बताउनुभयो । ‘नेपालमा लामो समय राजनितिक आन्दोलन चल्यो र निष्कर्षमा पुग्यो, उहाँले भन्नुभयो–अवको आन्दोलन भनेको विकास र उत्पादनको हो ।’ विकास र उत्पादन संग संगै अगाडि बढ्नुपर्नेमा समेत उहाँले जोड...
आठबीसकोटले नगर प्रहरी भर्ना गर्दै
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, २० । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले नगर प्रहरी भर्ना गर्न लागेको छ । नगरपालिकाले खुला र आन्तरिक तर्फ नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक, जवान र कार्यालय सहयोगी गरी १८ जना नगर प्रहरी भर्ना गर्न लागेको हो । आन्तरिक तर्फ दुई जना नगर प्रहरी सहायक र चार जना जवान भर्ना गर्ने नगरपालिकाले तयारी छ । त्यस्तै खुला तर्फ दुई जना प्रहरी सहायक निरिक्षक, ११ जना प्रहरी जवान र एक जना कार्यालय सहयोगी(भान्छे) भर्ना गर्न लागेको छ । खुला तर्फ प्रहरी जवानका लागि खुला ६ जना, महिला दुई जना, आदीवासी जनजाति एक जना, दलित...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, २० । रुकुम पश्चिममा ठुलो मात्राको चरेश सहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका १३ भल्मबाट १० किलो एक सय ग्राम चरेश सहित तीन जनालाई प्रहरीले गयराति पक्राउ गरेको हो । चरेश सहित पक्राउ पर्नेमा आठबीसकोट नगरपालिका ९ राडिका ४२ वर्षिय इन्द्र चन्द, सोही ठाउँका ३८ वर्षिय कर्णवहादुर शाही र सल्यान शिद्धकुमाख गाउँपालिका ढोरचौर घर भई हाल तुलसिपुर उपमहानगरपालिका ९ मा बस्दै आएका ६० वर्षिय हिक्मत बुढाथोकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । किनवेचका लागि आठबीसकोट नगरपालिका १३ घेत्मा...
सार्वजनिक विदाको दिन नागरिकता बितरण
सर्जना कार्की रुकुम पूर्व, कात्तिक १९ । रुकुम पुर्वको भुमे गाउँपालिका ६ धरमशालामा एक दिने नागरिकता बितरण घुम्ति शिबिर सम्पन्न भएको छ । सार्वजनिक बिदाको दिन जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा घुम्ती शिबिरको आयोजना गर्दै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिबार भुमे ६ धरमशालामा शिबिर संचालन गरेको हो । शिबिरमा ३५ जनालाई नागरिकता बितरण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारि मित्रलाल शर्माले बताउनु भयो । जसमा २४ जना महिला र ११ जना पुरुषले नागरिकता पाएका छन् । साथै नागरिकता पाउने सबैको नाम मतदाता परिचयपत्रमा नाम दर्ता गरिएको छ । गाउँ टोलमा...
लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको दोस्रो परिक्षण सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, १९ । रुकुम (पश्चिम) को मुसीकोट नगरपालिका वडा नम्बर ११ मा लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको दोश्रो तथा अन्तिम परिक्षण सम्पन्न भएको छ । नगरपालिकाको एक घर–एक धाराको अवधारणा अनुसार खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुकुम (पश्चिम) द्वारा निर्मित लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको दोश्रो तथा अन्तिम परिक्षण गरिएको हो । मुसीकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ अर्थात साबिकको भलाक्चा गाबिस १ र ४ नम्बर वडालाई लक्षित गरि निर्माण गरिएको आयोजनामा ६३ एम.एल.को पाएपबाट पानी तानिएको छ । खोलामाथीको गाउँमा ६३ एम.एल.को पाएपबाट पानी आउन...
प्लाष्टिक सर्जरी शिविरमा २५ जना विरामीको शल्यक्रिया
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, १९ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा संचालित प्लाष्टिक सर्जरी शिशिवरबाट विभिन्न प्रकृतिका २५ जना विरामीहरुको सफल शल्यक्रिया भएको छ । जन्मजात ओठ तथा तालु फाटेका, आगोले पोली शरिरको एक भाग अर्काे भाग संग जोडिएर शरिरीर संकुचन भएका विरामीहरुको शल्यक्रिया भएको हो । भौगोलिक विकटता र आर्थिक रुपले जिल्ला वाहिर गई उपचार गर्न नसक्ने विरामीहरुलाई लक्षित गरी ३ दिने निशुल्क शल्यक्रिया शिविर संचालन गरीएको थियो । चौरजहारी नगरपालिका रुकुमको आर्थिक सहयोग र कल्यानकारी अपांग सेवा संघ सल्यान र स्थानिय...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, १९ । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं. ६ देउता खोला स्थित एक घरमा आगलागि भएको छ । स्थानीय भक्त वहादुर घर्तीको घरमा आईतबार बेलुकी आगलागि भएको हो । एक तले खरले छाएको घरमा आगलागि हुँदा ५० हजार बराबरको क्षति भएको आगोलागि पिडित घर्तीले बताउनुभयो । घरमा रहेका लत्ता कपडा र अन्नपात गरी उक्त क्षति भएको बताईएको छ । स्थानीय बच्चा बच्चिले खेलिरहेको बेला घरमा आगलागि भएको त्यहाँबाट डिलवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । ५२ वर्षिय पिडित घर्ती अविवाहित हुनुहुन्छ भने उहाँले दैनिक ज्याला मजदुरी...
धनमाया स्मृति प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा मिलन खड्का
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक १८ । धनमाया स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल रुकुमको पहिलो साधारण सभा मुसीकोट खलंगामा सम्पन्न भएकोे छ । साधारणसभाले मिलन खड्काको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा जोखिमाया कठायत, महासचिवमा ईन्दिरा बिएम, कोषाध्यक्षमा मिना मल्ल रहनु भएको छ । साथै प्रतिष्ठानले १० सदस्यीय सल्लाहकार समिति पनि गठन गरेको छ । २०७४ साल भदौमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानले रुकुम(पश्चिम) र रुकुम(पुर्व) दुबै जिल्लामा काम गरिरहेको छ । सधारणसभामा प्रतिष्ठानले आफ्नो आर्थिक प्रतिबेदन...
बाँफिकोट कृषि शाखाले गहुँको वीउ बितरण थाल्यो
प्रचण्ड खत्री रुकुम पश्चिम, कात्तिक १८ । रुुकम(पश्चिम) बाँफिकोट गाउँपालिका कृषि शाखाले गाउँपालिकाका कृषकहरुलाई गहँुको वीउ बिरतण थालेको छ । गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अनुसार गहुँको वीउ बितरण थालिएको हो । शाखाले करिव ५० हजार मुल्य बराबरको १० क्विन्टल गहुँको वीउ बितरण गर्न लागेको छ । शनिबार पहिलो दिन गाउँपालिकाका ३० जना कृषकले ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको वीउ लिएको शाखा प्रमुख लोकेन्द्रबहादुर ओलीले बताउनुभयो । पुरानो गहुँको वीउबाट कम उत्पादन हुने भएकाले उन्नत जातको डब्लु के १२०४ जातको वीउ बितरण...
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १८ । रुकुम पश्चिमका दुई समूहले पहिलो पटक ब्लक मार्फत बीउ उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । मुसीकोट नगरपालिका–४, सोलाबाङस्थित खाद्यान्न बीउ उत्पादन महिला कृषक समूह र चौरजहारी नगरपालिका–१०, को समशितोष्ण उन्नत तरकारी बीउ उत्पादन सहकारीले ब्लक मार्फत उन्नत बीउ उत्पादनको प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् । समूहले गहुँको बीउ र सहकारीले रायोको उन्नत बीउ ब्लक मार्फत उत्पादन गर्न थालेको बताईएको छ । समूहले २५ रोपनी क्षेत्रफलमा ब्लक स्थापना गरी गहुँको उन्नत बीउ उत्पादन सुरुवात गरेको छ...
ब्यापारीहरु सचेत बन्दै
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १५ । नगरपालिकाले बजार अनुगमणलाई निरन्तरता दिएपछि रुकुम पश्चिमको आठबीसकोटका ब्यापारीहरु सचेत भएका छन् । सम्बन्धीत निकायले बजार अनुगमण नगर्दा म्याद गुज्रिएका सामाग्रीहरु समेत बिक्रि गरिरहेका ब्यापारीहरु नगरपालिकाले अनगुमणलाई निरन्तरता दिएपछि सचेत भएका हुन् । हाल बजारमा म्याद गुज्रिएका सामाग्री निकै कम मात्र फेला परेको नगरपालिकाले जनाएको छ । गत भाद्र महिनामा गरिएको अनुगमणका क्रममा करिब ३ लाख बढी मुल्यका म्याद गुज्रिएका सामाग्रीहरु भेटिएको र पछिल्लो समय पहिलेको तुलनामा कम मात्रामा म्याद...
नारायण ओली रुकुम पश्चिम, कात्तिक १५ । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ८ स्थित माथिल्लो आम्डाँडा विप्पे लेखमा विद्युतिय पम्पिङबाट खानेपानीको सफल परीक्षण गरिएको छ । सानिभेरी गाउँपालिकाको गौरवको आयोजना मानिएको उक्त खानेपानी आयोजना गाउँपालिकाको ३५ लाख, आशा प्रोजेक्टको १६ लाख र रुकुमेली समाज विकास केन्द्रको ४ लाख ५० हजार गरी कुल ५५ लाख ५० हजारको लगानिमा निर्माण गरिएको हो । १६ सय मिटर पाइपलाईन रहेको आयोजनामा भर्टिकल उचाई ४ सय १० मिटर रहेको छ भने ३ वटा १८ हजार लिटर क्षमताका ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै ७ हर्सपावरको १ वटा...
रुकुम पूर्वमा मेलमिलाप सम्बन्धि तालिम सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १४ । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा मेलमिलाप सम्बन्धि ४८ घण्टे आधारभुत तालिम सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग र ग्रामीण विकास तथा सामाजिक सुधार केन्द्रको आयोजनामा तालिम संचालन गरिएको थियो । वडा स्तरमा हुने विभिन्न बिबादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले तालिमको आयेजना गरिएको सिस्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ४८ घण्टे तालिममा मेलमिलापको महत्व, मेलमिलापले सामाजिक द्धन्द व्यवस्थापनमा पु¥याउँने सहयोग, मेलमिलापकर्ता हरुको भुमिका लगाएतका...
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १४ । हिन्दु नेपालीहरुको महान चाड तिहार नजिकिदै गर्दा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले वजार अनुगमन कार्य सुरु गरेको छ । उपभोक्ताहरुवाट वजारमा म्याद गुज्रियका समान विक्रिवितरण भैरहेको गुणासो वढे संगै उप प्रमुख राधा रोकाको संयोजकमा वजार अनुगमन कार्य सुरु भएको हो । अनुगमणको पहिलो दिन आज पुरानो वजार, न्युरोड र वसपार्क आसपासका फलफुल ,खाद्यकिराना गल्ला हार्डवयर कस्टमेटिक र, मधिरा पसलहरुको अनुगमण गरीएको छ । अनुगमणको क्रममा वजारमा चाउचाउ, तेल ,आईसक्रिम ,दालमोट,म्यादगएका समान फेलापरेको संयोजक राधा...
आठविसकोट नगरपालिकाद्धारा बजार अनुगमन
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १३ । रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिकाले सोमबार बजार अनुगमन गरेको छ । वजारमा हुने काले बजारी रोक्ने, म्याद सकिएका समान नष्ट गर्ने र व्यवसायी र उपभोक्तलाई सचेत गराउने उदेश्यले बजार अनुगमण गरिएको हो । नगरपालिकाले यस अघि पनि बजार अनुगमन गरेको थियो । अनुगमणका क्रममा १५ हजार बराबरको घरेलु मदिरा र ३८ हजार बराबरको म्याद गुज्रेका खाद्यान्नका सामाग्री बरामद गरिएको छ । सिम बजार र राडी बजारका गरि जम्मा १५६ वटा पसलहरुमा अनुगमन गरिएको थियो । बजार अनुगमण गर्न थाले देखी व्यवसायीहरु सचेत भएको र म्याद...
असहाय बालवालिकालाई जनप्रतिनिधिको सहयोग
सानीभेरी समाचार डेस्क, कात्तिक १३ । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि गाउँपालिका वडा नं. ७ का जनप्रतिनिधिले आफुले पाउने सेवा सुविधा कटाएर असहाय बालवालिकाहरुलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले आमा बुवा नभएका बालवालिकाहरुको शिक्षामा सहयोग गर्ने निर्णय गरेका हुन् । वडाध्यक्ष सहित ५ जना जनप्रतिनिधिले प्रत्येक महिना एक जनाले ३ तिन हजारका दरले बालवालिकालाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको वडा सदस्य भीमवहादुर डाँगीले जानकारी दिनुभयो । अव वार्षिक रुपमा एक जनप्रतिनिधिले ३६ हजार रकम बिद्यालयमा जम्मा गरिदिने छन्...
विदा नै नलेखी अमेरिका
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक १३ । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका–७, साँख स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य सेवा ऐन उलंघन गर्दै लामो समयदेखि विना कुनै जानकारी स्वास्थ्य चौकी नआउँदा समस्या भएको छ । अनमी गीता शाह गत असार २९ गतेदेखि स्वास्थ्य चौकी आउनुभएको छैन् । उहाँ अमेरिकामा रहनुभएको छ । जानकारी नै नगराई अमेरिका घुमघाम गर्न गएकी शाह लामो समयदेखि स्वास्थ्य चौकी अनुपस्थित हुनुहुन्छ । लामो समयदेखि एक जना अनमी उपस्थित नहुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भैरहेको स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक ११ । रुकुम(पश्चिम)मा समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमको सुरुवात भएको छ । देशव्यापि कार्यक्रम अन्तरगत आज जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बिच जिल्ला समन्वय समितिका उप–प्रमुख ईन्दिरा बिएमले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो । समुदायसंग मिलेर अपराध रोकथाम, विकृती र विसंगति विरुद्ध जनचेतना फैलाउने तथा सुरक्षा व्यवस्थापनमा जन सहयोग अभिवृद्धि गर्ने उद्श्यले जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम लागु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पश्चिम)का प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जानकारी...
चौरजहारी सडक खण्डको ५ किमी स्तरवृद्धिको काम अलपत्र
दुर्गा बिसी सल्यान, कात्तिक ११ । सल्यानको सल्लीवजार देखि रुकुम चौहरजारी जोड्ने सडक खण्ड अन्तरगत पर्ने ५ किलोमिटर सडक स्तरवृद्धिको काम वजेट अभावमा रोकिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङ्गले हेर्दै आएको उक्त सडक कर्णाली प्रदेश तथा सुर्खेत डिभिजनलाई हस्ताणतरण गरिएसंगै बजेट अभावमा अलपत्र परेको हो । काम भएको पैसा समेत भुक्तानी नपाउँदा ठेकेदारले काम गर्न कठिनाई भएको बताएका छन् । सडक हस्ताणतरण गरिए पनि टेण्डर भएको रकम नपठाउँदा काममा बाधा आएको सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । निर्माण कम्पनीले उक्त सडकको १ करोड वढि रकम भुक्तानी...
रुकुम कप फुटबलको चौथो संस्करण सुरु
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक ११ । रुकुम पश्चिम र पूर्वकै सर्वाधिक पुरस्कार राशिको रुकुम कप फुटबल सुरु भएको छ । समृद्ध समाज नेपाल रुकुम पूर्वले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको रुकुम कपको चौथो संस्करण शनिबारबाट सुरु भएको हो । कपको ५ नम्बर प्रदेशका सभामुख पुर्ण घर्तीले उद्घाटन गर्नुभएको थियो । रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका ५ रुकुमकोटमा रहेको सहिद स्मृति रुक्मिणि रंगशालामा १४ गतेसम्म चल्ने प्रतियोगीतामा रुकुम पूर्व र पश्चिमका ११ वटा फुटबल क्लवहरुले सहभागीता जनाएका छन् । प्रतियोगीताको बिजेताले नगद ८० हजार सहित कप, मेडल र...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक ११ । रुकुम पश्चिमको प्रमुख धार्मिक स्थल डिग्र शाईकुमारीको मन्दिरमा कोटीहोम महायज्ञ संचालन हुने भएको छ । राष्ट्र शान्ति, मानकल्याण, पितृ उद्धार, भूमिपुजन, बालवालिकाको सुस्वास्थ्य दिर्घायु एवं चिरञ्जिवी र सफलताको कामनाका लागि काटीहोम महायज्ञ संचालन हुन लागेको हो । कालीमाताको उपस्थितिमा शाइकुमारी भगवती देवी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले आयोजना गरेको महायज्ञ कार्तिक १८ गते सुरु भई मंसिर ८ गतेसम्म संचालन हुने छ । २१ दिन सम्म चल्ने कोटी होममा विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरु संचालन हुने छन्...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक १० । शिक्षक वेपत्ता पारेको अभियोगमा रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष सतसिङ बुढा सहित ५ जनालाई कारागार चलान गरिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुषालको इजलासले वडा अध्यक्ष बुढा सहित सोही विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जसबहादुर कामी, सोही ठाउँका रामराज झाँक्री, विनोद खत्री र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१०, का खिन्ते भनिने विकास बुढालाई समेत कारागार चलान गरेको अदालतका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । शुक्रबार बेलुकी ८ बजेसम्म भएको...
बजार अनुगमण शुन्य
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम, कात्तिक १० । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा बजार अनुगमण हुन सकेको छैन् । नगरपालिकामा उप प्रमुखको नेतृत्वमा बजार अनुगमन तथा मूल्य निर्धारण समिति बनेको एक बर्ष बढी बितिसक्दा सम्म पनि समिति मौन रहदा बजार अनुगमन हुन नसकेको हो । बजार अनुगमन नहुँदा एउटै समानको पनि पसलै पिच्छे फरक फरक मुल्य रहेको र म्याद गुज्रिएका समानहरु पनि बिक्री भैरहेको स्थानीयको गुनासो छ । स्थानीय जगविर केसीले अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको जानकारी नभएको बताउनुभयो । ‘उहाँले भन्नुभयो ब्यापारीले मनपरि मूल्य...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक ९ । रुकुम पूर्वको भुमे गाउँपालिका–६ सीसाघारीमा निर्माण भएको जिल्लाकै सबैभन्दा बढी क्षमताको लुकुम खोला (सीसाघारी) साना जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन गरिएको छ । आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्न सुरु गरेपछि बिहीबार एक औपचारिक कार्यक्रमकाबिच उद्घाटन गरिएको छ । आयोजना निर्माणमा करिब १० करोड आर्थीक सहयोग गरेका हङ्कङ निवासी सरमाइकल कादुरीले आयोजनाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । एकसय ३५ किलोवाट क्षमताको विद्युत् आयोजनाका लागि कादुरी एग्रिकल्चर एड एशोसिएसन ब्रिटिस गोर्खाज नेपाल संस्था मार्फत...
४८ लाख लागतमा सडक मर्मत
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम कात्तिक, ८ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा बर्षामा अबरुद्ध भएका सडकहरु मर्मत गरिएको छ । सडक बोर्डको ३० लाख र नगरपालिकाको १८ लाख गरि कुल ४८ लाख लागतमा सडक मर्मत गरिएको नगरपालिकाको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । नगरपालिकाका सुचना अधिकारी दिपलाल कुवरका अनुसार नगरपालिकामा गठन भएको नगर स्तरीय श्रम सहकारी मार्फत सडक मर्मत गरिएको हो । चौरजहारी नुवाकोट मुख्य सडक, प्रत्येक वडा कार्यालय पुग्ने सडक र अन्य सडकहरु मर्मत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नगरपालिका भित्रका सबै सडक गरेर १६ वटा सडक...
रुक्मिणी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको उद्घाटन
मदन बिसी रुकुम पूर्व, कात्तिक ८ । रुकुृम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ चोकबजारमा रुक्मिणी इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको उद्घाटन गरिएको छ । कम्पनीको एक कार्यक्रमकाबिच सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले रिवन काटेर उदघाटन गर्नुभएको हो । कृषि, पशुपालन, जडिबुटी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विभिन्न पेसा ब्यबसाय र सिपमुलक तालिमहरु संचालन गरि रोजगारीको वातावरण सृजना गर्ने उदेश्यले कम्पनि स्थापना गरिएको हो । कुल ३ करोडको लगानिमा कम्पनि खोलीएको अध्यक्ष दुर्गाबहादर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीका अध्यक्ष दुर्गा...
प्रगतिशिल खेलकुद प्रतियोगीता सम्पन्न
प्रचण्ड खत्री रुकुम पश्चिम, कात्तिक ८ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका ६ मग्मामा आयोजित प्रगतिशिल खेलकुद तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्तिक ४ गतेबाट सुरु भएको प्रतियोगीताको बुधबार समापन गरिएको हो । प्रतियोगीता अन्तरगत पुरुष भलिबल, सिंगारु नाच, छेलो, रसाकसि र लोकदोहोरी प्रतियोगीता संचालन गरिएको थियो । त्यस्तै साँस्कृतिक कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिएको थियो । जिल्लाका २५ वटा भलिबल समुले प्रतिस्पर्धा गरेको भलिबल प्रतियोगीतामा त्रिवेणि गाउँपालिका ८ प्रथम भएको छ । उसले नगद ६० हजार सहित मेडल र...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, ८ । जिल्लाकै पुरानो चौरजहारी विमानस्थल १७ महिना पछि पुनः सुचारु भएको छ । २०७४ सालको जेठबाट अवरुद्ध भएको विमानस्थल वुधबार बाट सुचारु भएको हो । विमान नभएको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमले उडान बन्द गरेको १७ महिना पछि चौरजहारीमा पुनः उडान सुरु भएको छ । हिजो बिहान नेपाल बायु सेवा निगमको विमानले काठमाडौं चौरजहारी नेपालगञ्ज उडान भरे संगै चौरहजारी विमानस्थल सुचारु भएको हो । अव यस विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमले हप्तामा दुई दिन उडान भर्ने चौरजहारी विमानस्थलका निमित्त स्टेशन इन्चार्ज सुरेन्द्र नेपालीले...
भूमेमा मौलिक साँस्कृतिक कला केन्द्रको उद्घाटन
जयमान बुढा मगर रुकुम पूर्व, कात्तिक ७ । रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिकामा मौलिक साँस्कृतिक कला केन्द्रको उद्घाटन गरिएको छ । भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरले बेनर खोलेर एक कार्यक्रमकाबिच मौलिक साँस्कृतिक कला केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो । मौलिक साँस्कृतिक कला केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पूर्वमा समेत दर्ता गरिएको मौलिक साँस्कृतिक कला केन्द्रका अध्यक्ष शिखर विश्वर्कमाले बताउनुभयो । ९ जनाको कार्यसमिति रहेकोमा उक्त कला केन्द्रको केन्द्र कार्यालय भूमे गाउँपालिका वडा नम्बर २ खाबाङ बगरमा रहने अध्यक्ष...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, ७ । रुकुम पश्चिममा युवाहरुको सक्रियतामा रंगशाला निर्माण हुने भएको छ । जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका ६ मग्माका युवाहरु गाउँमा रंगशाला निर्माणमा जुटेका छन् । कवर्डहल र मैदान सहितको रंगशाला निर्माणका लागि मग्माका ९ जना युवाहरु यतिबेला सहयोग संकलनमा व्यस्त छन् । खेलकुदको विकासका लागि भन्दै आफुहरु रंगशाला निर्माणको अभियानमा जुटेको रंगशाला निर्माण अभियानको नेतृत्व गरिरहेका बाँफिकोट ६ मग्माका देवराज खनालले बताउनुभयो । रंगशाला निर्माणका लागि देश तथा विदेशबाट आर्थिक संकलन भैरहेको छ...
आगलागी पिडीतलाई राहत
सर्जना कार्की रुकुम पूर्व, कात्तिक ७ । रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिका ५ मा आगलागी पीडीत ज्ञान प्रसाद वुढाको परीवारलाई राहत वितरण गरीएको छ । सिस्ने गाउँपालीकाले वुढाको परीवारलाई १ लाखसम्मको निशुल्क उपचार सेवाको व्यवस्था समेत गरीदीएको गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बरालले जानकारी दीनुभयो । उहाँका अनुशार मंगलबार वुढाको गाउँमै पुगी २० हजार बराबरको कपडा, साबुन, लाइट लगायतका अन्य सामानहरु वितरण गरीएको छ । जाडो मौसम शुरु हुदै गर्दा स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी स्विटर ३, धोति ३, म्याक्सि ३, खास्टो ३ र अन्य सरसफाइका सामानहरु उपलब्ध गराइएको हो...
बालुवाचौर, खोलिबड्गाउँ हुदै स्यार्पु जोड्ने सडक सुचारु भएन
प्रचण्ड खत्री रुकुम पश्चिम, कात्तिक ६ । रुकुम(पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिका ४ मा पर्ने बालुवाचौर, खोलिबड्गाउँ हुँदै स्यार्पु जोड्ने सडक निर्माण भएको दुई बर्ष बिति सक्दा पनि संचालनमा आउन सकेको छैन । २०७३ साल माघमा निर्माण भएको सडक मर्मतमा कसैको चासो नदिदा उक्त सडकमा गाडी गुड्न नसकेका हुन् । स्यार्पुताल सम्म जोड्ने उक्त आठ किलोमिटर सडकमा गाडि गुड्नुको सट्टा मर्मत हुन सकेको छैन । सडक निर्माणको लागी भनेर साविकको बाँफिकोट गाविसले २ लाख, मारुकिता कम्पनी(जाईका)ले २ लाख, बाँफिकोट गाउँपालिकाकाले २० लाख र ४ नम्वर वडाले ४ लाख गरि २८ लाख बजेड...
मदन बिसी रुकुम पूर्व, कात्तिक ६ । रुकुम कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको चौथो संस्करण यहि कात्तिक १० देखि १४ गते सम्म हुने भएको छ । समृद्ध समाज नेपाले हरेक बर्ष गर्दै आएको प्रतियोगिता रुकुम पूर्व सिस्ने गाउँपालिकाको सहिद स्मृति रुक्मिणी रंगशाला रुकुमकोटमा संचालन हुँदैछ । रुकुम पुर्ब सहित रुकुम पश्चिम, रोल्पा, दाङ, सल्यान, जाजरकोट लगाएत जिल्लाका फुटबल क्लबहरुले सहभागी जनाउँदै आएको प्रतियोगितामा यस वर्षबाट नेपाली सेना, संशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीले समेत सहभागीता जनाउन पाउने समृद्ध समाज रुकुम पुर्वका खेल संयोजक तिलक रेउले ‘भाष्करले...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक ५ । रुकुम(पश्चिम)को बा“फिकोट गाउ“पालिका–६, मग्मामा दुई वटा कार्यक्रम एकै साथ सुरु गरिएपछि तनाव उत्पन्न भएको छ । प्रगतिशिल युवा क्लव र लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले एकै पटक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरेपछि समस्या भएको हो । कात्तिक ३ गते उद्घाटन गरिएको लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको कार्यक्रम प्रहरीले अघि बढ्न दिएको छैन । गाउ“पालिकाको अनुरोधमा प्रहरीले संघले आयोजना गरेको कार्यक्रम रोकेको हो । गाउ“पालिकास“ग अनुमति नलिई, परामर्श र सल्लाह नै नगरी जवरजस्त ढंगले कार्यक्रम जुधाउने र निहु खोज्न थालिएपछि...
सानीभेरी समाचार डेस्क कात्तिक, ५ । कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क वहादुर खत्रीले जनताका सामु शिर निहुरिने काम आफुहरुले नगर्ने बताउनुभएको छ । यदि कहि कतै त्यस्तो हुन गएमा खवरदारी गर्न उहाँले आम जनतालाई आग्रह समेत गर्नुभयो । रंगशाला निर्माणका लागि सहयोग जुटाउने उद्ेश्यले रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका ६ मग्मामा आयोजित खेलकुद तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खत्रीले यस्तो बताउनुभयो । समग्र कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको उहाँले...
फरार ट्याक्टर चालक पक्राउ
सानीभेरी समाचार डेस्क कार्तिक ३, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि गाउँपालिका ७ भुर्तिवाङमा गत असोज ३१ गते भएको ट्याक्टर दुर्घटनापछि फरार ट्याक्टर चालक पक्राउ परेका छन् । ट्याक्टर चालक त्रिवेणि ९ का २६ वर्षिय शेरवहादुर बस्नेतलाई लुकि छिपि बसेको अवस्थामा जिल्लाको नुवाकोटबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । रा १ त १६०२ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा त्रिवेणि १ रुघाँका २७ वर्षिय नविन केसी र त्रिवेणि ६ का १६ वर्षिय राम वहादुर ओली घाईते हुनुभएको थियो भने स्थानीय हिरासिंह डाँगीको...
बालिकालाई जवरजस्ती करणि गर्न खोज्ने एक युवक पक्राउ
सानीभेरी समाचार डेस्क कार्तिक ३, रुकुम पश्चिम । १४ वर्षिया एक बालिकालाई जवजस्ती करणि गर्न खोज्ने एक युवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमले पक्राउ गरेको छ । १४ वर्षिया बालिकालाई जवरजस्ती करिणि गर्न खोज्ने चौरजहारी नगरपालिकाका ५ लहरे सिमलका २० वर्षिय समिर केसी पक्राउ परेका हुन् । यस घटनामा संलग्न अर्का एक युवक भने फरार रहेको र खोजि कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । चौरजहारी ५ कै १९ वर्षिय तिलक केसी फरार रहेका छन् । उनिहरुले गत असोज २९...
सानीभेरी समाचार डेस्क कार्तिक ३, रुकुम पश्चिम । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि गाउँपालिका १ रुघाँमा कार्तिक १ गते साँझ भएको चक्कु प्रहार घटनामा संलग्न ७ जना पक्राउ परेका छन् । त्रिवेणि गाउँपालिका २ का २८ वर्षिय कृष्ण ओलीलाई चक्कु प्रहार गरी घाईते बनाउँने सात जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काका अनुसार घटनाका मुख्य अभियुक्त त्रिवेणि गाउँपालिका वडा नम्बर १ का रमेश खड्का सहित घटनामा संलग्न वडा नं. १ कै रेशम पुनमगर, जीवन पुनमगर, समिर ओली, यमन पुनमगर, कमल पुन र संगम भनिने बिक्रम...
आगलागिबाट २ लाख ५० हजारको क्षेति, एक महिला घाईते
सर्जना कार्की कार्तिक ३, रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको एक घरमा आगलागि भएको छ । जिल्लाको सिस्ने गाउँपालिका पाँच रुमालवाराको एक घरमा आगलागि हुँदा २ लाख ५० हजार बराबरको क्षति भएको छ । स्थानीय ज्ञानु बुढाको घरमा गयराति ११ बजेको समयमा आगलागि भएको प्रहरीले जनाएको छ । आगलागीबाट ज्ञानु वुढाकी श्रीमति ३६ वर्षिया मोतिकला वुढा जलेर घाइते हुनुभएको छ । उहाँको हात, खुट्टा र ढाड पोलिएको छ । बुढालाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज पठाईएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । आगलागिबाट खरले छाएको एक तलाको घरमा पुर्ण रुपमा क्षेति पुगेको बताईएको...
जयमान बुढामगर असोज ३१, रुकुम पूर्व । रुकुम पूर्वको भूमे गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नम्बर २ को खाबाङ बगरमा सारिएको छ । गत वर्षको पौष ८ गते बसेको गाउँसभाले गाउँपालिकाको केन्द्र खाबाङ बगरमा तोकेको थियो । खावाङमा गाउँ कार्यपालिकाको भवन निर्माण भएपछि कार्यालय सिमाबाट खावाङमा सारिएको हो । मंगलबार बसेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले खाबाङ बगरबाट सेवा दिने निर्णय गरे अनुसार कार्यालय खावाङ बगरमा सारिएको गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढाले जानकारी दिनुभभयो । गाउँपालिकाले खावाङमा आफ्नै भवन निर्माण गरिसकेको छ । खाबाङ...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ३१ । रुकुम(पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नं. १० फेरा झुलाको एक घरमा आगलागि भएको छ । स्थानीय शसिराम खत्रीको घरमा गयराति आगलागि हुँदा ४ लाख बराबरको क्षति भएको छ । राति साढे १ बजेको समयमा आगलागि हुँदा अन्न पात, भाँडा कुडा, लत्ता कपडा र नगद एक लाख गरी ४ लाख बराबरको क्षति भएको वडा सदस्य रामवहादुर जैसीले जानकारी दिनुभयो । आगलागि पिडित खत्रीका श्रीमान श्रीमतिले भारतबाट कमाएर ल्याएको नगद जलेको बताईएको छ । खत्री दम्पति दशैं मनाउँनका लागि केहि दिन अघि मात्र आएको थियो । खरले छाएको घरमा...
बाबुको स्मृतिमा सार्वजानिक मञ्च निर्माण
नारायण ओली रुकुम पश्चिम, असोज ३० । रुकुम(पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिका वडा नं ११ मा समाजसेवी भुपालसिङ ओलीले आप्ना बुवाको स्मृतिमा मन्च निर्माण गर्नुभएको छ । ओलीले आफ्ना बुवा नरवीर ओलीको स्मृतिमा काफलबोटमा रहेको शिव आधारभूत विद्यालयको प्राङ्गनमा सार्वजानिक मञ्च निर्माण गर्नुभएको हो । स्वर्गीय नरवीर ओलीको दोस्रो स्मृति सभाको अबसरमा एक कार्यक्रमकाबिच मंचको उद्घाटन तथा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । ओलीले करिब २ लाख ५० हजार बराबरको लगानीमा उक्त मञ्चको निर्माण गर्नुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता समेत रहेका ओलीले...
दुई घण्टा मात्रै मदिरा बेच्न पाउने
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम, असोज ३० । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा अब दुई घण्टा मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाइने छ । १५ गते बसेको नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय अनुसार मदिरा बेचबिखनको लाइसेन्स भएका ब्यापारीले दुई घण्टा मात्रै मदिरा बेचबिखन गर्न पाउने भएका हुन् । नगर कार्यपालिकाको यो निर्णय कार्यन्वयनमा आएसँगै लाइसेन्स भएकोले मात्रै साँझ ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म मदिरा बेचबिखन गर्न पाइने छ । निर्णय कार्यन्वयनको लागि इलाका प्रहरी कार्यालय र मातहतका निकायहरुसँग समन्वय गरेर सार्वजनिक सुचना प्रकाशन, अन्तरक्रिया, जनचेतना मूलक...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ३० । रुकुम पूर्वमा रहेको जामाखोला लघु जलविद्युत आयोजना पहिरोले पुरेको छ । सिस्ने गाउँपालिका–८, धपेमा रहेको जामाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन गृह माथिबाट खसेको पहिरोले पुरेको हो । आज विहान माथिबाट आएको पहिरोले आयोजनामा ठूलो क्षेती पु¥याएको छ । पहिरोमा परी स्थानीय २० बर्षीया जेनुका गौतम घाइते हुनुभएको छ । विद्युत अपरेटरकी श्रीमती गौतम श्रीमानलाई सघाउन विद्युत गृह जानुभएको थियो । अपरेटर उहाँको श्रीमान गणेश पौडेल भने भागेर बच्नुभएको थियो । घाइते गौतमलाई उपचारको...
बृद्धको भिरबाट लडेर मृत्यु
श्रीकृष्ण वुढा रुकुम पूर्व, असोज ३० । रुकुम पूर्बको भुमे गाउँपालिका ५ डालिबाङमा एक बृद्धको भिरबाट लडेर मृत्युु भएको छ । ८० बर्षीय टाउके बिकको खरिकोना भिरबाट लडेर मृत्यु भएको हो । यहि २६ गतेदेखि घरबाट बेपत्ता भएका बिक आइतबार बेलुकी मृत अबस्थामा फेला पर्नुभएको हो । घरबाट सम्पर्क बिहिन भएका उनलाई स्थानियले खोजि गर्दा खरिकोना भिरको छेउमा मृत अबस्थामा फेला पारेका थिए । बाटोदेखि करिब १५ सय मिटर तल खसेका बिकको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको बताईएको छ । पछिल्लो केही समयदेखि बिकको मानसिक असुन्तलन ठिक नभएको पारिबारिक स्रोतले...
एम्बुलेन्स खरिदमा ढिलाइ
डिल्लीबहादुर खत्री रुकुम पश्चिम, असोज २८ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले अझै सम्म दुई एम्बुलेन्स खरिद गर्न सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को बजेटबाट ३ वटा एम्बुलेन्स खरिद गर्ने भनी बजेट निति तथा कार्यक्रम पारित गरिए पनि आर्थिक बर्षको अन्त्य भई २०७५÷०७६ को ३ महिना बितिसक्दा सम्म एक वटा मात्रै एम्बुलेन्स खरिद गरिएको छ । बाँकी दुई एम्बुलेन्स भने नगरपालिकामा कहिले आउँछन् स्वंम नगरपालिकाको कार्यालय नै अनविज्ञ छ । नगरपालिकाले पहिलो नगर सभाबाट प्रति एम्बुलेन्स २२ लाखको दरले खरिद गर्ने गरि ६६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २८ । संघीयता आएपछि नयाँ बनेको रुकुम(पूर्व)मा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । राज्य पुनर्संचनाका क्रममा देशकै कान्छो अर्थात ७७ औं जिल्ला बनेको रुकुम पूर्वको पर्यटन विकासका लागि भन्दै आगामि मंसिरमा पर्यटन महोत्सव हुँदै छ । चेम्बर अफ कमर्स रुकुम पूर्वले आगामि मंसिर २० देखि पौष १ गतेसम्म रुकुम पूर्व पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सवको आयोजना गरेको छ । नयाँ बनेको जिल्लालाई देशभरीमै चिनाउँने र जिल्लामा रहेका पर्यटकिय स्थलहरुको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन प्रद्र्धनका लागि महोत्सव आयोजना गरिएको...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २७ । जिल्ला कारागार रुकुम पश्चिममा क्षमता भन्दा चार गुणा बढी कैदी बन्दी रहेका छन् । कारागारको क्षमता २५ जनाको भएपनि हाल कारागारमा ९८ जना कैदी बन्दीहरु छन् । विभिन्न अपराधिक कृयाकलापमा संलग्न ९२ पुरुष र ६ महिला गरी ९८ जनाले कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका छन् । जसमा कर्तव्य ज्यानका ३०, ज्यान मार्ने उद्योगका ९, जबरजस्ती करणीका २४, डाका चोरीका २, खोटाचलनका २, अप्राकृतिक मैथुनका १ र लागुऔषधका ६ जना रहेका छन् । त्यस्तै जबरजस्ती करणी उद्योगका ४, गर्भपतनका २, अपहरण तथा शरिर बन्धकका २, सवारी ज्यानका ५, बैदेशिक...
भूमेमा अर्गानिक कृषि अनुसन्धान केन्द्र
जयमान वुढा मगर रुकुम पूर्व, असोज २६ । रुकुम(पूर्व)को भूमे गाउँपालिकाले कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुका साथै प्रत्येक बीउमा कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । विभिन्न खालका खाद्यान्न अन्न, फलफूल, तरकारीको अनुसन्धान गरि कुन ठाउँमा कस्तो खालका कृषि उपज उत्पादन हुन्छ भनि पत्ता लगाउँनका लागि मारिङमा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिएको छ । कृषकले उक्त ठाउँबाट कृषि प्राविधिकहरुको सल्लाह लिएर आफ्नो खेतमा कस्तो बाली उत्पादन हुन्छ भनेर थाहा पाउँन सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष रामसुर बुढाले बताउनुभयो । वडा नम्बर २ र ७ मा...
चाडबाडमा हुने महँगी र कालोबजारीलाई रोक्न बजार अनुगमण
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २६ । नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैं सुरु भएसंगै बजारमा हुने कालोबजारी र महँगीलाई रोक्न मुसीकोट नगरपालिकाले बजार अनुगमण थालेको छ । चाडबाडका बेलामा हुन सक्ने सम्भावित कालोबजारी र महँगीलाई लक्षित गरेर नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका बजारहरुमा अनुगमण थालेको हो । नगरपालिकाले तीन दिन देखि लगातार बजार अनुगमण गरिरहेको छ । म्याद गुज्रिएका सामान, मुल्य सुचि, साईनबोर्ड भए नभएको, दर्ता तथा नबिकरण भए नभएको लगाएतको अनुगमण भैरहेको मुसीकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा अनुगमण समितिका संयोजक...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २६ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पश्चिम)ले अनुसन्धानमा ९३ प्रतिशत सफल भएको दाबी गरेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा जिल्लामा भएका अपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा ९३ प्रतिशत सफल भएको प्रहरीले दाबी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको श्रावण देखि हालसम्मको करिब ३ महिनामा ३२ वटा अपराधिक घटना भएकामा ९३ प्रतिशत अनुसन्धान सफल रहेको बताउनुभयो । जिल्लामा गत श्रावण देखि हालसम्म कर्तव्य ज्यानका १, चोरीका ९, लागु औषधका ३, केहि सार्वजनिक अपराधका ४,...
रुकुम पश्चिममा पनि ६३ औं प्रहरी दिवस मनाईयो
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २५ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरीले कुनै सम्झौता गर्न नहुँनेमा रुकुम(पश्चिम)का सरोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । केहि घटना क्रममा प्रहरीको समेत मिलेमतो देखिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै सरोकारवालाले कानुनका रक्षक प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै कसर राख्न नहुँने बताएका थिए । ६३ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पश्चिम)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रहरीले नै शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने मामलामा सम्झौता गरेमा शान्ति सुरक्षा कायम नहुँनुका साथै पिडितले समेत न्याय...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २५ । जवरजस्ती करणीको आरोपमा रुकुम पश्चिममा एक युवक पक्राउ परेका छन् । रुकुम पूर्वको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका वडा नं. ५ हुकामका ३० वर्षिय सुबिन्द्र घर्तीलाई प्रहरीले जवरजस्ती करणीको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । घर्तीले मुसीकोट नगरपालिका १ को चन्दननाथ टोलमा कोठा भाडामा बस्दै आईरहेकी बाँफिकोट गाउँपालिकाकी ३० वर्षिया एक महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको प्रहरीले जनाएको छ । घर्तीले सोमबार राति अन्दाजी १२ बजेतिर ढोकाको चुकुल खोली भित्र प्रवेश गरेर सुतिराखेको अवस्थामा कुटपिट गरी जबरजस्ती करणी...
अनाथ बालबालिकालाई कपडा वितरण
डिल्लीराज बिश्वकर्मा रुकुम पश्चिम, असोज २४ । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकामा दसैँको अवसरमा अनाथ बालबालिकालाई कपडा वितरण तथा चियापान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सिस्ने बाल गृह आठविसकोटले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा नगरपालिका भित्रका ८ जना अनाथ बालबालिकालाई कपडा वितरण गरिएको हो । आठविसकोट नगरपालिका राडीमा घर भई हाल अमेरीकामा बस्दै आउनु भएकी जयन्ती थापाको आर्थिक सहयोगमा १५ हजार १ सय १४ रुपैया बराबरको अनाथ बालकालिकालाई न्यानो कपडा वितरण गरिएको हो । त्यस्तै अनाथ बालबालिकालाई यसपालिको दसैँ मान्न सहज होस भनी आठविसकोट...
मिक नेपालद्धारा अभ्यास पुस्तिका वितरण
जयमान वुढा मगर रुकुम पूर्व, असोज २४ । रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिका २ मा रहेको हिमालय आधारभूत विद्यालय गाबाङमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई अभ्यास पुस्तिका वितरण गरिएको छ । मंगलबार एक कार्यक्रमकाबिच मिक नेपाल रुकुमले गरिव तथा जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि सहयोग अभ्यास पुस्तिका वितरण गरेको हो । मिक नेपालले २ सय १६ ओटा पुस्तिका उपलब्ध गराएकोमा ३४ जना विद्यार्थीलाई ६÷६ ओटाको दरले वितरण गरिएको प्राध्यानाध्यपक झगबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो । मिक नेपाल संस्थाले विद्यालयमा बाल कक्षा विद्यार्थीका लागि खेलौना सामाग्री, शिकाई...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २४ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकामा भिरबाट लडेर एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । मुसिकोट नगरपालिका १२ पितिवाङका ५५ वर्षीय भिमबहादुर रोकायको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । सोमबार बेलुकी घर नजिकै लडेर रोकाय गम्भीर घाइते हुनुभएको थियो । घाइते रोकायको जिल्ला अस्पताल सल्लेमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रकुम पश्चिमले जनाएको छ...
शार्बजनिक शौचालय बिहिन नगरपालिका
डिल्ली बहादुर खत्री रुकुम पश्चिम, असोज २३ । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा एक वटा पनि सार्वजनिक शौचालय छैन । बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय नहुँदा सामान किनमेल गर्न बजार पुगेका सर्वसाधारणलाई दिसापिसाब गर्न समस्या हुने गरेको छ । यस नगरपालिकाले पहिलो नगर सभाबाट नै नगर भित्रका सबै बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक सौचालय निर्माण गरि एक जनालाई प्रति सौचालय रोजगार प्रदान गर्ने निति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि उक्त निति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने तर्फ भने नगरपालिका मौन रहेको छ । सौचालय बनाउने...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २३ । रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिकामा गोरुले हान्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ । मुसीकोट नगरपालिका–९, घोरनेटीका ५२ वर्षीय केवलसिङ खड्काको आफैले पालेको गोरुले हान्दा मृत्यु भएको हो । आफ्नै गोरु लिएर छिमेकी झकप्रसाद खड्काको बारी जोत्न गएका उहाँलाई सोमबार बिहान ८ बजेतिर गोरुले हानेको थियो । गोरुले हानेपछि घरमा पु¥याउँदा खड्काको मृत्यु भैसकेको बताईएको छ । स्वास्थ्यकर्मी उहाँको घर पुग्नु अगावै उहाँको मृत्यु भएको वडा अध्यक्ष नबीन ओलीले जानकारी दिनुभयो । खड्काको शव जिल्ला अस्पताल सल्लेमा...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २२ । रुकुम(पश्चिम)को सल्ले विमानस्थल तीन महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ । विमानस्थलमा नेपाल वायु सेवा निगमको जहाजले आइतबार देखि सेवा सुरु गरेको हो । निगमको जहाजले काठमाडौं–रुकुम–नेपालगञ्ज उडान गरेर सेवा सुरु गरेको छ । जहाजले काठमाडौं र नेपालगञ्ज गरी पुरानैै तालिका अनुसार सातामा एक÷एक दिन उडान भर्ने निगम सल्लेका निमित्त प्रमुख रमेश पोखरेलले बताउँनुभयो । उहाँका अनुसार जहाजले आइतबार काठमाडौं–रुकुम–नेपाजगञ्ज र सोमबार नेपालगञ्ज–रुकुम–काठमाडौं उडान भर्ने छ । यसअघि दुर्गम ठाउँमा...
चुनवाङलाई लसुनको पकेट क्षेत्र बनाईदै
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २१ । रुकुम पूर्वको चुनवाङमा कृषि उत्पादनलाई ब्यवसायिक रुपमा अघि बढाउन पहल थालिएको छ । स्थानीय सरकारको पहलमा भुमे गाउँपालिका ९ चुनवाङलाई लसुन, आलु र कागतीको पकेट क्षेत्र बनाउने तयारी थालिएको हो । यो बर्ष लसुन उत्पादन बृद्धि गर्न बीउमा अनुदान दिने तयारी गरिएको छ । वडा सरकारको निर्णय अनुसार झण्डै पचास क्विन्टल बीउ अनुदानमा दिने तयारी गरिएको छ । ‘लसुनको वीउ साह्रै महंगो भयो भन्ने किसानको गुनासो आयो’– वडाध्यक्ष प्रवेश पुनले भन्नुभयो– ‘प्रतिकेजी ५० रुपैयाँ किसानले तिर्ने र बाँकी...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज २१ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाका बाढि, पहिरो पिडितलाई राहात वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाको पहलमा एक गैरसरकारी संस्थाले नगरपालिकाका दुई सय २८ घर परिवारलाई पाँच हजारका दरले राहात सामाग्री वितरण गरेको हो । नेपाल ख्रीष्टिय राहत सेवा, भनीमण्डल, ललितपुरले अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सामरिटन पर्स क्यानडाको समन्वयमा खाद्यान्न तथा गैर खाद्यान्नका सामाग्रीहरु वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका जनप्रनिधि र कर्मचारीको रोहबरमा प्रतिपरिवार २५ केजि चामल, तीन केजि दाल, एक...
वडा कार्यालयद्धारा सरसफाइ कार्यक्रम संचालन
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २० । सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकामा बजार सरसफाइ अभियान संचालन गरिएको छ । वडा नम्बर ४ र ५ तथा बाँझकोट स्वास्थ्यचौैकी च्युराको संयुक्त आयोजनामा सरसफाइ अभियान थालिएको हो । वडा कार्यालय र स्वास्थ्चौकीको पहलमा ५ नम्बर वडाको नाथेखोला बजार, च्युरा बजार र ४ नम्बर वडा कार्यालय रहेको गर्चेबजार सरसफाइ गरिएको ४ नम्बर वडा अध्यक्ष मोमत रोकाले जानकारी दिनुभयो । ‘स्वच्छ बजार घर आगन सरसफाइ गरौं, स्वस्थ जीवन बनाऊ’ भन्ने नाराका साथ जनप्रतिनिधि, वडा कार्यालयका कर्मचारी,...
कला संस्कृतिलाई प्रबद्र्धन गर्न कला केन्द्रको स्थापना
नारायण ओली सिम्ली, असोज २० । रुकुम(पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिकामा कला संस्कृतिको संरक्षणका लागि कला केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । कला, संस्कृति, पर्यटन प्रबद्र्धन मञ्च सानीभेरीले गाउँपालिकाको कला संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नका लागि कला केन्द्र स्थापना गरेको हो । पुराना कला, संस्कृति लोप हुदै गएकाले त्यसलाई जोगाई राख्न भेरीदह कला केन्द्र स्थापना गरिएको छ । पुराना लोकभाका तथा नाच ख्याली, ठाडिभाका, सिंगारु तथा पैसेरु लगाएतको संरक्षणका लागि कला केन्द्र स्थापना गरिएको कला संस्कृति पर्यटन प्रबद्र्धन मञ्चका अध्यक्ष अनिल...
ट्याक्टरबाट खसेर महिलाको मृत्यु
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, २० । रुकुम पूर्वमा ट्याक्टरबाट खसेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ । रुकुम पश्चिमबाट पूर्वको भुमे गाउँपालिका २ काक्रि तर्फ जादै गरेको म १ त ७९७ नम्बरको ट्याक्टरबाट खस्दा भुमे दुई सीमचौरकी २४ वर्षिय सुनकुमारी घर्तिको मृत्यु भएको हो । भुमे गाउँपालिका २ को सीतचौर भन्ने ठाउँमा ट्याक्टरबाट खसेर गम्भिर घाइते भएकी घर्तिको उपचारको क्रममा रुकुमकोटमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । तिव्र गतिमा रहेको ट्याक्टरबाट खसेकी घर्तिलाइ अगाडीको पाङ्ग्राले किचेको थियो । ट्याक्टर र ट्याक्टर चालक...
मलेसियामा एक रुकुमेलीको मृत्यु
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज १९ । रोजगारीको शिलशिलामा मलेसिया गएका एक रुकुमेलीको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका वडा नं. ९ का हरि शाही आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेको बताईएको छ । केलाङ सेन्टर मेरु नजिकै एल.एस.के. म्याटर्स वल्र्ड कम्पनीमा काम गर्ने शाही आफ्नै कोठामा सुतेको अवस्थामा मृत फेला परेको उहाँसंगै रहेका दिनेश नेपालीले जानकारी दिनुभयो । राती १२ बजे सम्म काम गरेर सामान्य अवस्थामा कोठा फर्किएका शाही बिहान सुतेकै अवस्थामा मृत फेला परेको नेपालीको भनाई छ । बेलुकी अबेर सम्म कम्पनिमा काम गरेर...
आठविसकोटमा डिजिटल बोर्डबाट पढाई सुरु
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज १९ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा डिजिटल बोर्ड मार्फत पढाई सुरु भएको छ । नगरपालिकाका तीन वटा बिद्यालयमा हाल डिजिटल बोर्डबाट पढाई भैरहेको छ । नगरपालिकाले तीन वडाका तीन वटा बिद्यालयमा डिजिटल बोर्डबाट पठन पाठन सुरु गरेको हो । वडा नम्बर तीन स्यालाखदीको हिमालय मावि खदी, वडा नं. पाँच गोतामकोटको सरस्वति मावि मिग्रि र वडा नम्बर ९ राडिको सहिद स्मृति नमुना माविमा हाल डिजिटल बोर्डबाट पढाई भैरहेको छ । प्रविधिको प्रयोग गरी शिक्षाको गुणस्तरमा गुणात्मक बृद्धि गर्ने उद्ेश्यले हाललाई परिक्षणका रुपमा तीन...
डिल्लीवहादुर खत्री चौरजहारी, असोज १९ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा जनसत्ताका ४५ वटा मुद्दा परेका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जन सरकारमा रजिष्ट्रेसन भएका घरजग्गा सम्बन्धिका ४५ वटा मुद्दा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेका हुन् । देश शान्ति प्रक्रियामा गएको १ दशक बढी भइसक्दा पनि राज्यले माओवादी जनसत्ता सम्बन्धी मुद्दा टुङ्गयाउन नसकेको समयमा गत वर्ष स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो । स्थानीय चुनाव भई जनप्रतिनिधि आए...
घर आगलागी हुँदा ९ लाख बराबर क्षेती
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १८ । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका वडा नम्बर ७ नाथिगाडमा रहेको एक घर आगलागी हुँदा ९ लाख बराबरको क्षेती भएको छ । स्थानिय तेजबहादुर भण्डारीको घरमा आज बिहान आगलागी हुँदा ९ लाख २१ हजार ३ सय ९५ बराबरको क्षेती भएको हो । आगलागीबाट एकलाख नगत सहित अन्नपात, भाँडाकुडा, लत्ताकपडा सबै जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ । बिद्युतको तार सट भएर बिहान ८ बजेतिर घरमा आगो लागेको धाउने प्रहरी चौकी इञ्चार्ज निलम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । घरमा कोहि नभएको समयमा आगलागी भएको कारण कुनैपनि सामान जोगाउन नसकिएको पिडित...
खुला आकाश मुनि पठन पाठन
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १८ । रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका ५ गोतामकोटको मिग्रिमा रहेको सरस्वति आधारभुत विद्यालयका बिद्यार्थी खुला आकास मुनि बसेर पढ्न बाध्य भएका छन् । कक्षा कोठाको अभावमा बिद्यार्थीलाई खुला आकास मुनि बसालेर पठन पाठन भैरहेको बिद्यालयले जनाएको छ । बिद्यार्थी संख्या धेरै भएपछि कक्षा कोठाको अभाव भएको बिद्यालयका शिक्षक दलवहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो । कक्षा कोठाको अभावमा खुला ठाउँमा बसालेर पढाउँदा विभिन्न समस्याहरु देखिने गरेको उहाँको भनाई छ । उहाँका अनुसार खुला ठाउँमा राखेर पढाउँदा...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १८ । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि गाउँपालिकाको कार्यालयमा लागेको ताला खुलेको छ । खानेपानीको माग गर्दै वडा नम्बर २ को वेतखोलावासीले लगाएको ताला खुलेको हो । आफुहरुले वर्षौ देखि उपभोग गर्दै आएको पानी दुई नम्बर वडाकै चिन्छरे टोलका स्थानीयले पाईप काटेर अवरुद्ध पारीदिएकाले पानीको आपुर्ति सुचारु गरिदिन माग गर्दै वेतखोलावासीले बुधबार बिहान गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । बेतखोला टोलको मुनि रहेको मुलापानीबाट आफ्नो टोलमा ल्याईएको पानी बेतखोलावासीले बन्द गरिदिएपछि त्यसको...
आठविसकोटमा काँग्रेसको पार्टी कार्यालय स्थापना
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १७ । रुकुम(पश्चिम)को आठवीसकोट नगरपालिकामा नेपाली काँग्रसको पार्टी कार्यालय स्थापना गरिएको छ । एक औपचारीक कार्यक्रमकाबिच पार्टीको नगर कार्यालयको उद्धघाटन गरिएको हो । आठविसकोट ९ राडीमा रहेको कार्यालय उद्धघाटन कार्यक्रममा बोल्दै छायाँ सरकारका नगर प्रमुख धिरेन्द्र बटालाले अहिलेको सरकाले जनताको आवश्यकता भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ अनुसार काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ । नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्नको लागि काम गरिरहेकाले त्यसलाई रोक्न उहाँले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो...
कार्यक्रम सकिएकोप्रति सरोकारवाला चिन्तित
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १७ । रुकुममा सञ्चालित संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय क्षमता विकास कार्यक्रम सकिएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मानव अधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) नेपालद्वारा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा संचालित क्षमता विकास कार्यक्रम सकिएको प्रति चिन्तित बनेका हुन् । आज मुसिकोटमा भएको सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै सहभागीहरुले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे द्वन्द्वपीडितहरुलाई सहजिकरण गरिरहेको अवस्थामा सत्य निरुपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता...
रुकुम पूर्वमा बजार अनुगमण
सर्जना कार्की रुकुम पूर्व असोज, १७ । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका वडा नं. ५ र ६ रुकुमकोका विभिन्न बजारमा अनुगमण गरीएको छ । मंगलबार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, उद्योग बाणीज्य संघ, जनस्वास्थ्य लगाएतको टोलिले रुकुमकोट स्थित मुख्य व्यापारीक केन्द्र चोकबजार, छिप्रीदह, कमलदह लगाएतका स्थानमा रहेका विक्री स्थल, गोदाम, उद्योग र स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको अनुगमण गरेको हो । गुणस्तरीयतालाई ध्यानमा राखी बजार अनुगमन गर्दा दुई लाख भन्दा बढीको म्याद गुज्रिएका सामान बरामद गरी नष्ट गरिएको छ...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १७ । रुकुम पश्चिमको त्रिवेणि गाउँपालिका कार्यालयमा तालबन्दी गरिएको छ । खानेपानीको माग गर्दै वडा नम्बर दुई वेतखोलाका स्थानीयले आज बिहान गाउँपालिका कार्यालयमा तालबन्दी गरेका हुन् । आफुहरुले २०३९ साल देखि उपभोग गर्दै आएको पानीको लाईन काटिएको भन्दै वेतखोलाका स्थानीले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । काटिएको पानीको लाईन जोड्न माग गर्दै बेतखोलाका स्थानीयले सोमबारदेखि गाउँपालिका कार्यालय घेराउ गरेकामा माग पुरा नभएपछि आज गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । अव गाउँमा...
स्यार्पू पर्यटन महोत्सव सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १६ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा आयोजित स्यार्पू पर्यटन महोत्सवको समापन गरिएको छ । यहि ११ गतेबाट सुरु भएको महोत्सवको सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच राष्ट्रियसभा सदस्य ठगेन्द्रप्रकास पुरीले समापन गर्नुभएको हो । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि बाँफिकोट गाउँपालिकाले आयोजना गरेको महोत्सव ५ दिन सम्म संचालन भएको थियो । महोत्सवमा पुरुष तथा महिला भलिबल, पञ्चेबाजा, सिंगारु र झाँक्रि नाच प्रतियोगीता संचालन गरिएको थियो । त्यस्तै महोत्सवमा इन्द्रेणि ग्रुप सहित राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरुले साँस्कृतिक...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १६ । रुकुम पश्चिमका लागि दश वटा खाद्य डिपोको माग गरिएको छ । जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले जिल्लाका ६ स्थानीय तहका १० ठाउँमा खाद्य डिपो माग गरेको हो । ६ स्थानीय तहका विभिन्न ठाउ“मा १० वटा डिपो स्थापनाका लागि जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले निर्णय गरेर अर्थ र आपुर्ति मन्त्रालय तथा नेपाल खाद्य संस्थानको प्रधान कार्यालयमा पठाएको छ । समितिले आठबीसकोट नगरपालिकामा ३, चौरजहारी नगरपालिकामा २, त्रिवेणि नगरपालिकामा २ तथा मुसीकोट नगरपालिका, बा“फिकोट गाउँपालिका र सानीभेरी गाउ“पालिकामा १÷१ वटा डिपो स्थापनाको...
रुकुम पश्चिमका जेष्ठ नागरिक सम्मानित
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १६ । रुकुम पश्चिममा २६ जना जेष्ठ नागरिक सम्मानित भएका छन् । २८ औं अन्तराष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक दिवसको असरमा जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिकाले नगरभित्रका २६ जना जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गरेको हो । सबैभन्दा पाका उमेरका ६ जनालाई जनही २ हजार नगद सहित दोसल्ला अढाएर सम्मान गरिएको हो भने बाँकी २० जनालाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको हो । नगरपालिकाका सबै वडामा रहेको जेष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेकामा सोमबार मुसीकोट नगरपालिका एकका दश जना र पाँच नम्बर वडाका दश जना तथा नगरपालिका भरबाट छनौट...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) रुकुम पश्चिमले पार्टी एकता प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेकपाले एक कार्यदल गठन गर्दै जिल्लामा पार्टी एकताको प्रक्रिया थालेको हो । नेकपाले जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहमा १५ दिन भित्रमा पार्टी एकता प्रक्रिया टुंग्याउँने गरी निर्णय गरेको छ । मुसीकोटमा भएको पार्टीको कार्यकर्ता भेलाले केन्द्रीय सदस्य राजकुमार शर्मा(आर्ट)को संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदललाई पार्टीको स्थानीय तहको एकतालाई १५ दिन भित्रमा टुंग्याउने गरी जिम्मा दिएको छ । उक्त...
जाजरकोटका बिरामीलाई मेडिकलकै भर
जाजरकोट असोज, १५ । जाजरकोटका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी नहुँदा बिरामीहरु मर्कामा परेका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा औषधी नपाउँदा नीजि मेडिकलमा उपचार गर्न वाध्य भएको स्थानियले बताएका छन् । डोको र स्टेचरमा बोकेर त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रका बिरामीहरु मेडिकलमा उपचार गर्न बाध्य भएका छन् । औषधी नपाउने भएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको विश्वास समेत गुमेको स्थानीयको भनाई छ । वर्षायाम सकिएको लामो समय सम्मपनि जिल्ला अस्पताल जाजरकोटले औषधी उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधी अभाब भएको हो...
सानीभेरीमा ल्याव तथा एक्सरे सेवाको उद्घाटन
नारायण ओली रुकुम पश्चिम, असोज, १४ । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका अन्तर्गत सिम्ली स्वास्थ्य चौकीमा आधुनिक ल्याव तथा सादा एक्सरे सेवाको उद्घाटन गरिएको छ । पूर्व गृहमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद जनार्दन शर्माले उक्त सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । ल्याब तथा एक्सरे सेवाको उद्घाटन गर्दै सांसद शर्माले चुनावको वेला जनता समक्ष गरेको प्रतिबद्धता पुरा भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो यहाँका नागरिकहरुले अब ल्याब र एक्सरे सेवाका लागि टाढा जानुपर्ने, यसकै लागि धेरै पैसा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य भएको छ, अब...
नारायण ओली रुकुम पश्चिम, असोज, १४ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व गृह मन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले भ्रष्टाचार गर्ने जनप्रतिनिधी र कर्मचारी १ मिनेट पनि सार्वजानिक पदमा बस्न नपाउने बताउनु भएको छ । जनताका आकांक्षा अनुसार काम नगरेर कुनै किसिमको अड्को थापियो भने त्यो सैह्य नहुने उहाँले बताउनुभयो । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाको सिम्लीमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम(पश्चिम)को आयोजनामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रुकुम पश्चिमबाट समाजबादको अभ्यास गर्न आँफुहरु लागि परेको र...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १२ । रुकुम(पश्चिम)को त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नंम्बर २ का वडा अध्यक्ष माथि कुटपिट भएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षका सहोदर भाईले वडा नं. २ का अध्यक्ष शोभाराम बोहरा माथी कुटपिट गरेको बताईएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तिका सहोदर भाई टोपबहादुर घर्ति र बाँदरपानि खानेपानी व्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष खेलबहादुर बुढाथोकिले आफूमाथी कुटपिट गरेको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो । आज बिहान खानेपानीको विवाद सुल्झाउन वडा अध्यक्ष सक्रिय रहेको भन्दै कुटपिट गरिएको वडा अध्यक्ष बोहराले बताउनुभयो...
कालिका मन्दिर देखि पुष्पलाल चोक, बराहटाकुरा सम्मको बाटो स्तर उन्नति गरिने
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १२ । रुकुम(पश्चिम)मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर १ खलङगाको कालिका मन्दिर देखि पुष्पलाल चोक हुँदै बराहटाकुरा सम्मको बाटोको स्तर उन्नति गरिने भएको छ । करिव एक किलो मिटर उक्त बाटोमा ईन्टरलिङ कङक्रीट ब्लक टाईल बिछ्याईने भएको हो । सहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रोल्पाको आयोजनामा निर्माण हुने उक्त सडकको निर्माण जिम्मा कोशी न्युपाने यति जेवि(यति विल्ड्रस)ले लिएको छ । २०७५ असार २९ गते सम्झौता भएको काम २०७६ असोज २८ गते सक्ने ठेकादार कम्पनीले जनाएको छ । सहरी बिकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १२ । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले रुकुम पश्चिममा उपभोक्ता समिति सदाका लागि खारेज भएको बताउँनुभएको छ । दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सांसद प्रभाकरले जिल्लाबाट अव सधैका लागि उपभोक्ता समिति खारेज भएको बताउनुभएको हो । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माण प्रभावकारी नभएको भन्दै अव श्रम सहकारी मार्फत जिल्लाका सम्पुर्ण विकास निर्माणका काम हुने उहाँको भनाई छ । ‘अव सबै जनताको सहभागीतामा श्रम सहकारीहरु गठन हुन्छन्, तिनै...
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि स्यार्पू पर्यटन महोत्सव
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १२ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा बिहिबारबाट स्यार्पू पर्यटन महोत्सव सुरु भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गाउँपालिकाले महोत्सव आयोजना गरेको हो । गाउँपालिकाको समृद्धिका लागि आयोजित स्यार्पू महोत्सवको आज एक समारोहका बिच प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले उद्घाटन गर्नुभयो । पर्यटनका माध्यमबाट गाउँपालिकाको समग्र विकास गर्ने उद्ेश्यका साथ स्यार्पू तालको छेउमा महोत्सव आयोजना गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाको पर्यटकिय स्थल स्यार्पू...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ११ । रुकुम पश्चिममा कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन भएको छ । साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कृषि ज्ञान केन्द्रमा रुपान्तरण भएपछि बिहिबार(आज) एक कार्यक्रमका विच प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कृषि ज्ञान केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको हो । मुसीकोट नगरपालिका पाँचमा रहेको साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको भवनमा कृषि ज्ञान केन्द्र राखिएको छ । रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लामा काम गर्ने गरी ज्ञान केन्द्र स्थापना हुन भएको हो । मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार देशभर ५१...
त्रिवेणिमा सामुदायिक सहकार्य कार्यक्रम सुरु
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ११ । रुकुम(पश्चिम)को त्रिवेणि गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छताको लागि सामुदायिक सहकार्य कार्यक्रम सुरु भएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटी जिल्ला शाखाको आयोजनामा स्विज रेडक्रसको आर्थिक सहायतामा तिन बर्षको लागी कार्यक्रम सुरु भएको हो । कार्यक्रमलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटी सिईएचपी नेपालगञ्जले सहयोग गर्ने बताइएको छ । आज खारामा एक कार्यक्रमको बिच कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको हो । कार्यक्रम गाउँपालिकामा रहेका सम्पुर्ण स्वास्थ्य संस्था तथा वडाहरुमा संचालन हुने छ...
स्वास्थ्य शिविरबाट ६ सय बिरामीले सेवा लिए
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ११ । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका १ सल्लेमा रहेको राप्ती समाज अस्पतालमा संचालित स्वास्थ्य शिबिरबाट साढे ६ सयले सेवा लिएका छन् । तीन दिनसम्म चलेको शिविरबाट ६ सय ४० जना बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिएका हुन् । शिविरबाट पाठेघरको समस्या भएका महिला, नाक, कान, घाटी, बालरोग, नसा तथा हड्डी र दाँतको समस्या भएका बिरामीहरुले सेवा लिएको अस्पतालका प्रवन्धक गणेश गौतमले जानकारी दिनुभयो । सबै भन्दा बढी पाठेघरको समस्या भएका महिलाहरुले सेवा लिएको उहाँको भनाई छ । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्राबिधिक...
दाहाल र खत्रीलाई आहा संचार पत्रकारीता पुरस्कार
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १० । रुकुम पश्चिमका दुइजना पत्रकार आहा संचार पत्रकारीता पुस्कारबाट सम्मानित भएका छन् । जिल्लाबाट प्रकासित आहा संचार साप्ताहिकले आहा सञ्चार सम्वाददाता कार्यशाला तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरी पत्रकार धनबिर दाहाल र डिल्लीबहादुर खत्रीलाई सम्मान गरेको हो । आहा संचारले प्रत्येक वर्ष एक जना पत्रकारलाई आहा संचार पत्रकारीता पुरस्कारबाट सम्मान गर्ने गर्दछ । २०७३ को पत्रकारीता पुरुस्कारबाट धनबिर दाहाललाई सम्मान गरिएको हो भने २०७४ सालको पत्रकारिता पुरस्कारबाट डिल्लीबहादुर...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, १० । असोज ११ देखि १५ गते सम्म हुने दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सव स्थल पुग्न सजिलो हुने भएको छ । गाउँपालिका भित्रका सबै सडकहरु मुल आयोजक समितिले मर्मत गरेसंगै बाँफिकोट गाउँपालिकाको स्यार्पूमा हुने महोत्सवमा सहभागि हुन सजिलो हुने भएको हो । बाँफिकोट गाउँपालिकाले यस अघि निर्माण भएको सबै सडक मर्मत तथा सफाई गरेको छ । महोत्सव मुल आयोजक समितिका सचिव चन्द्रबहादुर केसीले स्यार्पूतालसम्म जोडिएको सबै सडक मर्मत तथा सफाई गरि सकिएको जानकारी दिनुभयो । सचिव केसीका अनुसार बाँफिकोट...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ९ । रुकुम(पश्चिम)को राप्ती समाज अस्पताल सल्लेमा सुरु भएको ३ दिने स्वास्थ्य शिबिर आजपनि जारी रहने छ । सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले शिबिरको उद्घाटन गर्नुभएको हो । राप्ती समाज स्वास्थ्य सहकारी संस्था द्धारा संचालित राप्ती समाज अस्पतालको आयोजना र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको प्राबिधिक सहयोगमा सिबिर संचालन भएको हो । शिबिरमा ओपिडी सेवा, स्त्रीरोग, नाक, कान, घाँटी, बाल रोग, हाडजोर्नी तथा नसा र डेन्टल सम्बन्धि सेवा दिइरहेको आयोजकले जनाएको छ । ३ दिने शिबिरमा स्त्रीरोग...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ८ । रुकुम(पश्चिम)को आठबीसकोट नगर अस्पतालले आफ्नो सेवा सुरु गरेको छ । आठबीसकोट नगरपालिकाले संचालनमा ल्याएको २५ शैयाको आठबीसकोट नगर अस्पतालले आईतबारबाट सेवा सुरु गरेको हो । अस्पतालले विभिन्न सेवाहरु प्रवाह गर्न सुरु गरेको छ । नगर प्रमुख गोर्खवहादुर केसीका अनुसार पहिलो दिन १ सय १६ जना विरामिले सेवा लिएका छन् । अस्पतालबाट एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड, ल्याब टेस्ट, फार्मेसी, इसिजि, प्रसुति सहितका २५ शैंयाको अस्पतालबाट उपलब्ध हुने सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरु प्रवाह भैरहेको उहाँले बताउनुभयो...
रुकुमकोट उद्योग बानिज्य संघको अध्यक्षमा यज्ञप्रकास मल्ल
सर्जना कार्की रुकुम(पूर्व), असोज ८ । रुकुमकोट उद्योग बाणिज्य संघ रुकुम पूर्वको अध्यक्षमा यज्ञप्रकास मल्ल चयन हुनुभएको छ । मल्लको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गर्दै रुकुमकोट उद्योग बाणिज्य संघको पहिलो साधारणसभा आइतबार सम्पन्न भएको हो । समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रकास केसी, थप्पनराज वुढा, बयन वुढा, केशव थापा, महासचिवमा भरत बुढामगर, सचिवमा केबेन्द्र गौतम, सह सचिवमा इश्वरीराज बिक र कोषाध्यक्षमा नन्दबिर सुनार रहनुभएको छ । यसैबिच नव निर्बाचित समितिले प्रत्यक महिनाको १५ गते कार्यसमितिको बैठक बस्ने निर्णय...
चार प्राविधिक बिषयमा नगरपालिकाको सहयोग
डिल्लीवहादुर खत्री रुकुम(पश्चिम), असोज ७ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले चारवटा प्राविधिक बिषयमा चारजना विद्यार्थीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । नगरपालिका भित्र मंसिर देखि पढाइ हुने भनिएको प्राविधिक शिक्षा स्टाप नर्स, ल्याव असिस्टेन्ट, हेल्थ असिस्टेन्ट र फार्मेसी बिषयमा पढ्न चाहाने बिद्यार्थीलाई नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो । गरिब, जेहन्दार बिद्यार्थी मध्ये १ बर्षमा ४ जनालाई आर्थिक सहयोग गर्ने नगरपालिकाले बताएको छ । नगर प्रमुख बिशाल शर्माका अनुसार १ जना बिद्यार्थीलाई ३ लाखदेखि ४ लाखसम्म आर्थिक...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ७ । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको माग गर्दै नेपाल महिला संघ रुकुम पश्चिमले ज्ञापन पत्र बुझाउँनुका साथै विरोध प्रदर्शन गरेको छ । आज सदरमुकाम मुसीकोटमा विरोध प्रदर्शन गर्दै महिला संघले हत्यारालाई कारवाहिको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । महिला संघले हत्याको विरोध तथा हत्यारालाई कारवाहिको माग गर्दै विभिन्न नारावासी गरी विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । प्रदर्शन पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत...
सिम्लीमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी अभिमुखिकरण
नारायण ओली सानीभेरी गाउँपालिका असोज ७ । रुकुम(पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीका लागि प्रशासनिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी अभिमुखिकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । स्थानिय तहबाट दिइने सेवाप्रवाहका कार्यलाई व्यवस्थित तथा छिटो छरितो गर्न र सेवा प्रवाहमा देखिएका अप्ठ्यारो परिस्थिति लाई सहजिकरण गर्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा स्थानिय तह र वडाबाट दिइने सिफारिस, विभिन्न किसिमका पञ्जिकरण जस्तै विवाह दर्ता, नाता प्रमाणित, जन्म दर्ता, मृत्यू दर्ता,...
बाँफिकोटमा करेन्ट लागेर एक घाइते
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ६ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिका ३ मा करेन्ट लागेर आज एक व्यक्ती गम्भीर घाइते भएका छन । विद्युत बनाउन पोलमा चढेकोबेला करेन्ट लाग्दा बाँफिकोट गाउँपालिका ४ का २७ बर्षिय रोलबहादुर मल्ल घाइते हुनुभएको हो । भाग्ले पावर हावसका कर्मचारी समेत रहेका मल्ललाई बिहान साढे आठ वजेतिर करेन्ट लागेको थियो । हात र खुट्टामा गहिरो चोट लागेर गम्भीर घाईते मल्ललाई उपचारको लागि नेपालगञ्ज रिफर गरिएको बताईएको छ...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ६ । रुकुम उद्योग वाणिज्य संघमा अढाई महिना देखि तालाबन्दी छ । संघकै आधा कार्यसमितिले गत असार २२ गते संघको मुसीकोट खलंगा स्थित कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको हो । । गत असार २२ गते १२ औं अविधेशन उद्घाटनको अन्तिम तयारी भैरहेको बेला व्यापारीहरुले उद्योग वाणिज्य संघले हिसाव किताव सार्वजनिक नगरेको भन्दै नारावाजी गर्दै अधिवेशन रोकेका थिए । उनिहरुले उद्योग वाणिज्य संघ नविकरण हुन नसकेको, बर्तमान कार्य समितिको लापरबाहीको कारण व्यापार व्यवसायीले तिरेको पैसा हिनामिना भएको र वर्षको लेखा परीक्षण नगरेको...
संविधान दिवसको अबसरमा फलफूलका बिरुवा बितरण
सर्जना कार्की रुकुम पूर्व । संविधान दिवसको अवसरमा रुकुम(पुर्व)को सिस्ने गाँउपालिका र पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिकाले संयुक्त रुपमा फलफुलका बिरुवाहरु वितरण गरेका छन् । दुबै गाउँपालिकाका सरकारी कार्यालय, बिद्यालय र स्थानीय कृषकहरुलाई विभिन्न प्रजातीका दुइसय बिरुवा बितरण गरिएको हो । केरा, कलमी गरेर उत्पादन गरेका आरु, नास्पती, पलम, कफी, सुगन्ध कोकिला लगायतका बिरुवा वितरण गरिएको बताईएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रुकुम(पुर्व)का प्रमुख गजेन्द्र बहादुर ओली, सिस्ने गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारी बराल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मा, जिल्ला...
चौरजहारी विमानस्थल १६ महिना देखि बन्द
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ५ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमान स्थल विगत १६ महिना देखि बन्द छ । बिमान नभएको भन्दै नेपाल वायु सेवा निगमले २०७४ को जेठबाट चौरजहारी विमानस्थलमा बिमान पठाएको छैन् । उडान रोकिएपछि यतिबेला चौरजहारी बिमानस्थल काम बिहिन भएको छ । अव कहिलेबाट बिमानस्थल सुचारु हुन्छ भन्नेमा केहि थाहा नभएको चौरजहारी विमानस्थल स्टेशन इन्चार्ज सुरेन्द्र नेपालीले बताउनुभयो । कहिले काहि मान्छेहरु उडान कहिलेबाट हुन्छ भनेर सोध्न आउँने गरेको र उनिहरुलाई थाहा छैन् भन्नु बाहेक अरु जवाफ आफुहरुसंग नभएको उहाँले बताउनुभयो...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ५ । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकाले नगर वस संचालन गर्ने भएको छ । नगरवासीलाई सहज यातायात सेवा प्रवाह गर्ने उद्ेश्यले नगरपालिकाले नगर वस संचालन गर्न लागेको हो । चौरजहारी नगरप्रमुख विशाल शर्माले नगरपालिकाको सभाहलमा भएको नगर गतिविधि विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगरपालिकाले नगर वस संचालन गर्न लागेको बारेमा जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चौरजहारी देखि नुवाकोट सम्म नगर वस संचालन हुने छ । नुवाकोट तथा खोलागाउँ क्षेत्रका नागरिकहरुलाई लक्षित गरेर नगर वस सेवा संचालन गर्न लागिएको उहाँको भनाई...
सिजनल तरकारीबाटै लाखौंको आम्दानी
दुर्गा बिसी सल्यान असोज ४ । सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालीका १ आमखोलीका किसानले तरकारीबाटै मनग्य आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । सिजनमा मात्रै १ लाख देखि डेढ लाख सम्म आम्दानी गर्ने गरेको किसानहरुले बताएका छन् । टमाटर, वन्दागोपि, काउली, काँक्रा, सिमी, आलु लगाएतको ताजा तरकारीबाटै किसानलाई राम्रो फाईदा हुने गरेको छ । वर्षे सिजन सकिए लगतै हिउदे तरकारीको लागि किसानहरु मिनीटेलर बाट घण्टाको ६ सय रुपैयाँ तीरेर खेतबारी जोत्न थालेका छन् । तरकारी खेतीको लागि गोरुले जोतेको भन्दा मिनीटेलरले जोतेको बाट तरकारी राम्रो फल्ने गरेको...
महोत्सव सफल बनाउने युवाहरुको प्रतिबद्धता
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ४ । असोज ११ देखि १५ गते सम्म हुने दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सव सफल बनाउन सक्दो सहयोग गर्ने युवाहरुले प्रतिबद्धता गरेका छन् । बाँफिकोट गाउँपालिका ३ र ५ नम्वर वडाका युवाहरुले महोत्सव सफल बनाउन सबै खालका सहयोग गर्ने बचन बद्धता गरेका हुन् । ३ र ५ नम्वर वडाको छुट्टाछुट्टै भेलामा युवाहरुले सहयोग गर्ने बताएका हुन् । ३ नम्वर वडाको स्यार्पूताल माविमा भएको युवाहरुको भेलाले महोत्सव आउने दर्शक, खेलाडीको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, खेललाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सघाउने र भलिव खेलको लागि भलिवल कोर्टको सम्पूर्ण...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज, ४ । रुकुम पश्चिममा श्रम सहकारीको अभ्यास सुरु भएको छ । उपभोक्ता समिति मार्फत हुने विकास निर्माणको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै उपभोक्ता समितिलाई विस्थापित गर्दै श्रम सहकारी मार्फत विकास निर्माणका काम गर्ने उद्ेश्य अनुसार जिल्लामा श्रम सहकारीको अभ्यास सुरु भएको हो । जिल्लामा तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानीय तह रहेकामा श्रम सहकारी गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ । चौरजहारी नगरपालिकाले श्रम सहकारी गठनको प्रक्रिया सुरु गरेको हो । १४ वडा मध्ये अधिकांश वडामा सहकारी गठन भैसकेको नगर प्रमुख...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ३ । संविधान दिवसको अवसरमा रुकुम(पश्चिम)मा प्रभातफेरी सहित मञ्चको कार्यक्रम गरिएको छ । दिवस मुल समारोह समितिको आयोजनामा आज बिहान प्रभातफेरी तथा मञ्चको कार्यक्रम गरिएको हो । खलंगाको कालीका स्थानबाट सुरु भएको प्रभात फेरी त्रिबेणि चोक, माथिल्लो बजार, पुष्पलाल चोक, तल्लोबजार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुदै जिल्ला समन्वय समितिको प्रांगनमा कोण सभामा परिणत भएको थियो । कोण सभामा बोल्ने बक्ताहरुले संविधान दिवसको शुभकामना दिदै संविधान कार्यान्वयनमा सबै लाग्नु पर्ने बताएका छन् । संविधानले परिकल्पना...
चौरजहारी १० मा श्रम सहकारी गठन
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ३ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर १० मा श्रम सहकारी गठन भएको छ । जिल्ला समन्वय समिति र नगरपालिकाको निर्देशन अनुसार श्रम सहकारी गठन गरिएको हो । वडाबासिहरुको भेलाबाट हिमबहादुर पुनको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय सहकारी संस्था गठन गरिएको छ । जसको उपाध्यक्ष निर्मल खड्का, सचिव गंगाराम रोकाय, सह सचिव तपेन्द्र बिक र कोषाध्यक्ष लालबहादुर बिक रहनुभएको छ । नव गठित श्रम सहकारीले वडामा हुने सबै बिकास निर्माणका कामहरु गर्ने छ । वडा अध्यक्ष धरम केसीको उपस्थितिमा सहकारी संस्था गठन गरिएको हो...
बालबालिकासँग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम संचालन हुँदै
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज ३ । रूकुम(पश्चिम)को सानिभेरी गाउपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष टेकबहादुर पुनले बालबालिका संग वडा अध्यक्ष कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय बाल दिवस २०७५ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा वडा नं १ का बालबालिका संग प्रतिबद्धता जारी गरि यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको हो । वडा अध्यक्ष पुनले बालबालिकाका हरेक प्रकारका गतिविधि बुझ्न प्रत्येक महिनाको २ पटक विद्यालयमा पुगि जानकारी लिने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘सानिभेरी गाउपालिकाले बालबालिकाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण कार्य अघि सारेको छ, गाउँपालिकाले अघि...
दुई महिनादेखि छिमेकीको घरमा बादी परिवार
डिल्लीबहादुर खत्री चौरजहारी, असोज २ । रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर १३ का उदय बादीको घर पहिरोको जोखिममा परेसँगै दुई महिनादेखि उहाँको परिवार छिमेकीको घरमा बसिरहेको छ । चौरजहारी नुवाकोट सडक खण्ड माथि रहेको घर अगाडिबाट पहिरो खस्दा उहाँको घर उच्च जोखिममा परेको हो । घर अगाडिबाट सडकमा पहिरो गएको र घर माथिदेखि जमिन चर्किएकोले २ महिना देखि छिमेकीको घरमा भाडा तिरेर बस्दै आएको पिडित बादीको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘दिउँसो घरमा गएर काम गरेपनि राति घरमा बस्न डर लाग्छ सबै परिवार छिमेकीको घरमा बस्न आउछौँ र घरमा बसे वापत छिमेकीको...
रुकुमकोटमा जिल्ला स्तरिय समिक्षा गोष्टी सम्पन्न
मदन बिसी रुकुम पूर्व, असोज २ । रुकुम(पुर्ब)मा जिल्ला स्तरीय बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ को बार्षिक प्रगती समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको हो । कार्यक्रममा जिल्लाका ३ स्थानिय तहमा संचालित विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुले आ आप्ना सम्पन्न योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रगती समिक्षा गरेका छन् । जस अन्तरगत रुकुम पुर्बमा कृयासिल गैरसरकारी संस्थाहरु रुकुमेली समाज बिकास केन्द्र, अपांग संरक्षण मन्च, मिक नेपाल, हुरेड कार्स नेपाल...
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज २ । रुकुम पश्चिमको बाँफिकोट गाउँपालिकामा यहि असोज ११ देखि १५ गते सम्म आयोजना गरिएको दोस्रो स्यार्पू पर्यटन महोत्सवको तयारी तिव्र पारीएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाले वडा नं. ३ र ५ मा फैलिएको स्यार्पू तालमा गर्न लागेको महोत्सवको तयारी तिव्र पारिएको हो । महोत्सव स्थल पुग्ने सडक मर्मत, मञ्च व्यवस्थापन, अतिथि आमन्त्रण, प्रचार प्रसार लगाएतका काम तिव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको र महोत्सव उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउँने गरी तयारी भैरहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । आईतबार महोत्सव आयोजना स्थल...
सल्ली चौरजहारी सडक स्तरवृद्धिको काम समेत सुस्त गतिमा
दुर्गा बिसी सल्यान, असोज १ । सल्ली चौरजहारी सडक खण्डको त्रिवेणि बजार नाथेखोलामा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम निक्कै सुस्त गतिमा भैरहेको छ । २०७४ पौष मसान्त सम्ममा पुलको काम सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता भएपनि अहिले सम्म कामले तिव्रता लिन नसकेको स्थानीय दल वहादुर परियारले वताउनुभयो । हरिहरि कन्स्ट्रक्सनका हरिवहादुर रावत र सडक डिभिजनबिच २०७४ पौष मसान्तमा काम सक्ने गरी ४ करोड १७ लाखमा सम्झौता सम्झौता थियो । सडक डिभिजन कार्यलय दाङ्गले समेत ताकेता गर्दा पनि हरिहरि कन्ट्रष्क्सनका हरिवहादुर रावतले कामलाई खासै प्राथामिकतामा नपारेको डिभिजन...
त्रिपुरा माविको सामाजिक लेखापरिक्षण सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क असोज १ । रुकुम(पश्चिम)को मुसिकोट नगरपालिका १ मा रहेको त्रिपुरा माध्यमिक विद्यालयको अभिभाबक भेला तथा सामाजिक लेखापरिक्षण सम्पन्न भएको छ । शिक्षक अभिभाबक संघका अध्यक्ष तथा विद्यालयका लेखापरिक्षण संयोजक विष्णु चन्दको अध्यक्षतामा भएको भेलामा आर्थीक वर्ष २०७४÷०७५ को आय व्यय प्रस्तुत गरिएको छ । प्रतिबेदन अनुसार विद्यालयको कुल आयतर्फ ८२ लाख ५१ हजार ८ सय २३ रुपैयाँ ५० पैसा र व्ययतर्फ ७९ लाख ३९ हजार ९ रुपैयाँ ८४ पैसा रहेको छ । भने मौजदात तर्फ ७ लाख १४ हजार ८ सय १३ रुपैया ६६ पैसा रहेको छ । विद्यालयको आर्थीक प्रतिवेदन...
डिल्लीबहादुर खत्री÷चौरजहारी असोज १ । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकाले बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने भएको छ । नगर शिक्षा ऐन २०७४ अनुसार नगरपालिका भित्र पर्ने बिद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नगरपालिकाले नियुक्त गर्ने भएको हो । यसअघि अभिभावकले बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति छान्नुपर्ने थियोे । अभिभावकले बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति सदस्यहरु छानेर नगर शिक्षा समिति र नगरपालिकामा सिफारिस गरेपछि नगरपालिकाले सिफारिस भएका सदस्यहरुसँग छलफल गरि अध्यक्ष नियुक्त गर्ने नगर शिक्षा समिति संयोजक धनन्जय शर्माले...
सल्यानमा खोलाले बगाउदा दिदी भाईको मृत्यु
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र ३१ । सल्यानमा खोलाले बगाउँदा दिदी भाईको मृत्यू भएको छ । जिल्लाको दार्मा गाउँपालिका ६ मलिबाङ घर भएका उनीहरुको शनिबार बेलुकी सात बजे स्थानीय दार्मा खोलाले बगाउँदा मृत्यू भएको हो । स्थानीय पूर्णिमा केसी माईतीघर रुकुमको नुवाकोटबाट घर फर्कदैँ गर्दा दार्माखोला तर्दा उहाँका १ छोरी र १ छोरा बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता २ बर्षिय छोरा मोहन केसीको करिब २ किलोमिटर तल शब फेला परेको थियो । भने ६ बर्षिया छोरी रेखा केसीको घटनास्थल देखी ३ किलोमिटर तल शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ ।...
राप्ती साहित्य परिषद् रुकुमको पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र ३१ । राप्ती साहित्य परिषद् जिल्ला शाखा रुकुमले ३ महिनाको अन्तिम शनिबार संचालन गर्दै आइरहेको पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रमको दोस्रो शृङ्खला सम्पन्न भएको छ । साहित्यकार गिरीप्रसाद बुढाको दुई खण्डकाव्य आस्थाका फूल र बिग्रेको हर्केको परिचर्चा कार्यक्रम शनिबार मुसिकोट खलंगामा सम्पन्न भएको हो । त्रिभुवन जनता माध्यमिक बिधालयमा भएको कार्यक्रममा राप्ती साहित्य परिषद रुकुमका अध्यक्ष मनलाल ओलीको अध्यक्षता रहेको थियो । परिषद् जिल्ला शाखा रुकुमका सल्लाहकार प्रमोद कुमार शर्माको स्वागत मन्तब्य एंव स्रष्टा परिचय रहेको...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र ३१ । रुकुम(पश्चिम)मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित अधिकांश संरचना हाल अधुरै अवस्थामा छ । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ देखि ०७२÷७३ सम्म जिल्ला विकास समिति तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमार्फत काम गरेको थियो । मन्त्रालयको ‘पीवान’ अन्तर्गतको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना शीर्षकका १८ भौतिक संरचना अलपत्र अवस्थामा छन् । पछिल्लो पटक मन्त्रालय खारेज भएको र अन्य स्थानीय तहले...
नेपाल प्रेस युनियन रुकुम(पश्चिम)को अध्यक्षमा खड्का
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २९ । नेपाल प्रेस युनियन रुकुम(पश्चिम)को अध्यक्षमा दिनेश खड्का निर्वाचित हुनुभएको छ । बिहिबार भएको पाँचौ जिल्ला अधिवेशनबाट खडकाको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत ११ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन गरिएको हो । उपाध्यक्षमा दिवश पोख्रेल र सुमित्रा केसी, सचिव लोकेन्द्र खनाल, सह सचिव सृजना शर्मा र कोषाध्यषमा सृजना शर्मा निर्वाचित हुनुभएको छ । सदस्यमा छिमा केसी, अनिशेस केसी, करण बिक, तिलक डाँगी र झरना बिक रहनुभएको छ । अधिवेशनको एक कार्यक्रमका विच नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले...
एक महिनौ पाँच पुरुषले दिए सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २९ । भाद्र एक गतेबाट नयाँ ऐन लागु भएपछि रुकुम(पश्चिम)मा एक महिनामा पाँच पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदका लागि मुद्धा दिएका छन् । श्रीमतिबाट पिडत भएको भन्दै एक महिनामा जिल्लाका पाँच पुरुषले जिल्ला अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्धा दिएका हुन् । नयाँ ऐनले पुरुषले पनि सोझै जिल्ला अदालतमा मुद्धा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ ऐन लागु हुनुपूर्व पुरुषले सिधै अदालतमा मुद्धा दिन सक्ने व्यवस्था थिएन । नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्लाका पाँच जना पुरुषले सम्बन्ध बिच्छेको मुद्धा दिएको...
आठबिसकोटका बाढि पहिरो पिडितलाई राहत बितरण
परिचन्द्र खत्री, आठबीसकोट भाद्र, २९ । रुकुम(पश्चिम) आठबीसकोट नगरपालिकाका बाढि, पहिरो पिडितलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत बितरण गरेकोे छ । आज नगरपालिकामा एक कार्यक्रमका बिच कर्णाली प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले राहत बितरण गर्नु भएको हो । श्रावण चार गते देखी भाद्र २८ गते सम्म भएको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोले नगरपालिकाका बिभिन्न ठाउँमा चार करोड बराबरको क्षेति गरेको थियो । बाढि तथा पहिरोबाट पूर्ण रुपमा विस्थापित ३१ घर परिवारलाई राहत बितरण गरिएको हो । नगरपालिकाका वडा...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २७ । रुकुम(पश्चिम)मा बाल श्रमिकको संख्या घटेको छ । जिल्ला बाल कल्याण समितिका अनुसार जिल्लामा वर्षेनि बाल श्रमिकको संख्या घट्दै गैरहेको छ । २०७० सालमा लिएको तथ्यांक अनुसार जिल्लामा ४१ जना बाल श्रमिकहरु रहेका थिए । होटेल, ग्यारेज, यातायातका साधन लगाएतमा श्रम गरिरहेका ३९ बालक र २ बालिका गरी ४१ जना बाल श्रमिक रहेकामा अहिले उक्त संख्यामा उल्लेख्य कमि आएको छ । २०७२ सालमा लिईएको तथ्यांकमा २४ बालक र ३ बालिका गरी २७ जना र २०७४ को तथ्यांक अनुसार जिल्लामा १५ बालक र २ बालिका गरी १७ जना बाल...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २७ । रुकुम(पश्चिम) र (पूर्व)का राहात शिक्षकहरुले दुवै जिल्लाका सामुदायिक बिद्यालयहरु बन्द गराएका छन् । यसअघि सरकार समक्ष बारम्बार राखेका माग पुरा नभएको भन्दै केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार राहात शिक्षकहरुले जिल्लाका सामुदायिक बिद्यालय बन्द गराएका हुन् । हिजोबाट बन्द रहेको बिद्यालय आज पनि बन्द रहने राहात शिक्षकहरुका दुवै जिल्ला समितिले जनाएका छन् । हिजो बिद्यालय बन्द गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिदैं दुवै जिल्ला समितिले आज पनि बिद्यालय बन्द गरी सहयोग गरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्...
वर्षाले पुर्याएको क्षेतिको अनुगमण
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २५ । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका वडा नं. ९ ले यस बर्ष को बर्षाले पु¥याएको क्षेतिको स्थलगत अनुगमण गरी क्षेतिको विवरण संकलन गरेको छ । यस वर्षको वर्षाले वडाका विभिन्न ठाउँमा गरी करोडौंको क्षेति गरेको अनुगमणबाट खुलेको वडाले जनाएको छ । विशेषगरी भाद्र १८ गते राती परेको अविरल बर्षाले बढी क्षेती पुराएको वडाध्यक्ष नविन ओलीले जानकारी दिनुभाये । जसबाट २५ वटा घर जोखिममा परेका छन् भने दुई वटा शौचालय र दुई वटा गोठ पुर्ण रुपमा भत्किएका छन् । वर्षाका कारण आएको पहिरोले ६८ घर परिवारले...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २५ । प्रक्रिया मिचेर शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै रुकुम(पश्चिम)को त्रिवेणी गाउँपालिकाको एक विद्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ । त्रिवेणि गाउँपालिका–६, बाँठाकोटमा रहेको भिमकल्याण आधारभुत विद्यालयको कार्यालयमा अभिभावकले तालाबन्दि गरेका हुन् । त्रिवेणि गाउँपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखाबाट अनुदान वापत प्राप्त कोटामा मनोमानि ढंगबाट शिक्षक तथा कर्मचारी भर्ना गरिएको भन्दै अभिभावकहरुले एकसाता अघि विद्यालयको प्रशासनमा तालाबन्दि गरेका हुन् । शिक्षा युवा...
रुकुमेली समाज विकास केन्द्रको अध्यक्ष पुनः नेपाली
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २५ । रुकुमेली समाज विकास केन्द्र रुकुम(पश्चिम)को अध्यक्षमा पुनः नरवहादुर नेपाली निर्वाचित हुनुभएको छ । आईतबार सम्पन्न १३ औं साधारण सभा तथा छैटौं अधिवेशनबाट नेपालीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरिएको हो । उपाध्यक्षमा शोभाकर शर्मा, सचिवमा केशन कुमार क्षेत्रियाल, कोषाध्यक्षमा रमा गौतम, सदस्यमा प्रविर ददेल, प्रकाश नेपाली, रविलाल नेपाली, शुसिला शर्मा दाहाल र खीमसरा पुन रहनुभएको छ । केहि सदस्य हेरफेर बाहेक अरु पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिईएको हो...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २२ । रुकुम(पश्चिम)मा रहेको एक गैरसरकारी संस्थाले रेडियो सानीभेरीलाई सम्मान गरेको छ । निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार तथा सन्देश प्रवाह गरि समाज रुपन्तरणमा योगदान पुर्याएको भन्दै रुकुमेलि समाज विकास केन्द्रले रेडियोलाई सम्मान गरेको हो । संस्थाको १३ औं साधारण सभा तथा छैटौं अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमका अवसरमा रेडियोलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै संस्थाले आगामि दिनमा पनि सामाजिक रुपान्तरणको अभियानमा थप प्रभावकारी भुमिका रहोस भन्ने कामना गरेको छ । रेडियोका तर्फबाट...
विद्यालयमा अझै पुगेनन् पुस्तक
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २४ । जाजरकोटको एक विद्यालयमा आर्थिक वर्ष बितेको २ महिना पुगे पनि पुस्तकालयको पुस्तक पुग्न सकेको छैन । कुशे गाउँपालीका–२ मा रहेको मान्य ढुगा माध्यामिक विद्यालयमा हाल सम्म पनि पुस्तालयको पुस्तक पुग्न नसकेको हो । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा पु¥याउनु पर्ने पुस्तालयको पुस्तक हाल सम्म पनी पु¥याउन नसकेको ब्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ । साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाजरकोटबाट आर्थीक वर्ष भित्र विद्यालयमा पुस्ताकालयको पुस्तक पु¥याउने गरि गरिएको सम्झौता बिपरित पुस्तकालयको लागि ६ लाख ५० हजार बजेटमा १ लाख...
टोल युवा विकास समिति लम्पाकोट द्धारा काठेपुल निर्माण
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २४ । रुकुम(पुर्व)को सिस्ने गाउँपालिका ८ मा पर्ने जामाखोलामा काठेपुल निर्माण गरिएको छ । टोल युवा विकास समिति लम्पाकोटले ४० हजार बराबरको श्रमदानबाट काठेपुल निर्माण गरेको हो । यहि भदौ ५ गते खोलामा आएको बाढीले काठेपुल बगाउँदा स्थानियलाई खोला वारपार गर्न समस्या भएको थियो । समितिका २५ जना युवाहरुको सहभागितामा दुइदिन लगाएर २२ मिटर लामो काठेपुल निर्माण गरिएको छ । खोलामा पुल निर्माण भए पछि झिमखोलाबाट लम्पाकोट मावि पढ्न जाने बिद्यार्थीहरु र स्थानीयलाई खोला वारपार गर्न सहज भएको समितिका सदस्य...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २४ । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका ७ साँखमा रहेको ठुलि दहको संरक्षण थालिएको छ । पर्यटकीय सम्भावना बोके पनि प्रचार प्रसार र संरक्षणको अभावमा आझेलमा परेको ठुलि दहको स्थानीय तहले संरक्षण थालेको हो । मुसीकोट नगरपालिकाले नगरको समग्र विकासका लागि तयार पारेको गुरुयोजनामा ठुलि दहको संरक्षणलाई जोड दिईएको छ । ठुलिदह पर्यावरणिय पर्यटन क्षेत्रका रुपमा गरुयोजनामा समावेश गरिएको वडाध्यक्ष हिमवहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । संरक्षणका लागि ठ्याक्कै के गर्ने भन्ने भने अझै निक्र्यौल भैनसकेको...
सिस्ने गाउँपालिकाले डम्पिङ साइड निर्माण गर्ने
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २२ । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उपयुक्त ठाउँको पहिचान गरी फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइड निर्माण गर्ने भएको छ । बिहिबार बसेको गाउँकार्यपालिका बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । जसका लागी वडा नम्बर ६ को गैरीसाज, धाउनेबगर, पैयाबारा लगाएत ठाउँको सम्भाब्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । बैठकले गाउँपालिका भित्र न्युन दरबन्दी भएका वा दरबन्दी नभएका विद्यालयहरुमा शिक्षण सहयोग अनुदान बितरण गर्ने, मापदण्ड पुरा गरेका विद्यालयलाई कोटा उपलब्ध गराउने, गाउँपालिकाबाट छुटइएका बालबिकास केन्द्रका पाँचवटा कोटा ५ वडामा संचालन गर्ने,...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २२ । रुकुम (पश्चिम)मा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने तिनजना घाइते भएका छन् । मुसीकोट नगरपालिका–४, सोलावाङबाट वडानम्वर १ गाराघाट जादै गरेको ट्याक्टर दुर्घटना हुूदा बाँफिकोट गाउँपालिका–९, ठेगाना भै मुसीकोट नगरपालिका–१, गाराघाट बस्ने २८ बर्षीय धनमाया देवकोटाको मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी घाइते देवकोटालाई उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल सल्ले लिँदै गर्दा बाटोमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटना परी मृतक धनमायाकै छोरी १३ वर्षीय मुना, मुसीकोट नगरपालिका–१३, कि २४ बर्षीया कमला...
साफ च्याम्पियनसिपको दोस्रो खेलमा नेपालले आज भुटानसँग खेल्दै
भाद्र २१ । साफ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिता अन्तर्गत आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले आज भुटानसँग खेल्दैछ । बंगलादेशमा जारी प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेशका लागि नेपाललाई आजको खेल जित्नैपर्ने दबाब छ । खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौने ४ वजे ढाकाको बंगबन्धु रंगशालामा हुनेछ । नेपाली फुटबल टोली अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्न सकेको छैन । यसअघिका प्रतियोगितामा नेपाल चार पटक सेमिफाइनलमा पुगेको छ । अस्ति सुरु भएको जारी संस्करणको पहिलो खेलमा नेपाल पाकिस्तानसँग २–१ ले पराजित भएको थियो । प्रतियोगितामा आयोजक बंगलादेशसहित भुटान, भारत,...
पत्रकार महासंघ रुकुमले बुझायो ज्ञापन पत्र
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २१ । नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । भाद्र १ गतेबाट लागू भएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भएका केही प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाएको भन्दै केहि बुँदाहरु तत्काल संशोधन गरेर पूर्ण प्रेस मैत्री बनाउन माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो । मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का विभिन्न दफाका प्रावधानहरुले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित प्रसारित सामग्रीकै आधारमा संचारकर्मी माथि गम्भीर...
उपभोक्ता समितिले गर्ने बिकास निर्माणका कामहरु अब श्रम सहकारीबाट
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २१ । रुकुम(पश्चिम)मा यसअघि उपभोक्ता समितिले गर्ने बिकास निर्माणका कामहरु अब श्रम सहकारी संघ मार्फत हुने भएका छन् । बिकासे बजेट फ्रिज हुन् नदिन श्रम सहकारीबाट बिकास निर्माण गर्न लागिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय अनुसार सबै स्थानीय तहमा श्रम सहकारी संघ गठन गर्न निर्देशन गरिएको छ । सहकारीको नियम अनुसार प्रत्येक पालिका र वडा स्तरीय श्रम सहकारी संघ गठन गरिने जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख राजकुमार शर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बर्षेणी करोडौं बजेट फ्रिज हुने भएकोले उक्त बजेटलाई...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र २१ । रुकुम(पश्चिम)को त्रिवेणी गाउँपालिकाका महिलाहरुले प्रभावकारी प्रसुति सेवाको माग गरेका छन् । आमा तथा गर्भवती महिलाहरुले सामुहिक रुपमा गाउँपालिकालाई माग पत्र बुझाउँदै प्रभावकारी प्रसुति सेवाको माग गरेका हुन् । त्रिवेणि गाउँपालिका २ मा रहेको स्वास्थ्य चौकी सिम्रुतुमा बर्थिङ सेन्टर छ । तर उक्त बर्थिङ सेन्टरबाट प्रभावकारी सेवा पाउँन नसकेको भन्दै महिलाहरुले प्रभावकारी प्रसुति सेवाको माग गरेको बताएका छन् । सिम्रुतु स्वास्थ्य चौकीमा रहेको प्रसुती गृहमा सुत्केरी हुन आउने महिलाहरुले उक्त...
स्यार्पूतालमा असोज ११ देखि १५ सम्म महोत्सव हुने
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, २० । रुकुम(पश्चिम)को स्यार्पूतालमा पर्यटन महोत्सव हुने भएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका ३ र ५ नम्वर वडामा फैलिएको स्यार्पूतालमा आगामी असोज ११ देखि १५ गते सम्म दोस्रो पर्यटन महोत्स गर्ने तयारी गरिएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाले स्यार्पूतालको प्रचार प्रसारमा टेवा पु¥याउन तथा स्थानीय भेषभुषा, सस्कृति, चालचलन र स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो । यस अघि २०६७ साल असाजे ११ देखि १५ गते सम्म पहिलो स्यार्पू महोत्सव गरिएको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा...
डिल्लीवहादुर खत्री भाद्र, २० । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकामा शिक्षकहरु विना जानकारी लगातार पन्ध्र दिन बिद्यालय अनुपस्थित भएमा जागिर जाने भएको छ । संघिय शिक्षा ऐन २०७४ र भदौ ७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार विद्यालय आउँन आनाकानि गर्ने शिक्षकलाई कडाई गर्न लागिएको हो । यो नियम लागु गरिए संगै शिक्षकहरु बिद्यालयमा अनियमित रुपमा उपस्थित हुने परिपाटीको अन्त्य हुने बिश्वास लिइएको छ । कुनै पनि शिक्षक जानकारी बिना पन्ध्र दिनसम्म बिद्यालयमा हाजिर भएन् भने त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट निस्कासन गरिने नगर...
शिक्षक पन्ध्र दिन हाँजिर नभए जागिरबाट निस्कासन गरिने
डिल्लीबहादुर खत्री ÷चौरजहारी । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकामा शिक्षकहरु पन्ध्र दिन बिद्यालय अनुपस्थित भएमा जागिर खान पाइने छैन् । संघिय शिक्षा ऐन २०७४ र भदौ ७ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार यो कार्यान्वयनमा आएको हो । यो नियम लागु गरिए संगै शिक्षकहरु बिद्यालयमा अनियमित उपस्थित हुने परिपाटीको अन्त्य हुने बिश्वास लिइएको छ । कुनै पनि शिक्षक जानकारी बिना पन्ध्र दिनसम्म बिद्यालयमा हाजिर भएन् भने त्यस्तो शिक्षकलाई जागिरबाट निस्कासन गरिने नगर प्रमुख बिशाल शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार...
आठबिसकोटमा जिप दुर्घटना, तिन घाईते
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १९ । रुकुम(पश्चिम)आठबिसकोट नगरपालिका ११ भेरीखोरमा जिप दुर्घटना हुँदा तिनजना घाइते भएका छन् । आठबिसकोटको राडिबाट जाजरकोटको रिम्ना जाँदै गरेको ग १ ज ६०४० नम्वरको जिप बिहान ११ वजे दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा परी घाईते हुनेमा आठबिसकोट नगरपालिका ८ का ३२ बर्षिय टिकाराम बिक, १४ की ७ बर्षिया बालिका सिन्दु मल्ल र सानीभेरी गाउँपालिका ४ की १८ बर्षिया निसा चन्द रहेको ईलाका प्रहरी कार्यालय आठविसकोटले जनाएको छ । घाईते तिनै जनाको राडिमा रहेको एक मेडिकलमा उपचार भैरहेको छ । नौ जना यात्रु सवार रहेको जिप...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १९ रुकुम(पश्चिम)मा पनि ५३ औं रेडक्रस दिवस मनाईएको छ । दिवसको अवसरमा आज बिहान नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको कार्यालय खलंगामा चियापानका साथै रेडक्रसका संस्थापक डा. हेनरी ड्युनाको फोटोमा माल्यार्पण र रेडक्रसको झण्डोत्वलन गरिएको थियो । त्यस्तै दिवसको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम पनि संचालन गरिएको छ । दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमका सचिव हरी गौतमले रक्तदान गर्नुभएको थियो । भने अन्य इच्छुक रक्तदाताको सूचि समेत तयार पारीएको छ । उक्त व्यक्तिहरुलाई आवश्यक परेको खण्डमा रक्तदानका लागि बोलाईने...
मेलमिलाप कर्ताहरुको तालिम सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १९ । रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका १ खलंगामा संचालन गरिएको ८ दिने मेलमिलाप सम्बन्धि आधारभुत तालिम समापन गरिएको छ । मुसीकोट नगरपालिकाको आर्थिक सहयोग र ग्रामिण सुधार केन्द्रको आयोजनामा संचालन गरिएको तालिम सोमबार एक कार्यक्रमकाबिच समापन गरिएको हो । वडा स्तरमा हुने विभिन्न बिबादहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्ने उदेश्यले तालिम संचालन गरिएको मुसिकोट नगरपालिकाले जनाएको छ । मेलमिलाप सम्बन्धि ४८ घण्टे तालिममा मेलमिलापको महत्व, मेलमिलापले सामाजिक द्धन्द व्यवस्थापनमा पु¥याउँने सहयोग,...
सानीभेरी गाउँपालिका ६ मा श्रम सहकारी संस्था गठन
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १९ । रुकुम(पश्चिम)सानीभेरी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा देउताखोला श्रम सहकारी संस्था लिमिटेड गठन गरिएको छ । एउटा वडामा एउटा श्रम सहकारी स्थापना गर्ने गाउँकार्यपालिकाको निर्णय अनुसार ६ नम्बर वडामा पनि सहकारी संस्था स्थापना गरिएको हो । ६ नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष सर्वजित घर्तीको अध्यक्षतामा भएको साधारणसभाले दिलबहादुर केसीको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय संचालक समिति गठन गरेको हो । जस्को उपाध्यक्षमा गौमती कामी, सचिव नन्दलाल जैसी र कोषाध्यक्षमा नन्दराम जैसी रहनुभएको छ । साधारणसभाले हेमन्त घर्तीको...
भुमे गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा
जयमान बुढामगर/रुकुम(पूर्व) भाद्र, १८ । रुकुम (पूर्व)को भूमे गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । २ नम्बर वडाको खाबाङ बगरमा गाउँपालिकाको कार्यालय सञ्चालनका लागि २ वटा भवन निर्माण भैरहेका छन् । गाउँपालिकाको ४० लाख नगद र स्थानीयको आठ लाख श्रमदान गरी ४८ लाखको लगानीमा २६ कोठाका २ वटा भवन निर्माण भैरहेका हुुन् । निर्माण समितिका अध्यक्ष नारायण पुनका अनुसार भवन निर्माणको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । भवन निर्माणका सबै काम सकिएर अव सिमेन्ट प्लाष्टर गर्ने र झ्याल ढोका मिलाउने काम बाँकि रहेको अध्यक्ष पुनले...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, १८ । रुकुम(पश्चिम)मा हरेक वर्ष नाचिने परम्परागत लाखे नाच आज सकिदै छ । यो नाच हरेक वर्ष जनैपुर्णीमा देखी श्रीकृष्ण जन्माष्टमिको भोलिपल्ट सम्म चल्ने गरेको छ । कंसलाई कुखुराको भोक दिएर औपचारिक रुपमा सुरु भएको लाखेनाच आज कंसलाई नै मारेर समापन गर्न लागिएको हो । श्रीकृष्णले कंसलाई मारेको सम्झनामा यो नाच नाचिदै आएको सालघारी लाखे समितिका उपाध्यक्ष केशव नेपालीले जानकारी दिनुभयो । द्धापरयुगको अन्त्यतिर वासुदेव र देवकीको आठौं सन्तान तथा विष्णुको आठौं अवतारका रुपमा जन्मिएका...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, १६ । रुकुम(पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिकामा खोलामा बगेर श्रीमान श्रीमतिको मृत्यु भएको छ । बाँफिकोट गाउँपालिका ८ दुलि दुलिखाका ५० वर्षिय अमृत घर्ती र उहाँकी श्रीमति ४८ वर्षिया तुलसा घर्तीको बाँफिकोटको बडगाई खोलामा बगेर मृत्यु भएको हो । बाँफिकोट गाउँपालिका पाँच बडगाउँमा छोराको माईतिबाट फर्कदै गर्दा घर्ती दम्पति बिहिबार बेलुकी उक्त वडाकै ढाँरा भन्ने ठाउँबाट खोलामा बगेका थिए । खोलामा रहेको काँठको पुल तर्ने क्रममा चिप्लिएर बगेका घर्ती दम्पति मध्ये श्रीमान अमृतको शव शुक्रबार बेलुकी फेला...
ग्रामिण सडकै कारण गाउँ वस्तीहरु पहिरोको उच्च जोखिममा
सानीभेरी समाचार डेस्क, भाद्र १४ । सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिका भित्रका अधिकांस गाउँहरु ग्रामिण सडकका कारण पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । बन्गाड कुपिण्डेको वडा ४ मा रहेको व्युरेनी, गर्चे वजार, घरेली, नैयाटा, खैरागाड, स्याँला, त्रिभुवन जनता मावि च्युरा, शंखपिपल वजार, वडा ६ को सुनौली वजार, भलाखर्कको गैरी गाउँ, वडा १ को खहरेखोला, वडा ७ को राम चाउँना, ढोरपिपल वजार लगाएतका ठाउँहरु पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । उक्त वस्तीहरुमा तत्काल सडक निर्माण कार्य नरोके वस्तीहरु नै उठिवास हुनुे खतरा वढेको छ । साथै सडक निर्माणका लागि...
काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा कटौती गरिने
डिल्लीबहादुर खत्री चौरजहारी, भाद्र १४ । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिकाले काम नगर्ने जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुबिधा कटौती गर्ने भएको छ । नगर कार्यपालिका बैठकले काम नगर्ने जनप्रतिनिधिका सम्पुर्ण सेवा सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रत्येक वडालाई पाँच भागमा बिभाजन गरि जनप्रतिनिधिलाई कामको जिम्मा दिने र काम नगर्ने जनप्रतिनिधिको सेवा सुबिधा कटौति गरी बिकास निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय भएको बताईएको छ । भदौ मसान्त सम्म सबै वडालाई ५ भागमा बिभाजन गरेर जनप्रतिनिधिलाई कामको जिम्मा दिने नगर प्रमुख बिशाल शर्माले जानकारी...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, १४ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पश्चिम)ले २६ किलो गाँजा सहित एक बृद्धलाई पक्राउ गरेको छ । गाँजा लुकाई राखेको गोप्य सूचनाका आधारमा खानतलास गर्दा जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका १३ घट्टेखोलाका ६९ वर्षिय कालीवहादुर केसीलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सुचना पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी निरिक्षक ऋषिकुमार ढुंगानाको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले केसीको घरको कोठामा लुकाई राखेको डाँठ, बोट र पात सहितको २६ किलो गाँजा बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, १३ । सल्यानमा घरको दलिन भाँचिदा एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाको बागचौर नगरपालिका वडा नम्वर ४ सेतोगुराँस स्थित आफ्नै घरमा सुतेका एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएको हो । मंगलबार राती ९ बजे घरको दलिन भाँचिनुका साथै घरको भित्ता भत्किँदा एकै परिवारका छ जना मध्ये पाँच जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा ४० वर्षीय रामसिंह कामी, ३५ वर्षीया राम कला कामी र उनीहरुका दुई छोरी र एक छोरा छन् । यस्तै छोरीद्वय ७ वर्षीया गंगा बिक, ६ वर्षीया...
स्यालाखदीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १२ । रुकुम(पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिका २ स्यालाखदीको स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएको छ । गाउँमै बर्थिङ सेन्टर स्थापना भएपछि प्रसुती सेवाको लागि छिमेकी गाउँपालिका तथा जिल्ला अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । उक्त बर्थिङ सेन्टरबाट उमखोला, रोकाजा, पाहाडा, खदी, पाटागाउँ लागाएतका स्थानीय लाभान्बित हुने स्वास्थ्यचौकी ईञ्चार्ज पवन बिष्टले जानकारी दिनुभयो । बर्थिङ सेन्टरको लागि आबश्यक सामाग्रीहरु आठविसकोट नगरपालिका र चौरजहारी अस्पताले उपलब्ध गराएको छ । भौगोलिक रुपमा बिकट मानिएको...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र १२ । रूकुम(पूर्व)को भूमे गाउँपालिकाबारे पर्यटकीय जानकारी दिने पुस्तक ‘भूमे दर्पण’ र तीन वटा वृत्तचित्र एकसाथ सार्वजनिक गरिएको छ । भूमे गाउँपालिका द्वारा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले एकसाथ पुस्तक र वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो । चेन्जिङ्ग नेपालका सुरेन्द्र रानाले लेखेको पुस्तक ‘भूमे दर्पण’ मा सिंगो गाउँपालिकाको प्राकृतिक सम्पदा, मगर संस्कृति र जीवनशैली सचित्र चित्रण गरिएको छ । माओवादी...
सांसद रातो कामी बाढी र पहिरो पिडितको घरमा
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, ११ । रुकुम(पश्चिम)क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रातो कामीले आठबिसकोट नगरपालीकाका बाढी÷पहिरो पिडितसंग भेटघाट तथा प्रभावित ठाउँको स्थलगत अुनगमण गर्नुभएको छ । सांसद कामीले दुई दिन लगाएर पहिरो पिडितहरु संग भेटघाट गर्नुका साथै बाढी र पहिरोले क्षति गरेका स्थानको अवलोकण गर्नुभएको हो । अनुगमणको क्रममा १५ घर पहिरो तथा बाढिले पुर्ण रुपमा क्षेति गरेको र ४५ घर अझै जोखिम रहेको पाएको सांसद कामीले बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिकाको मंग्रा, धुर्सेनी, धैरेना, रेला भगार, च्युरा, बासकोट,...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, ११ । रुकुम९पश्चिम०मा हरेक वर्ष जनैपुर्णीमा देखी श्रीकृष्ण जन्माष्टमिको भोलिपल्ट सम्म चल्ने परम्परागत लाखे नाच आईतबार देखि सुरु भएको छ । कंसलाई कुखुराको भोक दिएर आईतबार औपचारिक रुपमा लाखेनाच शुरु गरिएको सालघारी लाखे समितिका उपाध्यक्ष केशव नेपालीले जानकारी दिनुभयो । द्धापरयुगको अन्त्यतिर वासुदेव र देवकीको आठौं सन्तान तथा विष्णुको आठौं अवतारका रुपमा जन्मिएका श्रीकृष्णले कंसलाई मारेको सम्झनामा हरेक वर्ष परम्परागत रुपमा लाखे नाच मनाउदैं आईएको छ । भगवानका रुपमा लिईने...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, ९ । रुकुम(पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिका वडा नम्बर दुईले वडावासीको श्रमदानमा वडामा रहेका सम्पुर्ण गोरेटो र घाडेटो बाटोहरु मर्मत गर्न सुरु गरेको छ । वडापालिकाको निर्णय अनुसार वडामा रहेका सम्पुर्ण बाटाहरु जनश्रमदानमा मर्मत गर्न लागिएको हो । जसअनुसार आज दुई वटा बाटाहरु मर्मत गरिएको छ । वडाको खोपिखेउ देखि लामाचौरको पातिहाल्ना चौतारासम्म र खोपिखेउ देखि जनकल्याण मावि सम्मको ढाई किलोमिटर दुरीका दुईवटा बाटो मर्मत गरिएको वडा सदस्य कर्णवहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । ...
रुकुममा पनि शिक्षकहरुको सिठी जुलुस
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र ९ । रुकुम(पश्चिम)मुसिकोट खलंगामा शुक्रबार नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय महा समितिले सिठी जुलुस निकालेको छ । ७७ जिल्लामा सिठी जुलुस निकाली आप्ना माग पुरा गराउन सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले महा समितिको केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार जिल्लामा पनि सिठी जुलुस निकालिएको हो । महा समितिले विभिन्न माग राखी यस अघिपनि दबाब मुलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उसले १० वर्ष सम्म स्थाइ भएका शिक्षकहरुलाई स्वत एकतह बढुवा गर्नुपर्ने, अस्थाई शिक्षकहरुको नतिजा तत्काल प्रकाशित गर्नुपर्ने, शिक्षकसेवा आयोगलाई संबैधानिक बनाउनुपर्ने,...
रुकुमेली समाज बिकास केन्द्रको बार्षिक समिक्षा गोष्ठी सम्पन्न
सानीभेरी समाचार डेस्क, भाद्र ९ । रुकुमेली समाज बिकास केन्द्र रुकुमले २०७४÷०७५को बार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी तथा सामाजिक लेखा परिक्षण गरेको छ । शुक्रबार मुसिकोटमा एक कार्यक्रमकाबिच समिक्षा गोष्ठी तथा लेखा परिक्षण सम्पन्न गरेको हो । केन्द्रले गत आर्थिक बर्षमा बिभिन्न गैरसरकारी निकाय संगको सहकार्यमा गरेका बिभिन्न कार्यक्रमको प्रगती प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेको छ । केन्द्रले लक्ष लिएको कुल १२ लाख २६ हजार २ सय २० रुपैँयाको बार्षिक प्रगति भएको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । साथै केन्द्र मार्फत...
विद्यार्थीमा अनौठो लक्षण देखिएपछि बिद्यालय बन्द
सानीभेरी समाचार डेस्क । भाद्र, ६ । विद्यार्थीमा अनौठो लक्षण देखिएपछि रुकुम(पश्चिम)को त्रिवेणि गाउँपालिका ९ नुवाकोटको हिमालय जनता मावि बन्द गरिएको छ । पछिल्लो एकसाता देखि बिद्यार्थीमा अनौठो लक्षण देखिएपछि बिद्यालय तीन दिनका लागि बन्द गरिएको हो । बिद्यालयको कक्षा ६ र ७ मा अध्यनरत छात्राहरुमा बरबराउने, साथीलाई झम्टिने जस्ता अनौठो लक्षण देखिएपछि बिद्यालय बन्द गर्नुपरेको बिद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष जनककुमार बिकले जानकारी दिनुभयो । ‘बिद्यार्थीहरुमा पछिल्लो केहि दिन देखि अनौठो लक्षण...
सानीभेरी समाचार डेस्क भाद्र, ६ । रुकुम(पश्चिम)मा एउटै सचिवले तीन वटा सम्म वडा हेरिरहेका छन् । जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिकामा एकै सचिवले तीन वडा सम्म वडाको काम गरिरहेका छन् । गाउँपालिकाको वडा नं. ३, ४ र ५ नम्बर वडाको सचिवमा ज्ञानवहादुर खड्का रहनुभएको छ । तीन वडाको सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उहाँ एक्ला भने हुनुहुन्न । सोही गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ९ पनि एउटै सचिवको भरमा चलिरहेका छन् । उक्त तीन वडाको सचिवको जिम्मेवारी देववहादुर चन्दले सम्हालिरहनुभएको छ । वडा नम्बर ६ र ७ को जिम्मेवारी मोहोन...
सुशासन कायम गर्दै पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना
मनिष खड्का रुकुम ३, श्रावण । २०५७ सालमा स्थापना भई मानव अधिकार, शान्ति स्थापना र सुशासनका लागि काम गर्दै आएको मानव अधिकार तथा कानुनी सेवा केन्द्र(हरप्लेस) रुकुमले पछिल्लो डेढ वर्षदेखि जिल्लाका दुई स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न काम गरिरहेको छ । युएसएआईडि र एफएचआई ३६० को सहयोगमा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना मार्फत हरप्लेसले जिल्लाका त्रिवेणि गाउँपालिका र बाँफिकोट गाउँपालिकामा सुशासन कायम गर्नका लागि विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गरिरहेको छ । बाँफिकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ४ र ५ तथा त्रिवेणि...
सानीभेरी समाचार डेस्क ३, साउन । वडाध्यक्ष माथि हातपात गर्ने दुई जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पश्चिम)ले पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको बाँफिकोट गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष धनवहादुर खत्री माथि हातहात गर्ने सोही वडाका ४० वर्षिय रत्नवहादुर नाथ र ५३ वर्षिय लालवहादुर नाथलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । रत्नवहादुर र लालवहादुर सहोदर दाजु भाई हुनुहुन्छ । दाजुभाईले मदिरा सेवन गरी वडाध्यक्षको घरमै गएर हातपात गरेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । रत्नवहादुर र लालवहादुरले मंगलबार बेलुकी वडाध्यक्षलाई तथानाम...
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम(पूर्व) २, श्रावण । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका–५, धार्पानीमा भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुगेको छ । सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटबाट धौलापैरा जाँदै गरेको लु १ ज २५७३ नम्बरको जिप आज दिउँसो २ बजेतिर धार्पानीमा दुर्घटना हुँदा ७ जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम(पूर्व)ले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार मृत्यु हुनेमा रुकुम(पूर्व)को पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–२, का २२ वर्षीय किरण पुन, सोही गाउँपालिका–१, का ३५ वर्षीय कुमार पुन, ३३ वर्षीय बुद्धिराज पुन,...
रुकुम(पूर्व) २, श्रावण । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका पाँचमा जीप दुर्घटना हुँदा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटबाट साही गाउँपालिकाको धौलापैरा भन्ने ठाउँमा जादै गरेको लु १ ज २५७३ नम्बरको जीप धारपानीमा दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन् । दुर्घटनामा परी केहि यात्रु घाईते पनि भएका छन् । घाईतेलाई उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म ल्याउँने काम भैरहेको छ । नेपाली सेना, प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरिरहेका छन् । घटनाको विस्तृत विवरण आउँन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय...
डिल्लीवहादुर खत्री श्रावण २, चौरजहारी । रुकुम(पश्चिम)को चौरजहारी नगरपालिमा ५ वटा घर भत्किएका छन् । मंगलबार रातिदेखि लगातार परेको पानीका कारण वडा न. १ को पुरानो बजारमा रहेका ५ वटा घर आज बिहान ५ बजेतिर भत्किएका हुन् । सडकको नालि फुटेर पानी घर भित्र घर पस्दा भत्किएका हुन् । मानविय क्षेति भने भएको छैन् । ५ घर पुर्ण रुपमा भत्किएका छन् । भने अन्य ७ वटा घर उच्च जोखिममा परेका छन् । स्थानीय यज्ञश्वर बिक, तिलक बिष्ट, खिमबहादुर सुनार, गोपालबहादुर नेपाली र धर्मबहादुर नेपालीको घर भत्किएका हुन् । त्यस्तै स्थानीय...
मुसीकोट दरबार संरक्षण गर्दै पुरातत्व विभाग
सानीभेरी समाचार डेस्क श्रावण १, रुकुम । पुरातत्व विभागले रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका ४ मा पर्ने मुसीकोट दरबारको संरक्षणको काम थालेको छ । देशभरमा रहेका पुराना सम्पदाहरुको संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत मुसीकोट दरबार संरक्षणको काम थालिएको विभागले जनाएको छ । दरबारको संरक्षण स्वरुप विभागले चालु आर्थिक वर्षमा दरबार वरीपरि बाटो निर्माण गरेको छ । दरबारको चारै तिर अवलोकन गर्न सहज होस भनेर यो वर्षका लागि विनियोजित रकमबाट २ सय ५० फिट लामो बाटो निर्माण गरिएको छ । उक्त बाटोको चौडाई पाँच फिट रहेको छ भने बाटोको...
सानीभेरी समाचार डेस्क श्रावण १, रुकुम । जिल्ला अस्पताल रुकुम(पश्चिम)मा पछिल्लो सात महिनामा १४ गर्भवति महिलाको शल्यक्रिया गरेर शिशुलाई जन्म दिईएको छ । गत पुस महिना देखि हालसम्म सामान्य अवस्थामा सुत्केरी हनु नसक्ने अवस्थाका १४ जना गर्भवति महिलालाई शल्यक्रिया गरेर शिशुलाई जन्म दिईएको हो । बच्चाले पेटमै दिसा खाएको र बच्चा ठुलो भएर सामान्य रुपमा निस्कन नसक्ने अवस्थामा रहेका महिलाको शल्यक्रिया गर्ने गरिएको निमित्त जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. शुसिल पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला अस्पतालमा प्रसुतिका लागि...
सानीभेरी समाचार डेस्क असार २१, रुकुम । रुकुम पश्चिम–रुकुम उद्योग वाणिज्य संघको १२ औं अधिवेशनमा हुने निर्वाचनको तयारीमा रहेको प्रगतिशिल उद्योगी व्यवसायी प्यानललाई संघका दुई पूर्व अध्यक्षले समर्थन गरेका छन् । रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष प्रेमजंग मल्ल र वसन्त पुनले राजनकुमार पुन नेतृत्वको प्यानललाई समर्थन गर्नुभएको हो । प्रचार प्रसारको क्रममा पूर्व अध्यक्षद्धय मल्ल र पुनले समर्थन गरेको महासचिव पदका उम्मेदवार धनबहादुर खड्का वसन्तले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी प्रचार प्रसारकै क्रममा छौं, यसै क्रममा २ जना पूर्व...
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम(पूर्व)को भुमे गाउँपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले गाउँसभामा आगामि आर्थिक बर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट एकैसाथ पेश गरेको हो । सभामा कुल साढे ३१ करोड बराबरको अनुमानित बजेट पेश गरिएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट भन्दा झण्डै तीन करोड बढी हो । आगामि आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित ३१ करोड ३० लाख ५९ हजार ८ सय मध्ये चालू खर्चतर्फ १५ करोड ५१ लाख ४४ हजार र पुँजिगत खर्चतर्फ १५ करोड ७९ लाख १५ हजार ८ सय रुपैँया प्रस्ताव गरिएको छ...
डिल्लीबहादुर खत्री चौरजहारी १७ असार । रुकुम(पश्चिम)चौरजहारी नगरपालिकामा एक बालिकाले अपांग परिचयपत्र पाएको डेढ बर्षसम्म पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी छैनन् । वडा नम्बर १ कि जिविका लामिछानेको परिवारले २०७३ माघमा रातो किसिमको परिचयपत्र बनाइदिए पनि उनले अहिलेसम्म सुरक्षा भत्ता पाउन सकेकी छैनन् । पूर्ण रुपमा अशक्त रहेकी लामिछाने संग रातो किसिमको अपांग परिचयपत्र भए पनि राज्यबाट पाउने सेवा सुबिधा नपाउँदा राज्यले नै ठकेको जस्तो भएको उहाँका बुवा अमर लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘हामीले छोरीको उपचारको लागि धेरै खर्च ग¥यौं...
सानीभेरी समाचार डेस्क १६ असार । रुकुम(पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिकाको आठौं गाउँसभा तथा बर्खे अधिवेशन सुरु भएको छ । शुक्रबार उद्घाटन भएको गाउँसभा तथा अधिवेशनमा गाउँपालिकाको नीति, कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट पेश गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नरवहादुर पुनले शिक्षा र खानेपानीलाई प्राथमिकतामा पार्दै ३४ करोड ३० लाख २७ हजार बराबरको अनुमानित बजेट गाउँसभामा पेश गर्नुभएको छ । शिक्षालाई सुधार गर्दै लैजाने र एक घर एक धाराको अवधारणालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । सभामा पेश भएको अनुमानित बजेट संघीय...
रुकुममा पनि १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस मनाइयो
सानीभेरी समाचार डेस्क १५ असार । शुक्रबार असार १५ गते १५ औं राष्ट्रिय धान दिवस देशभरमा बिभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । ¥याली, रोपाई महोत्सव, लगाएत विभिन्न प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रम गरी धान दिवस मनाइएको हो । रुकुम पश्चिममा पनि मुसीकोट नगरपालिका अन्तरगत कृषि इकाईको आयोजनामा ¥याली, रोपाई कार्यक्रम र विभिन्न प्रतियोगीता गरी राष्ट्रिय धान दिवस २०७५ मनाइएको छ । मुसिकोट ४ सोलाबाङ बजारबाट निकालिएको ¥याली बैरागे ठाँटी हुँदै धान रोप्ने स्थानमा पुगी मंचको कार्यक्रममा परिणत भएको थियो । पंचेवाजा र प्ले कार्ड सहित निकालिएको...
सानीभेरी समाचार डेस्क १५ असार । समशीतोष्ण तरकारी वीउ उत्पादन केन्द्र रुकुम(पश्चिम)ले २० हजार बढी अलैचिका बिरुवा बिक्रि गरेको छ । केन्द्रले आफैले उत्पादन गरेका २० हजार बढी अलैचिका बिरुवा विक्रि गरेको हो । अघिल्लो वर्ष विक्रि हुन बाँकी आठ हजार बढी र यो वर्ष उत्पादन भएका गरी उक्त मात्रामा विरुवा बिक्रि गरिएको केन्द्रका प्रमुख, वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत डा.रविन्द्रनाथ चौबेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार २० हजार विरुवा मुसीकोट नगरपालिकाले मात्र खरिद गरेको हो । केहि बिरुवा भने फुटकरमा बिक्रि भएका छन् । प्रति बिरुवा १०...
बिगत ५ बर्ष देखि कुलाको दुषित पानी पिउँदै स्थानिय
सानीभेरी समाचार डेस्क १४ असार । रुकुम(पश्चिम)बाँफिकोट गाउँपालिका २ का विभिन्न ठाउँका स्थानियहरु लामो समय देखि दुषित पानी पिउँदै आएका छन् । खानेपानीको अभावमा २ नम्बर वडाका थारकाट्टे, बर्दिगैरा, काँक्रीबाङ, कोत्तल र बसिन टाकुराका स्थानीय नहर र कुलोको दुषित पानी प्रयोग गर्दैैै आएका हुन् । कोत्तल र बसिन टाकुराका बासिन्दाले राजाको कुलोेको पानी पिउदै आएका छन् भने थारकाट्ने, बर्दिगौरा र काँक्रीबाङका बासिन्दाले बिद्युत नहरको पानी पिउँदै आएका छन् । गाउँमा खानेपानीको अभाव हुँदा बिगत ५ बर्ष देखि आफुहरुले दुषित पानी प्रयोग...
सानीभेरी समाचार डेस्क १४ असार । रुकुम(पश्चिम)मा बालविवाह रोकिने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्ला तीन÷चार महिनादेखि जिल्लामा २० वर्ष नपुगि भएका, हुदै गरेका तथा हुन लागेका करिब ३५ वटा विवाह रोकिएका छन् । सबैभन्दा बढी सानीभेरी गाउँपालिकामा बाल विवाह रोकिएका छन् । उक्त गाउँपालिकामा मंगलबार मात्र दुई वटा बालविवाह रोकिएका छन् । सानीभेरी गाउँपालिका तीनकी १८ वर्षिया किशोरी र सिन्धुपाल्चोकका २८ वर्षिय युवक विच हुन लागेको विवाह सिम्ली प्रहरीले रोकेको छ । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिका नौं की १५ वर्षिया बालिका र मुसीकोट...
अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसका अवसरमा विभिन्न प्रतियोगीता
सर्जना कार्की १२ असार रुकुम पूर्व । रुकुम(पुर्व)मा मंगलबार मावि स्तरिय कविता र वक्तृृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न भएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्धको दिवसका अवसरमा जिल्ला समन्वय समितिले प्रतियोगीता आयोजना गरेको हो । ‘हामी सबैको आवाज, लागू औषध मुक्त समाज’ भन्ने शिर्षकमा कविता र ‘स्वच्छ जीवन उच्च विचार, लागू औषध दुव्र्यसनिको गरौ बहिस्कार’ विषयक बक्तृत्वकला संचालन गरिएको थियो । विभिन्न ८ वटा विद्यालयले भाग लिएको कविता प्रतियोगितामा त्रिभुवन जनता मावि छिप्रदहकी चेतना केसि प्रथम हुनुभएको छ ।...
सडक अतिक्रमण गरी बनाईएका संरचना हटाईयो
सानीभेरी समाचार डेस्क १२ असार । रुकुम(पश्चिम)को आठबीसकोट नगरपालिकाले राडि बजारमा सडक अतिक्रमण गरी बनाईएका घर, टहरा हटाएको छ । बजार विचमा रहेको सडकलाई वरीपरीबाट चेपेर बनाईएका ५० बढी घर, टहरा नगरपालिकाले हटाएको हो । बजारको दिगो व्यवस्थापनका लागि सडक अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचनाहरु हटाईएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ३१ वटा घर भत्काईएको छ । अन्य भने टहरा रहेको केसीले बताउनुभयो । सडकको विच भागलाई केन्द्रविन्दु मानि त्यसको दाया, बाँया तीन÷तीन मिटर चौडा गर्दा सडकले छोएका...
जमिन बाँझो राख्नेलाई कारवाहि गर्ने
सानीभेरी समाचार डेस्क १३ असार । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि भु उपयोगलाई प्राथमिकतामा पारेको छ । जमिन नै जननी हुन, जमिनको प्रयोगबाट नै समृद्धीको बाटोमा जान सकिन्छ भन्ने नाराका साथ नगरपालिकाले आईतबार भएको तेस्रो नगरसभामा भू उपयोग नीति प्रस्ताव गरेको छ । जसमा जमिन सदुपयोग नगर्नेलाई दण्ड सजायको नीति लागु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जमिन बाँझो हुने क्रम बढेपछि नगरपालिकाले जमिनको सदुपयोग गर्नेलाई प्रोत्साहन र सदुपयोग नगर्नेलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै दण्ड सजायको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा...
सानीभेरी समाचार डेस्क १३ असार । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका–१, सल्लेमा एक महिलाको शव फेला परेको छ । आफ्नै घरको आफ्नै कोठामा ४५ वर्षीया आइती बुढाको शव मंगलबार फेला परेको हो । बाहिरबाट ताला लाएको अवस्थामा बुढाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । मृतक बुढाका छोराले ताला फोडेर भित्र जा“दा आमाको शव भेटिएको भन्दै प्रहरीलाई खबर गर्नुभएको थियो । केही दिनदेखि कोठामा ताला लाइरहेको र आमालाई कतै नदेखेपछि ताला फोडेको मृतकका छोराले प्रहरीलाई बताउनुभएको छ । शव...
सानीभेरी समाचार डेस्क ११ असार । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका र चौरजहारी नगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को प्रस्तावित बजेट ल्याएका छन् । आइतबार भएको नगर सभामा दुई नगरपालिकाले प्रस्तावित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मुसीकोट नगरपालिकाले कुल ६५ करोड ६४ लाख ८८ हजार बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जसमा चालु तर्फ २९ करोड ६ लाख ९६ हजार, पुँजिगत तर्फ ३६ करोड ५७ लाख ९२ हजार र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २० लाख विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षमा दुई करोड २५ लाख आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष राखेको छ । त्यस्तै कुल...
सल्यानको छहरे गुफा मन्दिर उद्घाटन
इन्द्रबहादुर बुढाथोकी बन्गाड कुपिण्डे, १० असार । सल्यानको बण्गाड कुपिण्डे नगरपालिका गर्चेबजार नजिकै रहेको छ्हरे गुफाको मन्दिर उद्घाटन गरिएको छ । मन्दीरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष मोमत रोकाले मन्दीर उद्घाटन गर्नुभएको हो । नगरपालिकाको २ लाख आर्थीक सहयोगमा गुफामा मन्दीर निर्माण गरिएको बताईएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै वडा अध्यक्ष रोकाले स्थानीय सरकारले वडा भित्र रहेका सम्पुर्ण धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रलाई अझै प्राथमिकता दिदै जाने र त्यसमा पनि छहरे बाजेको गुफालाई विशेष प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ...
६ महिनामा ३२ मानव अधिकार उल्लंघनका घटना
सानीभेरी समाचार डेस्क असार १०, बितेको ६ महिनामा रुकुम(पश्चिम)मा ३२ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएका छन् । २०१८ जनवरी देखि हालसम्म विभिन्न शिर्षकमा ३२ वटा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक)ले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक, २०१९ को अर्धवार्षिक पूर्व समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरी जिल्लामा पछिल्लो ६ महिनामा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा जिल्लामा सबै भन्दा बढि महिला बिरुद्ध हुने भेदभाव र...
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका १ खलंगाबाट चोरी भएको मोटरसाईल प्रहरीले पत्ता लगाएको छ । खलंगाका विश्व केसीको मोटरसाईकल शुक्रबार राति करिब २ बजेतिर चोरी भएको थियो । चोरी भएको सूचना पाएपछि मोटरसाईकलको खोजतलास सुरु गरेको र आठ घण्टामै मोटरसाईक फेला पारी मोटरसाईकल धनिलाई बुझाईएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव उपरिक्षक सुमित खड्काले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुसीकोट नगरपालिका तीन खरखरेमा रोकि राकेको अवस्थामा शनिबार दिउँशो मोटरसाईकल फेला परेको हो । मोटरसाईकल...
मनिष खड्का बैशाख, ३० । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गत माघ ११ गते नयाँ बनेको जिल्ला रुकुम(पूर्व)को सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका १२ को गोलखाडामा तोक्दा यहाँका नागरिकहरुलाई सपना जस्तो लागेको थियो । कहिले पनि चर्चामा नरहेको ठाउँमा सदरमुकाम तोकियो भन्ने खवर एक्कासि सुन्दा आफुहरु अचम्ममा परेको गोलखाडावासीको भनाई छ । सदरमुकाम आफ्नै ठाउँमा आउँने भयो भन्ने थाहा पाएपछि हर्ष बढाई गरेका गोलखाडावासी अहिले भने चिन्तित छन् । सिस्ने...
सानीभेरी गाउँपालिकाले १० बर्षे गुरुयोजना बनाउँदै
सानीभेरी समाचार डेस्क बैशाख, २६ । १० वर्षे गुरुयोजना बनाउँदै सानीभेरी गाउँपालिका रुकुम(पश्चिम)को सानीभेरी गाउँपालिकाले १० वर्षे गुरुयोजना बनाउँदै छ । आगामी १० वर्षमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउँन सकिन्छ र कृषि क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउन लागिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विषयगत रुपमा के को विकास कसरी गर्न सकिन्छ र कुन विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा योजना बनाउँन लागिएको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । जसका लागि संस्कृति तथा पर्यटन विकास केन्द्र रुकुमको...
बालगृह सुधार नभएपछि कानुनी कार्बाही शुरु हुदै
सानीभेरी समाचार डेस्क बैशाख, २६ । रुकुम(पश्चिम)को मुसीकोट नगरपालिका १, बागबजारमा रहेको वालगृहका संञ्चालकलाई कानुनी कार्बाहीको प्रक्रिया थालिने भएको छ । पहिलो पटक सुधार गर्न दिइएको निर्देशनलाई ब्यवास्ता गर्दै लामो समयसम्म पनि अनाथ वालगृहको मापदण्ड पुरा नगरेकोे नरसिङ हिमालय अनाथ वालगृहका संञ्चालक बिबेक बुढालाई कानुनी कार्बाहीको प्रक्रिया शुरु गरिने बताइएको छ । बुधबार जिल्ला वालकल्याण समितिको समन्वयमा मुसीकोट नगरपालिकाले बागबजारमा रहेको नरसिङ हिमालय अनाथ वालगृहको दोस्रो पटक अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा अघिल्नो पटक सुधार गर्न...
सानीभेरी समाचार डेस्क बैशाख, २४ । रुकुममा उमेर नपुगि बिहे गर्न लागेका बाल वालिकालाई प्रहरीले मण्डपबाटै नियन्त्रणमा लिएको छ । मुसीकोट नगरपालिका १० मा उमेर नपुगि बिहे गर्न लागेको खवर पाएपछि झुल्खेतबाट खटिएको प्रहरीले बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिएर बिवाह रोकेको हो । मुसीकोट १० का बालक र ९ की बालिका विचमा सामाजिक परम्परा अनुसार बिवाहको कार्य चलिरहेको बेला प्रहरीले मण्डपबाटै उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । केटा र केटीको परिवारले उनिहरुको उमेर पुगेको दाबी गरेपनि उमेर पुगेको प्रमाण खुल्ने कुनै कागत...
सानीभेरी समाचार डेस्क बैशाख, २३ । बैशाख २७ देखि जेठ ७ गते सम्म संचालन हुने रुकुम पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सवको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सदरमुकाम मुसीकोट खलंगामा हुने महोत्सव स्थलमा अहिलेसम्म स्टल निर्माणदेखि अतिथि बोलाउने, कार्यक्रम तय गर्ने लगायतका काम भैसकेका छन् । अहिले महोत्सव मुल समारोह समिति महोत्सवको प्रचार प्रसारमा केन्द्रीत भएको छ । महोत्सव अवधिभर ६० हजार दर्शक भित्र्याउने तयारीका साथ प्रचार प्रसारलाई दिईएको समितिका अध्यक्ष केशव रावलले बताउनुभयो । अध्यक्ष रावलका अनुसार जिल्ला भित्र, छिमेकी जिल्ला तथा...
सानीभेरी समाचार डेस्क ४, बैशाख । बिद्यार्थीलाई निशुल्क पोषाक वितरण गर्न जादै गर्दा गाडि दुर्घटना हुँदा रुकुम(पश्चिम) चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख बिशाल शर्मा सहित सात जना घाईते भएका छन् । नगरपालिकाको कार्यालय विजयश्वरीबाट वडा नम्बर ५ को आधारभुत बिद्यालय लहरेसिमल जादै गर्दा वडा नम्बर ६ को मेलैनाउलिमा गाडि दुर्घटना भएको हो । भे १ झ २४३ नम्बरको नगरपालिकाको गाडि आज बिहान ९ः४५ बजेतिर मेलैनाउँलीमा दुर्घटनामा परेको हो । दुर्घटनामा परी ४३ वर्षिय नगर प्रमुख शर्मा सहित नगर कार्यपालिका सदस्य चौरजहारी वडा नं. ५ का ४३ वर्षिय...
स्थानिय तहका न्यायिक समितिको लागि तालिम संचालन
परिचन्द्र खत्री २६ फागुन/रुकुम (पश्चिम) रुकुम(पश्चिम)को मुसिकोटमा जिल्ला स्थित नगरपालिका तथा गाउँपालिकाका न्यायिक समिति पदाअधिकारीहरुको लागि २ दिने कानुन सम्बन्धि अभिमुखिकरण तालिम सुरु भएको छ । जिल्लाका ३ नगरपालिका तथा ३ गाउँपालिकाको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमको संयोजनमा तालिम संचालन गरिएको छ । स्थानिय तहमा रहेका न्यायिक समितिहरुको कामकाजमा सहजता ल्याउने उदेश्यले अभिमुखिकरण तालिमको आयोजना गरिएको बताईएको छ । स्थानिय तहका न्यायिक समिति कानुनि रुपमा दक्ष नभएकोले तालिम संचालन गरिएको जिल्ला समन्वय समितिले...
रुकुमलाई १० बर्षमा वेरोजगार मुक्त बनाउछौ- सांसद गोपाल शर्मा
परिचन्द्र खत्री २६ फागुन/रुकुम (पश्चिम) कर्णाली प्रदेश सभा सांसद गोपाल शर्माले रुकुमलाई अबको १० वर्ष भित्रै बेरोजगार मुक्त जिल्लाको रुपमा चिनाउने बताउनु भएको छ । अहिलेको सबै भन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको वेरोजगारीलाई हटाउनको लागि आफुहरु लागि परेको उहाँले बताउनुभयो । प्रेस सेन्टर रुकुमले आज मुसिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट तथा चियापान कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो । उत्पादनको बृद्धि गर्ने र ठुला परियोजनामा जनताको श्रम र वित्तिय शेयर लगानि गरेर वेरोजगारीको समस्या सामाधान गर्न सकिने उहाँको...
कमल निकाल्न टेण्डर आह्वान
सानीभेरी समाचार डेस्क १२, फागुन । रुकुम(पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिका ५ मा रहेको कमल तालको कमल निकाल्न पहिलो पटक टेण्डर आह्वान गरिएको छ । गाउँकार्यपालिका बैठकले कमल तालको कमल निकाल्न पहिलो पटक न्युनतम डेडलाखको टेण्डर आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । यहि फागुन १५ गते सम्मको लागि टेण्डर आह्वान गरिएको गाउँकार्यपालिका प्रवक्ता जानकारी दिए । उक्त मितिसम्म टेण्डर हाल्ने मध्येबाट सबैभन्दा बढि मुल्य हाल्नेले कमल निकाल्ने जिम्मा पाउँने छ । टेण्डर आह्वान गर्ने भन्दै कमल तालबाट कमल निकाल्न यसअघिनै रोक लगाईएको थियो...
रुकुम पुर्व सिस्ने गाउँपालिकामा क्षेतविक्षत अवस्थामा युवाको शव फेला
सानीभेरी समाचार डेस्क २३ कात्तीक, रुकुम पुर्वको सिस्ने गाउ“पालिका–५, घट्टेखोलामा एक युवाको शव फेला परेको छ । भूमे गाउ“पालिका–८, का २७ बर्षीय कमल बुढा मगर मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । परिबार भेट्न रुकुमकोट आउँदै गरेका बुढा बुधबार राती सम्म पनि नपुगेपछि परिवार तथा आफन्तले खोजतलास थालेका थिए । खोजतलासको क्रममा आफन्तले रुकुमकोटबाट घर जाने मुल बाटोको घट्टखोला किनारमा आज विहान बुढाको शव फेला पारेका हुन । मुलबाटो भन्दा करिब १ सय ५० मिटर तल खोलाको पाखातिर घा“टी, टाउको र दुवै हात काटेर क्षेत विक्षत अवस्थामा बुढाको...
एमाले र माओवादी पार्टी एकताका लागि रुकुम पश्चिममा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम १०, कार्तिक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विचमा पार्टी एकता गरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्ने निर्णय अनुसार रुकुम पश्चिममा पार्टी एकता संयोजन समिति गठन भएको छ । बाम गठबन्धन बनाई प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य चुनाव लड्ने तथा चुनावपछि एउटै कम्युनिष्ट पार्टी गठन गर्ने गरी केन्द्रमा निर्णय भए अनुसार जिल्लामा आज एकता संयोजन समिति गठन भएको हो । शुक्रबार मुसीकोटमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पार्टी एकता संयोजन समिति गठन गरिएका बारेमा जानकारी गराईएको हो । पार्टी एकता संयोजन समितिमा...
भैलो खेलेको रकम आगलागि पिडितलाई
प्रचण्ड खत्री बाँफिकोट रुकुम पश्चिम बाँफिकोट गाउँपालीका १० का आगलागि पिडित भिमवहादुर गिरीको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गरिएको छ । बाँफिकोट १० ठाटि गाउँका महिलाहरुले यसवर्षको तिहारमा भैलो खेलेर जम्मा भएको रकमबाट आगलागी पिडित गिरीको परिवारलाई नगद ५ हजार सहयोग गरका हुन् । गिरी परिवारको आर्थिक अवस्था दयनिय रहेको र आगलागिका कारण झनै समस्या भएका कारण आर्थिक सहयोग गरिएको भैलो समुहकी धनमाया गिरीले बताउनुभयो । आर्थिक सहयोग पाएपछि गिरीको परिवारले खुशि व्यक्त गरेको छ । दुःखको घडिमा आर्थिक सहयोग गर्ने महिला समुहलाई उक्त...
फोटो खिच्दा सानीभेरीकर्मी ओलीलाई ज्यान मार्ने धम्की
सानीभेरी समाचार डेस्क । जिपको छतमा यात्रु राखेको फोटो खिचेको भन्दै सानीभेरीकर्मी नारायण ओलीलाई ज्यान मार्ने धम्कि आएको छ । आफ्नो गाडिको फोटो खिचेको भन्दै सानीभेरी गाउँपालीका ९ सिम्लीका चक्र केसीले रेडियो सानीभेरीकर्मी ओलीलाई धरपकड गर्नुका साथै ज्यानै मार्ने धम्कि दिएका हुन् । ओली नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुमका सदस्य तथा प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुमका कोषाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ । पत्रकार ओलीमाथि ज्यान मार्ने धम्किप्रति प्रेस सेन्टर नेपाल रुकुमले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । एक विज्ञप्ती जारी गर्दै संगठनले...
रुकुममा पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव सुरु, आज नायक भुवन केसीको प्रस्तुति रहने
सानीभेरी समाचार डेस्क । पश्चिम रुकुममा पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव सुरु भएको छ । जिल्लाको कला संस्कृति र पर्यटनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने तथा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको मस्त पुणित संगीत संग्रालय र रुकुमेली कलाकार कल्याण कोष स्थापना सहयोगार्थ आयोजित महोत्सवको गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले बिहिबार उद्घाटन गर्नुभएको हो । रुकुम कला साँस्कृतिक मञ्च रुकुमले महोत्सव आयोजना गरेको महोत्सवको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री शर्माले सबै चिजको मेरुदण्ड कला संगीत भएको बताउनुभयो । कला संस्कृतिले देशको पहिचान बोकेकाले यसको...
पश्चिम रुकुममा असोज १९–३० सम्म पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव हुने
सानीभेरी समाचार डेस्क पश्चिम रुकुममा पर्यटन तथा साँस्कृतिक महोत्सव हुने भएको छ । आगामी असोज १९ गतेदेखि ३० गतेसम्म सदरमुकाम मुसीकोट खलंगाको बह्राटाकुरामा महोत्सव हुन लागेको हो । जिल्लाको कला संस्कृति र पर्यटनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने तथा जिल्लामा निर्माण हुन लागेको मस्त पुणित संगीत संग्रालय र रुकुमेली कलाकार कल्याण कोष स्थापना सहयोगार्थ रुकुम कला साँस्कृतिक मञ्च रुकुमले महोत्सव आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथा स्थानीय ख्याती प्राप्त कलाकारहरुको प्रस्तुति रहने छ भने विभिन्न...
सल्यान बनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाका १२ वटै वडा सचिव बिहिन
इन्द्रवहादुर बुढाथोकी बन्गाड कुपिण्डे, ५ भाद्र । सल्यानको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका १२ वटै वडा सचिव बिहिन भएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात सचिवहरु सरुवा भएर गएको र नयाँ सचिव नआउँदा नगरपालिकाका १२ वटै वडा सचिव बिहिन भएका हुन् । सचिव नहुँदा सर्वसाधरणहरु कार्यालयबाट रित्तो हात फर्किन बाध्य भएका छन् । सबै सचिवहरु सरुवा भएर गएको र नयाँ सचिवले आउन नमानेका कारण समस्या भएको बन्गाड कुपिण्डे नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हरिबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वडा सचिवहरु नहुँदा जनप्रतिनिधिहरुलाई...
गृहमन्त्रीको पहलमा अज्ञात रोग प्रभावित रुकुमको खदीमा हेलिकोप्टरबाट डाक्टर पुगे
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम २, भाद्र पछिल्लो एक सातादेखि अज्ञात रोगको प्रकोप फैलिएको रुकुमको आठविसकोट नगरपालीका ३ खदीमा काठमाडौंबाट चिकित्सकको टोली पुगेको छ । गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको पहलमा २ जना डा. र २ जना नर्स गरी ४ जना चिकित्सकको टोली औषधी सहित हेलिकोप्टरबाट रोग प्रभावित गाउँमा पुगेको हो । काठमाडौंबाट उक्त टोली सिधैं रोग प्रभावित गाउँ खदीमा अवतरण गरेको आठविसकोट नगरपालीकाका मेयर गोर्खवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयाे । उहाँका अनुसार चिकित्सकको टोली रोग नियन्त्रण नहुँदा सम्म खदीमै रहने छ । भने हेलिकोप्टर भने...
अज्ञात रोगका कारण रुकुम खदीका २ सय बढी सर्वसाधारण बिरामी, महामारीको डर
मनिष खड्का रुकुम १ भाद्र रुकुमको आठविसकोट नगरपालीका ३ स्यालाखदीको खदी गाउँका २ सय बढी मानिस बिरामी परेका छन् । बिगत एक हप्ता देखि उक्त ठाउँका मानिसहरुमा टाउँको दुख्ने, ज्वरो आउँने, पेट दुख्ने, वान्ता हुने, हातगोडा दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ । जिल्लाको दुर्गममा पर्ने खदी गाउँका सबै मानिस बिरामी परेपनि उनिहरु कुन रोगका कारण बिरामी भएका हुन भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन् । आठविसकोटका मेयर गोर्खवहादुर केसीले अज्ञात रोगका कारण २ सय बढी मानिसहरु बिरामी परेको जानकारी दिए । पछिल्लो एक हप्तादेखि यस रोगको प्रकोप...
सिस्ने गाउँपालीकाकाे बजेट झण्डै साढे २७ कराेड
सानीभेरी समाचार डेस्क । दोस्रो चरणमा असार १४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको रुकुमको सस्ने गाउँपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको छ । गाउँपालीकाले २७ करोड २७ लाख २९ हजार ४ सय ६० रुपैंयाको बजेट ल्याएको हो । मंगलबार र बुधबार गरी २ दिन चलेको प्रथम गाउँसभाले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ का लागि उक्त बजेट र नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ शसर्त सहित १३ करोड १९ लाख १९ हजार र पुजिगततर्फ १४ करोड ८ लाख १० हजार ४ सय ६० रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । पुँजिगत तर्फबाट आर्थिक विकासमा ३ करोड ३ लाख ५०...
मतदाताहरु गाउँ गएपछि सदरमुकाम सुनसान
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम ३०, वैशाख । सदरमुकाममा बस्दै आएका मानिसहरु गाउँ जान थालेपछि रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटमा चहलपहल ह्वात्तै घटेको छ । बिहिबारदेखि निर्वाचन मतदाता परिचय पत्र वितरण गर्न सुरु गरेसंगै मानिसहरु गाउँ जान थालेपछि चहल पहल घट्न सुरु गरेको सदरमुकाममा चुनाव आउँन अव आजको दिन मात्र बाँकी रहँदा चहल पहल ह्वात्तै घटेको हो । सदरमुकाममा व्यापार व्यवशाय गर्ने तथा विभिन्न कामले बस्दै आएका मानिस भोट हाल्न गाउँ जाने क्रम बढेपछि सदरमुकाम मुसिकोट खलंगा सुनसान जस्तै बनेको छ । बिहिबार रातीबाट निर्वाचनको...
रुकुममा उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता, उम्मेदवारको नामावली सहित
मनिष खड्का स्थानीय चुनावका लागि जिल्लाका राजनितिक दलहरुले उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । मंगलबार बेलुका ५ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नुपर्ने भएपनि प्रक्रिया लामो भएकाले निर्धारित समय भन्दा केही ढिलो सम्मपनि उम्मेदवारी दर्ता चलेको थियो । जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहका निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर दलहरुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा मुसिकोट सहित जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा दिनभर रौनकता छायो । मतदाता संख्याका हिशावले जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो स्थानीय तह मुसिकोट दिनभर दलका नारावाजी र हुटिङले गुञ्जयमान...
निर्वाचन प्रयोजनका लागि रुकुम २ प्रदेशमा विभाजन
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम १४, बैशाख रुकुममा दुई चरणमा निर्वाचन हुने भएको छ । स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि सरकारले रुकुम जिल्लाको कुन कुन भाग कुन प्रदेशमा पर्ने भन्ने विषय टुंग्याएको छ । संविधानले रुकुमलाई टुक्रयाएर पुर्वी भाग प्रदेश नम्बर ५ र पश्चिम भाग प्रदेश नम्बर ६ मा राखेको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दुई जिल्ला टुक्रिएर कुन कुन प्रदेशमा परेको सिमाना स्पष्ट पारेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषदले रुकुमको पूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तहहरु सिस्ने, भूमे...
पुर्ण सरसफाईका लागि सामुदायिक रेडियोको भुमिका महत्वपुर्ण
सानिभेरी समाचार डेस्क रुकुम २१, चैत्र रुकुमका विद्यार्थीहरुले पुर्ण सरसफाईका लागि सामुदायिक रेडियोको भुमिका महत्वपुर्ण हुने बताएका छन् । सञ्चारका माध्यम मध्ये रेडियो सस्तो र सबै ठाउँमा सजिलै पुग्ने भएकाले रेडियोबाट सचेतना फैलाई पुर्ण सरसफाईमा महत्वपुर्ण योगदान पु¥याउन सकिनेमा बिद्यार्थीहरुले जोड दिएका छन् । रेडियो सानिभेरीले आफ्नो दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा संचालन गरेको मावि स्तरिय “पुर्ण सरसफाई युक्त जिल्ला निर्माणका लागि सामुदायिक रेडियोको भुमिका” विषयक वक्तृत्वकला प्रतियोगीताका सहभागी विद्यार्थीहरुले...
सानिभेरी समाचार डेस्क रुकुम २०, चैत्र रुकुममा पहिलो पटक प्रशारणमा आएको रेडियो सानीभेरी एफ.एम.ले १० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आजवाट विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छ । यहि चैत्र २५ गते १० औं वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको रेडियोले विभिन्न कार्यक्रम गर्न लागेको हो । जस अन्तरगत आज वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको रेडियोले भोली पुर्णसरसफाईयुक्त जिल्ला निर्माणका लागि सामुदायिक रेडियोको भुमिका विषयक मा.वि. स्तरीय वतृत्वकला प्रतियोगिता गर्दै छ । २२ गते स्थानिय तहको निर्वाचन र संविधानको कार्यान्वयन विषयक अन्तरक्रिया,...
रुकुमका १३ प्रतिशत नागरिक अझै खानेपानीको पहुँच बाहिर
सानिभेरी समाचार डेस्क, चैत्र १३ मुसिकोट, रुकुमका १३ प्रतिशत नागरिक अझै खानेपानीको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका अनुसार हालसम्म जिल्लाका ८७ प्रतिशत नागरिक मात्र खानेपानीको पहँुचमा रहेका छन् । जिल्लाका सबै ठाउँमा खानेपानीका मुहान नुहँुनु, प्राप्त बजेट उपलब्ध नुहुँनु, नयाँ घर निर्माण गरिनु लगाएतका कारणले सबै नागरिकहरुलाई खानेपानीको पहुँचमा ल्याउन नसकिएको डिभिजन प्रमुख विकेस बधानथाछेले जानकारी दिनुभयो । खानेपानीको पहुँचमा पुग्न नसकेका नागरिकले दैनिक आधा...
चौखावाङको चुनमा पहिलो पटक गाडी पुग्यो
सानिभेरी समाचार डेस्क रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका १० चौखावाङको चुनमा पहिलो पटक जिप पुगेको छ । सिस्ने हिमाल वस तथा मिनिवस यातायात व्यवशायी समितिले खलंगादेखि चुनसम्म पहिलो पटक गाडि पु¥याएको हो । गाउँमा पहिलो पटक गाडि पुगेपछि स्थानियले हर्षबढाई गर्दै गाडि, गाडि चालक र समितिका पदाधिकारीलाई भव्य स्वागत गरेका छन् । समितिका महासचिव महेन्द्र गौतम र रुकुम उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य धनवहादुर खड्का वसन्तले संयुक्त रुपमा जिप सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । सेवा उद्घाटन भएसंगै अव नियमित रुपमा जिप चल्ने भएका छन् । अव खलंगाबाट हरेक दिन...
एसइईको पहिलो दिनको परिक्षामा ३ सय ३० विद्यार्थी अनुपस्थित
सानीभेरी समाचार डेस्क आजबाट सुरु भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)को पहिलो दिन अनिवार्य अंग्रेजी विषयको परिक्षामा रुकुमबाट ३ सय ३० जना विद्यार्थी अनुपस्थित भएका छन् । जिल्लाका २५ ओटा परिक्षा केन्द्रमा परिक्षा दिने गरी नियमित, ग्रेड बृद्धि र एग्जाम्टेड गरी ६ हजार ६९ जना विद्यार्थीले आवेदन भरेका भएपनि ३ सय ३० जना विद्यार्थी परिक्षामा अनुपस्थित भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार परिक्षामा सहभागी नहुनेमा नियमित तर्फ १ सय ४१ जना र एक्जामटेड तर्फ १ सय ८९ जना गरी समग्रमा १ सय ८४ छात्रा तथा १ सय ४६ छात्र रहेका छन् । पढाई...
एसइई परिक्षामा रुकुमबाट ६ हजार बिद्यार्थी सहभागी हुँदै
मनिष खड्का रुकुम २, चैत्र बिहिबारबाट देशैभर सुरु हुने एसइई परिक्षामा रुकुमबाट ६ हजार विद्यार्थी सहभागी हुने भएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार जिल्लाबाट नियमित, ग्रेड बृद्धि र एग्जाम्टेड गरी ६ हजार ६९ जना बिद्यार्थी परिक्षामा सहभागी हुने भएका हुन् । जसमा नियमित तर्फ ५ हजार ५ सय १२, ग्रेड बृद्धि तर्फ ४ सय २८ र एग्जाम्टेड तर्फ १ सय २९ जना परिक्षार्थी सहभागी हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो संख्या गत वर्षको तुलनामा करिब ३ सयले कम हो । जिल्लामा कुल २५ ओटा परिक्षा केन्द्रमा...
बेली ब्रिज जिर्ण बन्दा जोखिम पुर्ण यात्रा
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम २५, फागुन राप्ती राजमार्ग अन्तरगत रुकुमको मुसिकोट नगरपालिका ५ सोलावाङ र वैरागिठाटीको विचमा पर्ने बेली ब्रिज जिर्ण बन्दा यायातायातका साधनहरु जोखिम मोलेर आवत जावत गर्न बाध्य भएका छन् । २०६२ सालमा निर्माण भएको उक्त बेली ब्रिजको त्यसपछि मर्मत नगरिदा जिर्ण बनेको हो । अहिले बेली ब्रिजका सतहमा रहेका अधिकांश पाता (प्लेट)हरु उप्किएका छन् भने बाँकी उप्किने क्रममा छन् । त्यस्तै उप्किएका पाताहरुपनि टुक्रिन थालेका छन् । जसका कारण यातायातका साधनहरु जोखिम मोलेर दैनिक आवत जावत गर्ने गरेका छन् । बेली ब्रिज जिर्ण...
फेला परेको ४ दिनपछि बम डिस्पोज
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम १६, फागुन रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ घर्तीकाँडामा फागुन १३ गते शुक्रबार फेला परेको सकेट बम ४ दिनपछि आज निष्कृय पारिएको छ । नेपाली सेनाले बम निष्कृय पारेको हो । बम डिस्पोजका लागि सुर्खेतको ज्वाला दलगणबाट क्याप्टेनको नेतृत्वमा ४ जनाको बम डिस्पोजल टोली आज बिहान घटना स्थलमा पुगेको थियो । टोलीले शुक्रबार फेला परेका २ ओटा सकेट बम जमिनबाट निकालेर पड्काएर निष्कृय पारेको सहकर्मी डिल्लीवहादुर खत्रीले जानकारी दिएका छन् । बम डिस्पोजल टोलीका अनुसार उक्त २ ओटै बम पड्किने अवस्थामा रहेका थिए...
३ दिन अगाडी फेला परेको बम अझै डिस्पोज गरिएन
सानीभेरी समाचार डेस्क, मुसिकोट रुकुम, रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर ८ घर्तीकाँडामा शुक्रबार फेला परेको सकेट बम अझै डिस्पोज गरिएको छैन । स्थानिय जयप्रकास बोहोराले आफ्नो बारीमा तरुल खन्ने क्रममा फागुन १३ गते २ ओटा सकेट बम फेला परेको थियो । त्यसपछि प्रहरीले उक्त ठाउँमा सुरक्षा दिईरहेको छ । तर अहिलेसम्म बम डिस्पोज पारिएको छैन् । बम डिस्पोजका लागि नेपालगञ्जबाट सेनाको टोली आउनुपर्ने भएकाले बम डिस्पोजमा ढिलाई भैरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरिक्षक अंगुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । ३ दिन...
रुकुमको विकासका लागि १९ करोड बजेट थप
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुमको विकासको लागि १९ करोड थप बजेट आएको छ । रुकुम निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ बाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको विशेष पहलमा अर्थ मन्त्रालयले सडक, गाविस भवन, विद्यालय भवन, सामुदायिक भवन, नमूना वस्ति निर्माण लगायत निर्माण लागि १९ करोड रकम विनियोजन गरेको हो । जसमा १२ करोड सडकमा मात्रै थपिएको छ भने ७ करोड अन्य योजनामा थप भएर आएको छ । १ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न १२ वटा सडकमा एक/एक करोडका दरले थप बजेट आएको हो । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट अन्य सहरी सडक अन्तर्गतका १२ वटा...
अभ्यास शिक्षणमा आएका शिक्षकको कुटाईबाट बिद्यार्थी घाईते
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम ९, फागुन रुकुममा एक विद्यार्थी बिद्यालयमै निर्घात रुपमा कुटिएका छन् । सदरमुकामकै यमुना नन्द नमुना मावि शेरिगाउँमा कक्षा ७ मा अध्यनरत १३ वर्षिय शेरिगाउँकै अशोक शर्मा अभ्यास शिक्षण गरिरहेका सोही विद्यालयको कक्षा १२ मा अध्यनरत देववहादुर बुढाको निर्घात कुटपिटमा परी घाईते हुनुभएको हो । देववहादुरको कुटपिटबाट अशोकको कान, ढाड र अनुहारमा चोट लागेको छ । आईतबार अपरान्ह सवा ३ बजेको समयमा अन्तिम पिरियड पढाई भैरहेका बेला आफुमाथि कुटपिट भएको अशोकले बताउनुभएको छ । देववहादुरले पढाईरहेको बेला अनुमति लिएर...
रुकुममा प्रहरीले रोक्यो बालविवाह
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुममा प्रहरीले बालविवाह रोकेको छ । जिल्लाको गोतामकोट ४ रिंकाका २१ वर्षिय युवक र सोही गाविस वडा नम्बर ८ की १४ वर्षिय बालिकाको विवाह प्रहरीले रोकेको हो । बालविवाह हुन लागेको खवर जिल्ला वालकल्याण समितिमा आएपछि समितिले प्रहरीलाई खवर गरेको थियो । उनिहरुले प्रेम पछि विवाह गरेको र त्यसलाई परिवारजनले सामाजिक मान्यता दिएपछि उनिहरुको परम्परा अनुसार विवाह हुन लागेको थियो । गाउँमा बालविवाह हुन लागेको गोप्य सूचना आएपछि उक्त विवाह रोक्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अनुरोध गरिएको जिल्ला बाल अधिकार अधिकृत मानविर ओलीले बताउनुभयो...
नवौं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड सुरु
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम ६, फागुन नवौं राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड रुकुमको खोलागाउँमा रहेको हिमालय माविमा सुरु भएको छ । शिल्डको युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित शिर्पालीले आज उद्घाटन गर्नुभएको हो । फागुन १० गतेसम्म संचालन हुने शिल्डमा जिल्लाका २२ ओटा विद्यालयले सहभागीता जनाएका छन् । शिल्डमा भलिवल, कवड्डी, एथ्लेटिक्स अन्तरगत दौड ट्रयाक तर्फ छात्र, छात्रा १ सय मिटर, २ सय मिटर, ४ सय मिटर, ८ सय मिटर, १५ सय मिटर, ३ हजार मिटर र ४ हजार मिटर, उफ्रने र फ्याक्ने फिल्ड तर्फ छात्र हाईजम्प, लङजम्प, त्रिपलजम्प, ज्याभलिङ थ्रो ८ सय ग्राम र सटफुट १२ पाउन्ड तथा छात्रा...
रुकुममा पछिल्लो ३ वर्षमा आयोडिन युक्त नुनको आयात करिब ५० प्रतिशतले बढ्यो
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम ५, माघ रुकुममा आयोडिनयुक्त नुनको प्रयोग बढेको छ । जिल्लामा आयोडिन युक्त नुनको आयात बढेसंगै आयोढिन युक्त नुन प्रयोग गर्नेको संख्यामा बृद्धि भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन डिपो कार्यालय रुकुमले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि हाल सम्म करिब ५० प्रतिशतले आयोडिन युक्त नुनका उपभोक्ता बढेका छन् । डिपो कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ४ हजार ५ सय क्विन्टल नुन बिक्री गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा ५ हजार १ सय क्विन्टल नुन विक्री गरेको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष...
कांग्रेस, माओवादी निर्वाचनको तयारीमा, एमाले सरकारी निर्णयको पर्खाईमा
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम ५, माघ सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी थालेपछि रुकुममा सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनको तयारी थालेका छन् । जेठमा निर्वाचन हुने हल्ला संगै सत्तारुढ २ दल कांग्रेस र माओवादी चुनावी प्रचार प्रसारमा सक्रिय भएका हुन् । त्यस्तै प्रतिपक्षि नेकपा एमाले भने सरकारी निर्णयको पर्खाईमा रहेको छ । उसले सरकारले चुनावको मिति घोषणा नगरेसम्म चुनावलाई लक्षित गरेर कुनैपनि गतिबिधि संचालन नगर्ने बताएको छ । स्थानिय तहको चुनवलाई लक्षित गर्दै नेपाली...
हत्याका फरार अभियुक्त ३६ वर्षपछि जेल चलान
मनिष खड्का/रेडियो सानीभेरी रुकुम ३, माघ जिल्ला अदालत रुकुमले हत्याका फरार एक अभियुक्तलाई ३६ वर्षपछि जेल चलान गरेको छ । जिल्लाको चुनवाङ ४ भेडिडाँडामा २०३७ साल कार्तिक ३ गते भएको ४ जनाको सामुहिक हत्या काण्डका सह अभियुक्त रुँघा ६ का धनवहादुर खत्रीलाई अदालतले ३६ वर्षपछि जेल चलान गरेको हो । घटनाका मुख्य अभियुक्त रुघाँ ६ कै मनवहादुर खत्री भने अझै वेपत्ता छन् । उनको मृत्यु भैसकेको आशंका गरिएको छ । उनिहरुले एकै परिवारका ४ जनाको हत्या गरेका थिए भने ३ जनालाई घाईते बनाएका थिए । तुलसी खड्का, सर्केनी खड्का, प्रतिमान खड्का र तृथाकुमारी...
लखेर राख्नुहोस स्थानिय तहको संख्या बढी भयो भन्ने आवाज उठ्छः अध्यक्ष पौडेल
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम २, फागुन स्थानिय तह पुनर्संचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले तोकेको स्थानिय तहको संख्या प्रयाप्त भएको बताएका छन् । देशैभरबाट स्थानिय तहको संख्या बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला आयोगकका अध्यक्ष पौडेलले भने अहिलेको संख्या प्रयाप्त भएको बताएका हुन् । ‘आयोगलाई स्थानिय तहको संख्या बढाएर पठाउन कुनै समस्या छैन, रुकुम सदरमुकाम मुसिकोटमा सोमबार भएको स्थानिय तह पुनर्संचना विषयक अन्तरक्रियामा उनले भने–तर देशले त्यसलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ अहिले स्थानिय तहको...
स्थानिय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुमका स्थानिय निकायमा कार्यरत कर्मचारीले आज देखि स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएतका छन् । स्थानिय निकाय अन्तरगतका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाविसका कर्मचारीहरुलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाईएको हो । स्थानिय तह पुनर्संचनाका क्रममा स्थानिय निकायका कर्मचारीहरुलाई सम्मानजनक रुपमा समायोजनको माग गर्दै उनिहरुले आन्दोलन थालेका हुन् । चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम संचालन गरिरहेका कर्मचारीहरुले आज स्थानिय निकायका कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै कर्मचारी प्रवेशमा रोक...
गाउँपालिकाको केन्द्र माग गर्दै जारी आन्दोलन उग्र, ६ घण्टा थुनिए जिविसका कर्मचारी
सानीभेरी समाचार डेस्क प्रस्तावित पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको केन्द्र तकसेरामा हुनुपर्ने माग गर्दै जिल्लाको तकसेरावासीले थालेको आन्दोलन उग्र बन्दै गएको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउने र ध्यानाकर्षण गराउनेबाट सुरु भएको आन्दोलन जिल्ला बन्द र जिल्ला विकास समितिमा तालावन्दी गर्ने सम्म पुगेको छ । स्थानिय तह पुनर्संचना प्राविधिक सहयोग समिति, जिल्लाका राजनितिक दल सहित स्थानिय तह पुनर्संचनाका लागि बनेको आयोग र सरकारलाई बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि शसक्त रुपमा प्रस्तुत हुन बाध्य भएको तकसेरा गाविस सरोकार समितिले जनाएको छ ।...
विभिन्न १६ वटा सडकका लागि थप ७ करोड २० लाख बजेट
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुम जिल्लाका विभिन्न १६ वटा सडकका लागि थप बजेट आएको छ । रुकुम १ नम्वर निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्व आपुर्ति मन्त्री गणेशमान पुनको विशेष पहलमा अर्थ मन्त्रालयबाट १६ वटा सडकको लागि ७ करोड २० लाख रकम थपिएर आएको हो । चालू आर्थिक बर्ष भित्रै काम सक्ने अख्तियारी सहित उक्त बजेट आएको हो । पीपल–पोखरा–नायगाड–सिस्ने–डोल्पा सडकका लागि ७० लाख, क्यूवाङचौर, कोल–राङसी–जामाबगर सडकमा ५० लाख, गर्पाधुरी–चुनवाङ–रोल्पा सडकका लागि ५० लाख, सेरीगाउँ–कोलटाकुरा–छेरा सडकको लागि ४० लाख,...
स्याउ र आलुबाट बिद्युत उत्पादन
सानीभेरी समाचार डेस्क २०, माघ रुकुम । स्याउ र आलु भन्ने वित्तिकै हाम्रो दिमागमा खानाका मिठो परिकार हुन बन्ने जान्छ । तर त्यहि स्याउ र आलुबाट बिद्युत निकाल्न सकिन्छ भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । रुकुमका केही युवाहरुले स्याउ र आलुबाट बिद्युत निकालेका छन् । यस सम्वन्धीको रिपोर्ट आज साँझ ६ र भोली बिहान ८ बजेको सानीभेरी...
घर भत्किदा च्यापिएर बालकको मृत्यु
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम १५, माघ । रुकुमको भलाक्चामा घर भत्किदा च्यापिएर एक वालकको मृत्यु भएको छ । भलाक्चा ९ लहुँका दलवहादुर परियारको घर भत्किदा उहाँका छोरा ६ वर्षिय विरवहादुर परियारको घरले च्यापिएर मृत्यु भएको हो । घरको पछाडी पट्टीको एक साइट पुरै भत्किदा आँगनमा खेल्दै गरेका विरवहादुरको च्यापिएर मृत्यु भएको स्थानिय विरवहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो । टाउको र छातीमा गहिरो चोट लागेका बिरवहादुरको घटना स्थलमै मृत्यु भएको हो । यसअघि चिरा परेको घर आज आज मध्यान्ह १२ बजेको समयमा घर भत्किएको...
स्थानिय तह निर्वाचनको तयारी स्वरुप माओवादी केन्द्र गाउँ पस्यो
सानीभेरी समाचार डेस्क । आसन्न स्थानिय तह निर्वाचनको तयारी स्वरुप नेकपा माओवादी केन्द्र रुकुम गाउँ पसेको छ । सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति छिट्टै घोषणा गर्ने तयारी थालेपछि माओवादी केन्द्रले आफ्ना गतिविधिलाई गाउँ गाउँसम्म पु¥याउने गरी गाउँमुखी अभियान थालेको हो । उसले जिल्लाका स्थानिय तह पुनर्संचनाका क्रममा प्रस्ताव गरिएका नगर तथा गाउँपालिकालाई आधार बनाएर पार्टी प्रशिक्षण र बैठकहरुलाई तिर्वता दिएको छ । जिल्लाका प्रस्तावित तीन नगरपालिका र छ गाउँपालिका मध्ये अहिले सम्म दुइ नगरपालिका र ५...
रुकुममा सुन्तला उत्पादन बढ्यो
मनिष खड्का/रेडियो सानीभेरी रुकुम १५ माघ । रुकुममा यो वर्ष सुन्तला उत्पादनमा बृद्धि भएको छ । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष १.०१ प्रतिशतले सुन्तलाको उत्पादन बढेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाको सुन्तला खेति योग्य कुल १ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा यो वर्ष १६ सय ८ मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएको छ । गत वर्ष यति नै क्षेत्रफलमा १५ सय ९२ मेट्रिकटन सुन्तला फलेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्राविधिक सहायक मिनवहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा यो वर्ष २ करोड ८९ लाख ४४ हजार मुल्य बराबरको सुन्तला बिक्रि भएको छ ।...
लेकमा हिमपात बेसीमा बर्षा/जनजिवन प्रभावित
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुममा आज विहानैदेखि लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ भने बेसीतिर बर्षा भएको छ । यसरी जिल्लाभर बर्षा भएको यो हिउ“दमा पहिलो पटक हो । यस अघि गत पुस महिनामा जिल्लाका लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको थियो भने केही ठाउ“मा मात्रै हल्का बर्षा भएको थियो । हिमपातका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ । हिमपात र बर्षा स“गस“गै भएपछि लेकाली क्षेत्रमा अत्याधिक चिसो बढेको छ । चिसोका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक काम काज गर्न समेत असहजता उत्पन्न भएको छ । सिस्ने, गोतामकोट, स्यालाखदी रन्मामैकोट, हुकाम, तकसेरा,...
डरलाग्दो रुपमा हुँदै छ मोटरसाईकल चोरी
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुममा मोटरसाईकल चोर्न गिरोह नै सक्रिय रहेको पाईएको छ । दाङ, बाँके लगाएतका शहरी जिल्लाबाट मोटरसाईकल चोरेर जिल्लामा पु¥याएर विक्रि गर्ने कार्यमा गिरोह नै सक्रिय रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो एक महिनामा १० ओटा चोरीका मोटरसाईकल नियन्त्रणमा आएपछि यस्तो रहष्य खुलेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरिक्षक अंगुर जिसीले जानकारी दिए । जिल्लामा नयाँ तथा आधुनिक मोटरसाईकल भित्रिने क्रम बढेपछि यसमा कडाइ गरिएको उनले बताए । यस कार्यमा संलग्न ४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भैरहेको उनको भनाई छ ।...
बाँफिकोटमा धार्मीक सप्ताह हुने
सानीभेरी समाचार डेस्क, माघ ११ मुसिकोट, रुकुमको बाँफिकोट ६ काँडामा संस्कृति प्रर्वद्धन मेला तथा धार्मीक सप्ताह हुने भएको छ । धार्मीक, साँस्कृतिक तथा पर्यटनको विकासका लागि बुढुमष्ट क्षेत्र विकास कोषको आयोजनामा पहिलो पटक सप्ताह संचालन लागेको हो । “हाम्रो धर्म हाम्रो संस्कृति, यसैमा रमाउँछ रुकुमको प्रकृति” भन्ने नाराका साथ यहि माघ १९ देखि २५ गतेसम्म सप्ताह हुन लागेको आयोजकले बताएको छ । बाँफिकोट ६ काँडाको बुराल मष्ट मन्दीर परिसरमा ७ दिनसम्म सप्ताह संचालन हुने छ । उक्त सप्ताहमा रुकुमकै स्रोत साधन प्रयोग गर्ने तथा...
जिल्ला विकास समिति रुकुमले विकासे योजनाको अनुगमन थाल्यो
सानीभेरी समाचार डेस्क माघ १० मुसिकोट, जिल्ला स्तरिय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिले आजदेखि विकासे आयोजनाहरुको अनुगमन सुरु गरेको छ । जिल्ला विकास समिति लगाएत विभिन्न विषयगत कार्यालयहरुबाट संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको आजदेखि अनुगमन सुरु गरिएको हो । राजनितिक दल, विषगत कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पत्रकार, लगाएतको सहभागीतामा सुरु गरिएको संयुक्त अनुगमन कार्यक्रम यहि माघ १६ गते सम्म संचालन हुने छ । अनुगमन टोलीले आज पहिलो दिन छिवाङ र भलाक्चाा गाविसमा संचालन भएका विभिन्न कार्यक्रमहरुको अनुगमन गरेको छ । अनुगमन...
एकिकृत परियोजनाले २०१७ मा झन्डै सवा २ करोडको कार्यक्रम संचालन गर्ने
सानिभेरी समाचार डेस्क माघ १० मुसिकोट, रुकुम मुसिकोटमा आज जिल्लाका चार गाविसमा सञ्चालित एकिकृत परियोजना कार्यक्रमको बारेमा जिल्ला स्तरिय परिचयात्मक तथा समन्वय कार्यक्रम सम्पन भएको छ । सेभ द चिल्ड्रेन र रुकुमेली समाज विकास केन्द्रको साझेदारीमा सञ्चालित एकिकृत परियोजनाले २०१७ मा सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाहरुको बारेमा आज जानकारी गराइएको हो । जिल्लाका सिम्ली, गरायला, खोलागाउँ र नुवाकोट गरी ४ गाविसमा एकिकृत परियोजना लागु भएको छ । उक्त परियोजनाले यस वर्ष २ करोड ७ लाख ४० हजार ५ सय ८१ रुपैया बराबरको कार्य विवरण कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको छ...
१४ वर्ष पछि रुकुमेलीले विद्युत सेवा पाए
सानीभेरी समाचार डेस्क ७ माघ २०७३ निर्माण कार्य शुरु भएको १४ वर्षपछि रुकुममा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत पुगेको छ । खलंगा वितरण केन्द्र रुकुमका प्रमुख दिवाकर प्याकुरेलले मुसीकोट सम्ममा शीतलपाटी–मुसीकोट केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पहलमा १४ वर्षदेखि अलपत्र रहेको शीतलपाटी–मुसीकोट केन्द्रीय प्रशारण लाईन विस्तारको कामले पुर्णता पाएको हो । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले कात्तिक दोस्रो साता नेपाल विद्युत प्राधिकरण खलंगा वितरण केन्द्रको उद्घाटन...
बाल विवाह न्युनिकरणका लागि निम्तो कार्ड
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुमको रुघाँ बालमैत्री गाविस घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । बाल मैत्री स्थानीय शासन लागु भएका जिल्लाका १८ ओटा गाविस मध्ये रुघाँ बालमैत्री घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेको हो । बालमैत्री गाविस बन्नका लागि विभिन्न ३९ ओटा सुचक पुरा हुनुपर्नेमा उक्त सुचकहरु पुरा हुने क्रममा रहेको बाल मैत्री स्थानिय शासनका फोकल पर्सन, जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम तथा सूचना अधिकृत चिन्तामणि दाहालले जानकारी दिनुभयो । स्थानिय विकास मन्त्रालयले गाविसको अनुगमण गरेपछि बालमैत्री गाविस घोषणाको मिति तय हुने उहाँले...
३० युवा युवतीलाई सिपमुलक तालिम सहित सामाग्री प्रदान
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुमका चार गाविसका ३० जना युवायुवतीलाई सिप मुलक तालिम सहित सामाग्री प्रदान गरिएको छ । सेभ द चिल्डे«न र रुकुमेली समाज विकास केन्द्रको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत परियोजना अन्र्तगत बाल गरिवी तथा पोषण कार्यक्रमबाट जिल्लाका नुवाकोट, खोलागाउँ, सिम्ली र गरायला गाविसका २० युवती र १० युवालाई सिप मुलक तालिम सहित सामाग्री प्रदान गरिएको हो । आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरी ३ महिने सिलाई कटाई तथा मोबाइल मर्मत सम्वन्त्री तालिमका सहभागीहरुलाई व्यवशाय संचालनका लागि सिलाई कटाई मेसिन र मोबाईल मर्मतका सामाग्री वितरण गरिएको छ । कार्यक्रममा...
मुसिकोटका अधिकांस घर मापदण्ड विपरित
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुम सदरमुकाम मुसिकोट खलंगामा निर्माण भएका अधिकांस घर मापदण्ड विपरित रहेको पाईएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालय र मुसिकोट नगरपालिका लगाएत विभिन्न कार्यालयका इन्जिनियर सहितको टोलीले सदरमुकामका घरहरुको अवस्थाका बारेमा अनुगमण गरेको थियो । त्यस क्रममा सदरमुकामका अधिकांस घरहरु मापदण्ड विपरित निर्माण भएको भेटिएको प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । धेरैले जानकारी नभएर तथा केहिले अटेरी गर्दै मापदण्ड मिचेर घर बनाएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै प्राविधिकको सल्लाह अनुसार निर्माण भएका घरहरुको...
नुवाकोट ३ मा पुर्ण सरसफाई अभियान
गोपालसिंह खड्का, रेडियो सानीभेरी रुकुमको नुवाकोट ३ लाई पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्न लागि अभियान थालिएको छ । रुकुम जिल्लालाई सन् २०२० सम्ममा पर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्ने अभियानलाई सफल पार्न वडा नागरिक मञ्च, आमा समुह सक्रिय भएका छन् । उनिहरुलाई नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले सहजिकरण गरिरहेको छ । १ सय २० घरधुरी मध्ये आज पहिलो दिन ५५ घरमा हामी सबैको रहर पुर्ण सरफाई युक्त युक्त हाम्रो घर भन्ने मुल नारा सहितको स्टिकर टाँसिएको छ । स्टिकरमा पुर्ण सरसफाईका ६ सूचक पुरा गरेका घरमा धन्यवाद र बाँकी रहेका घरमा तत्काल पुरा गर्न सुझाव सहितको...
चुनौति पुर्ण फोहोर व्यवस्थापन
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुम मुसिकोट नगरपालीका १ सल्लेका १३ वर्षिय गणेश विकको दैनिकी मुसिकोट ३ मा रहेको ल्याण्डफिल साइटमा वित्ने गरेको छ । सदरमुकाम मुसिकोटका विभिन्न बजारबाट उत्पादन भएको फाहोर फालिने ल्याण्फिल साइटमा उनि टुटे फुठेका सामाग्री संकलन गर्छन । सल्लेमा रहेको सरस्वती माविमा कक्षा ८ मा अध्यनरत विक दैनिक जसो ल्याण्फिल साइटमै भेटिने गरेका छन् । विद्यालय छाडेर उनि ल्याण्फिल साइटमा रहेका सिसाका बोतल लगाएतका सामाग्री संकलन गरी विक्रि गर्छन । नाक खोलेर बस्न नसकिने उक्त ठाउँमा उनि सहित अन्य बालकहरुपनि दैनिक फोहोर कोट्याई रहेको...
रुकुममा ९ ओटा स्थानिय तह बन्ने
सानीभेरी समाचार डेस्क । रुकुममा ९ ओटा स्थानिय तह बन्ने भएका छन् । स्थानिय तह पुनर्संचनाका लागि बनेको आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा रुकुममा ३ नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी ९ ओटा स्थानिय तह रहने उल्लेख गरिएको छ । ३ नगरपालिकामा मुसिकोट, चौरजहारी र आठबिसकोट रहेका छन् । जिल्लामा आठविसकोट नगरपालिका नयाँ थपिन लागेको हो । त्यस्तै ६ गाउँपालिकामा पुथा उत्तरगंगा, भुम्या, सिस्ने, बाँफिकोट, त्रिवेणी र सानी भेरी रहेका छन् । यसअघि स्थानिय तह पुनर्संचना प्राविधिक सहयोग समितिले रुकुममा २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका गरी १० ओटा स्थानिय तहको...
लक्ष अनुसार अगाडी बढेन पुर्ण सरसफाई अभियान (कुराकानी सहित)
सानीभेरी समाचार डेस्क रुकुममा सरसफाई अभियान लक्ष अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको पाईएको छ । सन् २०१६ भित्रमा ५ गाविसलाई पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्ने लक्ष राखिएकामा उक्त लक्ष पुरा हुन सकेन् । जिल्लाका चौखावाङ, रुघाँ, मुरु, सिम्ली र स्यालापाखा गाविसलाई वितेको वर्ष सन् २०१६ मा पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्ने लक्ष लिइएको थियो । तर तोकिएको समयमा कुनैपनि गाविस पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा हुन सकेनन् । पुर्ण सरसफाई रणनितिक योजना २०७२ ले जिल्लालाई सन् २०२० सम्ममा पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्ने लक्ष लिएको छ ।...
रुकुममा महिलाहरुको समानुपातीक समाबेशी सम्बन्धि अभिमुखिकण सुरु
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १३ मुसिकोट, रुकुम मुसिकोट खलंगामा महिलाहरुको समानुपातिक समाबेशी प्रतिनिधित्व सम्बन्धि २ दिने अभिमुखिकरण सुरु भएको छ । अन्तरपाटी महिला संजाल केन्द्रिय कार्यालयको सहयोग तथा अन्तरपाटी महिला संजाल रुकुमको आयोजनामा अभिमुखिकरण कार्यक्रम सुरु भएको हो । महिलाका हक अधिकार तथा स्थानिय निकायमा महिला सहभागीता र समावेशि प्रतिनिधित्वका बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले अभिमुखिकरण संचालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा महिलाका हक अधिकार, स्थानिय निकायमा महिला सहभागीता, समावेशि प्रतिनिधित्व लगाएतका विषयमा...
सिलाई कटाईमा महिलाको आकर्षण बढ्दो
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १३ मुसिकोट, रुकुममा पछिल्लो समय सिलाई कटाई व्यवशायमा महिलाहरुको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको पाईएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको तथ्यांक अनुसार अहिले जिल्ला भरमा ८५ जना महिलाहरुले सिलाई कटाई व्यवशाय संचालन गरिरहेका छन् । तर सिलाई कटाई संचालन गरिरहेका महिलाहरुको संख्या यति मात्र नभएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘हाम्रो कार्यालयबाट तालिम लिएर ८५ जना महिलाले व्यवशाय संचालन गरिरहेका छन् कार्यालयका मुखिया सुखदेव गौतमले भन्नुभयो–तर यो तथ्यांकलाई पुर्ण मान्न सकिदैन, किनभने अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी...
पूर्वी रुकुमका स्थानिय तीन महिना देखी टेलिफोन सेवाबाट वन्चित
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १३ मुसिकोट, रुकुमको पुर्वी क्षेत्रका स्थानीयहरु करिव तीन महिना देखी टेलिफोन सेवावाट वन्चित भएका छन् । राङ्शीको सेपेधुरीमा रहेको नेपाल टेलिकमको स्काई टावरमा खरावी आएपछि तीन महिना देखी फोन सेवा बन्द भएको हो । टावरमा खरावि आउँदा जिल्लाको जाङ, राङसी, कोल, तकसेरा, हुकाम, मैकोट लगाए गाविसका हजारौं स्थानीयहरु टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । लामो समयदेखि टावर मर्मतका लागी पटक पटक नेपाल टेलिकम रुकुममा अनुरोध गरेपनि अहिले सम्म मर्मततर्फ कसैले चासो नदिएको स्थानिय सुविन मगरले जानकारी दिनुभयो...
रुकुमकोटदेखि घोराही सम्म सिधा बस सेवा सुरु
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १३ मुसिकोट, रुकुमको रुकुमकोट देखि दाङ घोराही सम्म सिधा बस सेवा सुरु भएको छ । सिस्ने हिमाल तथा मिनिवस यातायात व्यवसायी समिति रुकुमले आजदेखि रुकुमकोट–घोराही बस सेवा सुरु गरेको हो । वस सेवा सुरु भएसंगै पुर्वी रुकुमका दर्जन वढी गाविसका नागरिकहरुमा वस चढ्न सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । यसअघि जिल्ला बाहिर जाने पुर्वी रुकुमका नागरिकहरुमा सदरमुकाम सम्म साना गाडी चढेर आउनुपर्ने बाध्यता थियो । आज एक कार्यक्रमका विच समितिका अध्यक्ष जनक बाँठाले बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो । अवदेखि...
२ वर्षसम्म पनि आयव्यय सार्वजनिक भएन
डिल्लीबहादुर खत्री, खोलागाउँ रुकुमको खोलागाउँमा २ वर्ष अगाडी संचालन गरिएको धार्मिक महोत्सवको आय व्यय अझै सार्वजनिक गरिएको छैन् । हिमालय उच्च मावि र जहारी क्याम्पस खोलागाउँको समग्र विकासका लागि भन्दै संचालन गरिएको ‘खोलागाउँ–विजयश्वरी’ धार्मिक महोत्सवको आय व्यय २ वर्ष सम्मपनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन् । २०७१ फागुन २८ देखि चैत्र २ गतेसम्म चलेको महोत्सवमा करिब १ करोड ४५ लाख संकलन भएको प्रारम्भिक जानकारी गराईएको थियो । भुमि, तुला, गौदान र नगद गरी उक्त रकम संकलन भएको महोत्सव समापनका...
सल्यानमा ट्रयाक्टर पल्टीदाँ चालक गम्भीर घाईते
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १२ मुसिकोट, सल्यानको मुलखोला ४ च्युरामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका छन् । च्युरा जाँदै गरेको भे १ त ७७९८ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा चालक नौवस्ता ८ वानीयभार बाँकेका २१ वर्षिय अविनास सुनार घाइते हुनुभएको हो । घाईते सुनारको समान्य उपचार पछि थप उपचारको लागि नेपालगञ्ज लगिएको छ । ट्रयाक्टरमा सवार अर्का १ जना तजवीर विष्ट भने हामफलेर वच्न सफल भएका छन् । ढुङ्गा लगेर च्युरा जाँदै गर्दा ओभर लोड तथा साँघुरो बाटोका कारण ट्रली भाँचीएर ट्याक्टर दुर्घटना भएको इलाका...
रुकुममा भिरबाट लडेर एक व्यक्तिको मृत्यु
सानिभेरी समाचार डेस्क, पुष १२ मुसिकोट, रुकुम मुसिकोट नगरपालिका ११ घोर्खानीका जयबहादुर खत्रीको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको छ । आईतबार गोठालो गएका ४५ वर्षीय खत्रीको भिरबाट लडेर मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । गोठालो गएका खत्री घर नआएपछि परिवारले खोजी गर्दा उनि सोमबार मृत फेला परेको बताईएको छ । सोमबार दिउँशो खत्रीको सव फेला परेपछि आफन्तले प्रहरीलाई खवर गरेका थिए । खत्रीको अप्ठेरो बाटोका कारण लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । खत्री गमथली भिरबाट करिब २ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।...
काँग्रेसले जिल्ला सदस्यहरुलाई गाउँ पठायो
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस ११ नेपाली काँग्रेस रुकुमले पुस मसान्त भित्र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल सांस्कृतिक संघको नगर तथा गाउँ अधिवेशन गरिसक्न निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको जिल्ला कार्य समिति बैठकले उक्त संगठनको नगर तथा गाउँ अधिवेशनका लागि जिल्लाबाट प्रतिनिधि समेत खटाएको छ । दुई संगठनको अधिवेनका साथै पार्टीको गतिविधिलाई सक्रिय बनाई सबै संरचनामा आफ्नो संगठन निर्माण गर्नको लागि जिल्ला कार्य समितिका पदाधिकारी, सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुलाई जिल्लाका सबै ठाउँमा खटाएको नेपाली काँग्रेस रुकुमका सभापति...
पाँच किलो चरेससहित एक व्यक्ति पक्राउ
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस ११ जाजरकोट प्रहरीले पाँच किलो चरेससहित बाँके, नेपालगञ्जका इन्द्रमणि गौतमलाई पक्राउ गरेको छ । रिम्ना बजारदेखि नेपालगञ्जतर्फ जादै गरेको गाडिमा आईतबार विहान चेकजाँच गर्दा प्रहरीले गौतमलाई लागूऔषध चरेस सहित पक्राउ गरेको हो । सिमीको दालको बोराभित्र राखेर नेपालगन्जतर्फ लैजान लागेको अवस्थामा चरेश फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटका प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बोहराले वताउनुभयो । गौतमलाई लागूऔषध कारोबार अन्तर्गतको मुद्दा चलाएर आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको...
सडक अतिक्रमणको चपेटामा सल्यानको सल्लीवजार
दुर्गा बिसी पुस १०, सल्यान सल्यानको सल्लीवजारमा सडक अतिक्रमण गरि घर वनाउने कार्यले पछिल्लो समय तीव्रता पाएको छ । सडकले मापडण्ड नतोक्दा सडकनै मिचेर धमाधम घर निमार्ण गर्न थालिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले सवै सहरीकरण भएका ठाउँहरुमा सडकको चौडाइ २१ देखि ३० मिटरको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको वताएको छ । तर सल्लीवजार लगाएत आसपासका स्थानीय वजारहरुमा भने सडकको चौडाई ९ मिटर भन्दा वढि नभएको पाइएको छ । सडक मिचि घर निमार्ण हुदाँ समेत सडकको सिमा निर्धारण नगरिदा...
गाउँगाउँमा योजना बनाएर विकासमा लाग्न सांसद पुनको आग्रह
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस १० पूर्व आपूर्तिमन्त्री एवं रुकुम क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गणेशमान पुनले गाउँगाउँमा योजना बनाएर विकास निर्माणका काममा लाग्न आग्रह गर्नुभएको छ । रुकुमको चुनवाङ गाविसका विभिन्न गाउँमा आयोजित जनभेलालाई सम्वोधन गर्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । स्थानीय वस्तीस्तरबाटै विकास निर्माणका योजना बनाएर गाउँ परिषद्बाट पारित गराएर जिल्लामा पठाउन र जिल्ला परिषद्बाट पारित हुने योजनालाई एकीकृत गरी जिल्लामा हुने जिल्लाबाटै र जिल्लाको स्रोतले नपुग्ने योजनाका लागि केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने...
काँडामा अज्ञात रोगका कारण धमाधम कुखुरा मर्दै
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ८ मुसिकोट, रुकुम काँडा गाविसमा अज्ञात रोगका कारण कुखुराहरु धामाधम मर्न थालेपछि किसानहरु चिन्तीत बनेका छन् । अज्ञात रोगका कारण अहिले सम्म ५० भन्दा वढी बुखुरा मरिसकेको स्थानियले बताएका छन् । सधैँ बर्षातको समयमा कुखराहरु मर्ने गरेको भएपनि यसपटक हिउँदको समयपनि कुखुरा मर्न थालेपछि किसानहरु थप चिन्तीत बनेका हुन् । कुखुराहरु झोकराउने चारो नखाने जस्ता लक्षण देखिएको एक÷दुई दिनमै मर्ने गरेको स्थानियको भनाई छ । गाउँमा नजिकै औषधि पाइने एग्रोभेट नहुँदा झन समस्या भएको हो । सबैभन्दा वढी गाविसको ६, ७,...
सिम्लीमा १ व्यक्तिको शव भेटियो
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ७ मुसिकोट, रुकुमको सिम्ली–२ टाकुरामा १ जना व्यक्तिको शव फेला परेको छ । अर्मा–३, घन्ठानाका २५ बर्षीय प्रेमप्रकाश विक मृत पेला पर्नु भएको हो । आज दिउँसो घाँस काट्न जान लागेका सिम्लीका स्थानीयले विकको शव भेटाएका हुन् । विकको गोजिमा रहेको मोवाइलको घण्टी बजेपछि शव भेटिएको स्थानीयले बताएका छन् । शव भेटिए लगत्तै उनीहरुले प्रहरीलाई खवर गरेका थिए । घरबाट दिदीको घर जान भनेर हिँडेका विकको लडेर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीले बताएको छ...
सांसदको रोजाईमा विद्यालय सुधार तथा सामुदायिक भवन र सडक
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ७ मुसिकोट, जिल्लाका सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विशेष पुर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम यसवर्ष सबैभन्दा बढी विद्यालय सुधार तथा सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्चिने भएका छन् । जिल्लाका दुई प्रत्यक्ष निर्वाचित र दुई समानुपातिक सांसदले दुई शीर्षकको बजेट यसपटक सबैभन्दा बढी विद्यालय सुधार र सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएका हुन् । त्यस्तै उनीहरुले सडकमा पनि ठूलो रकम खर्चिने भएका छन् । सांसदहरुले जिल्ला विकास समिति रुकुममा पेश गरेको योजनामा...
१० दिन देखि वेपत्ता २ बालक परिवारको सम्पर्कमा
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ७ मुसिकोट, १० दिन देखि वेपत्ता रुकुम चौखावाङ ९ गलमपाटीका २ जना बालक परिवारको सम्पर्कमा आएका छन् । गलपाटीकै १५ वर्षीय पृथ्वीराज रोकायको साथमा युवराज र सुमन नेपालगंज प्रहरीको सहयोगमा घर पुगेका हुन् । गत मंसिर २७ गते विद्यालय गएका ८ वर्षिय सुमन विष्ट र युवराज पुन घर नफर्किएर हराएका थिए । पृथ्वीराज रोकायले भारत जाउँ भन्दै फकाएर नेपालगन्ज सम्म पु¥याएको सुमनकी आमा पुर्णकुमारीले बताउनुभयोे । नेपालगन्जमा अलपत्र परेका विष्ट र पुनलाई प्रहरीले फेलापारी सोलावाङ प्ररहरी चौकी सम्म पु¥याउने व्यवस्था...
चरेश सहित १ महिला पक्राउ
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ७ मुसिकोट, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले एक किलो चरेस सहित एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लाको रन्मामैकोट ३ की ३२ वर्षीया खलदया पुनलाई प्रहरीले अवैध लागु औषध चरेश सहित मुसिकोट नगरपालीका १ पातुखोलाबाट पक्राउ गरेको हो । गस्तिमा गएका प्रहरीले शंकास्पद मानेपछि खोजतलास गर्दा चरेश फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायव उपरीक्षक अंगुर जिसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बुधबार राति गस्तीमा गएको प्रहरी टोलीले लुकाएर राखेको चरेस सहित पुनलाई पक्राउ गरेको हो । घटनाको अनुसन्धानका लागि...
बाल अुदान कोषबाट २८ बालबालिकाले सहयोग पाए
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस ६ । रुकुमका चार गाविसमा रहेका अति गरिव परिवारका २८ जना बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री र न्यानो कपडा वितरण गरिएको छ । नुवाकोट, खोलागाउँ, सिम्ली र गरायलाका ७÷७ जना बालवालिकालाई सहयोग गरिएको हो । सभे द चिल्डे«न र रुकुमेली समाज विकास केन्द्रको साझेदारीमा सञ्चालित एकीकृत परियोजना अन्र्तगत बाल गरिवी पोषण कार्यक्रमबाट चामल, तेल, नुन, कापी, कलम, झोला र ज्याकेट, पाइन्ट, सर्ट लगायतका सामाग्रीहरु वितरण गरिएको पोषण अधिकृत रक्षा चन्दले बताउनुभयो । सम्बन्धित गाविसका गाउँ बाल संरक्षण समितिहरुले तथ्याङ्क संकलन...
मग्मा गाविसको ९ औं गाउँ परिषद सम्पन्न
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ६, मुसिकोट, रुकुम मग्मा गाविसको गणतन्त्र स्थापना पछिको ९ औं गाउँ परिषद सम्पन्न भएको छ । गाविस सचिव ओमबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको परिषदले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि कुल ५७ लाख ६८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा पुँजिगत तर्फ ५२ लाख २३ हजार र चालु तर्फ ५ लाख ४५ हजार रहेको छ । परिषदले समपुरक कोषतर्फ २ लाख ५० हजार, कन्टीजेन्सी तर्फ २ लाख ४८ हजार ९३, लक्षीत वर्गतर्फ २० लाख ८९ हजार २ सय, भौतिक पुर्वाधार तर्फ १५ लाख ४८ हजार ४ सय २५ र प्रवर्दनात्मक तर्फ १० लाख २५ हजार २ सय ८२ वजेट विनियोजन गरेको छ...
पुर्ण सरसफाई अभियानमा सदरमुकाम मुसिकोट अग्र स्थानमा
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस ५ । पुर्ण सरसफाई अभियानमा रुकुम सदरमुकाम मुसिकोट अग्र स्थानमा देखिएको छ । नगरपालिकालाई सन् २०२० सम्ममा पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा गर्ने लक्ष राखिएकामा अहिले सम्म ४ ओटा टोल पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा भैसकेका छन् । मंगलबार २ ओटा टोललाई पुर्ण सरसफाई युक्त टोल घोषणा गरिएसंगै पुर्ण सरसफाई युक्त घोषणा हुने टोलको संख्या ४ पुगेको हो । पुर्ण सरसफाईका ६ ओटा सुचकहरु पुरा भएपछि मंगलबार मुसिकोट १ का माथिल्लो बागबजार र रावलवारा टोललाई संयुक्त रुपमा पुर्ण सरसफाई युक्त टोल घोषणा गरिएको हो । दुई टोलका करिब १ सय ३०...
चौखावाङ ९ गलमपाटीका ३ वालक ९ दिन देखि वेपत्ता
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष ५, मुसिकोट, रुकुम चौखावाङ ९ गलमपाटीका ३ वालक ९ दिन देखि वेपत्ता भएका छन् । चौखावाङ ९ गलमपाटीका ८ वर्षीय सुमन विष्ट, १५ वर्षीय पृथ्वीराज रोकाय र ८ वर्षीय युवराज पुन मंसिर २७ गते देखी वेपत्ता भएका हुन् । मंसीर २७ गते सोमबार विद्यालय गएका वालकहरु वेलुका घर नफर्किएको सुमन बिष्टकी आमा पुर्णकारी बिष्टले जानकारी दिनुभयो । पृथ्वीराजले पटक पटक इन्डीया जाम भन्दै फकाउने गरेको र योपटक उनिहरु इन्डीया गएको हुन सक्ने आफन्तहरुको अनुमान छ । वालकहरु हराएको २ दिन पछि घरमा थाहा पाएको र थाहा हुन वित्तीकै...
ट्याक्टर व्यावसायीले गरे ढुवानी वन्द
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुस ३ । जाजरकोटको खगेनकोट देखी तल्लुवगर सम्म सञ्चालनमा रहेका ट्याक्टरहरु आज देखी वन्द गरिएको छ । जथाभावी सामान ढुवानी गरी कामदारको भावनामा खेलेको भन्दै ट्याक्टर व्यावसाय संघ खगेनकोटले ट्याक्टर बन्द गरेको हो । ट्याक्टर व्यावसाय संघ खगेनकोटले रेट निर्धारण गरिनु पर्ने र कोही व्यापारी र ढुवानी गर्ने व्यक्ति मर्कामा पर्नु नहुने लगाएतका माग राखी आज देखी ढुवानी सेवा वन्द गरेको अध्यक्ष नेत्रवहादुर विसीले जानकारी दिनुभयो । जथाभावी गरिने ढुवानीले समानको दर रेटमा समानता नहुँने हुँदा ढुवानी भाडामा एक...
रुकुममा मानव अधिकारको अवस्था डरलाग्दो
सानिभेरी समाचार डेस्क पुष २, मुसिकोट, रुकुममा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा बृद्धि भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले मानव अधिकार बर्ष पुस्तक २०१७ प्रकाशनको पुर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले जिल्लामा सन् २०१५ को तुलनामा २०१६ मा मानव अधिकारको अवस्था खस्कदो अवस्थामा रहेको देखाएको छ । इन्सेकले आज सदरमुकाम मुसिकोटमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार महिला हिंसाका घटना डरलाग्दो रुपमा बढिरहेका छन् । १ वर्षको अवधीमा जिल्लामा १० ओटा बलात्कार तथा दुव्र्यवहारका घटना घटेका छन् । बलाक्कृत हुनेमा ११ बर्षकी...
जाजरकोटका पुर्वी क्षेत्रमा तीन हप्ता देखी टेलिफोन सेवा बन्द
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुष १ । जाजरकोटका पुर्वी क्षेत्रका स्थानीयहरु तीन हप्ता देखी टेलिफोन सेवावाट वन्चित भएका छन् । रुकुमको घेत्मामा रहेको नमस्तेको टावरमा खरावी आएपछि तीन हप्ता देखी फोन सेवा बन्द भएको हो । टावरमा खरावि आउँदा रुकुमको घेत्मा सहित जाजरकोटका रग्दा, खगेनकोट, लहँ, डाडागाउँ, सक्ला, रुकुमका आठविसकोट, आठविसडाडागाउँ, स्यालाखदी, गोतामकोट लगाए गाविसका हजारौं स्थानीयहरु टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । टेलिफोन सेवा अवरोधसंगै त्यस क्षेत्रमा रहेका आईएमई सेवा समेत प्रभावित भएको छ । नेपाल टेलिकम जाजरकोटले...
सल्यानमा ट्याक्टर दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु
सानीभेरी समाचार डेस्क, पुष १ रुकुम । सल्यानको बामे, धारापोखरामा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । सल्यानकै सल्लीबजारदेखि सामान लिएर बामे जाँदै गरेको भे १ त ५७८३ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा ट्याक्टर चालक सुर्खेत राकम २ लिसीडाँडाका ट्याक्टर चालक प्रेम विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । बिहिबार बेलुकी ६ बजेतिर भएको दुर्घटनामा परी देवस्थल ६ की मन कुमारी पुन गम्भीर घाईते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय सल्लीबजारका इन्चार्ज चक्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार घाईते पुनलाई उपचारको लागि नेपालगन्ज...
भौतिक संरचना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा गर्न राज्यमन्त्री मल्लको निर्देशन
३० मंसिर २०७३ रुकुम, शहरी विकास राज्य मन्त्री मिठु मल्लले भौतिक संरचना निर्माण कार्य तीव्र गतिमा गर्न निर्माण कम्पनि लाई निर्देशन दिनुभएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग नयाँ शहर आयोजना चौरजहारी रुकुमको भवन शिलान्यास कार्यक्रम लाई संम्वोधन गर्दै मन्त्री मल्लले यस्तो वताउनु भएको हो ।कार्यक्रम लाई संम्वोधन गर्दै राज्य मन्त्री मल्लले निर्माणधिन अवस्थामा रहेका भवन वाटो र वसपार्क निर्धारीत समय भित्र पुरा गर्न निर्माण कम्पनि लाई आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले स्टमेट अनुसार वजेट अभावका कारण काम ढिला हुने अवस्था भएमा त्यसको लागी...
नेपाल मगर संघले बुझायो ज्ञापन पत्र
सिजन बाँठामगर २९ मंसीर, मुसीकोट नेपाल मगर संघ रुकुमले संसदमा दर्ताभएको संविधान संसोधन प्रस्ताब पास गर्न माग गरेको छ । संसोधन मार्फत प्रदेश नः ५ का पहाडी जिल्लाहरुलाई ४ नः प्रदेशमा मिलाउने प्रस्तावले मगरहरुको सघन वस्तीको कलष्टरलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्दै संघले संसोधन प्रस्ताव पारीत गर्न माग गरेको हो । आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम मार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघले प्रदेश नः ४, ५ र ६ का मगर बाहुल्य क्षेत्रलाई जोडेर ऐतिहाँसीक पहिचानका आधारमा अधिकार सम्पन्न एकीकृत मगरात स्वायत्त प्रदेश स्थापना गर्न जोडदार...
प्रहरीद्धारा ३० केजी २ सय ग्राम अफिम नष्ट
२८ मंशीर-सानीभेरी समाचार डेस्क/जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले ठुलो परिमाणको अवैध लागु औषध अफिम नष्ट गरेको छ । मुसिकोट नगरपालिकाको भण्डारीकाँडाबाट बरामद गरिएको ३० केजी २ सय ग्राम अफिम नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरिक्षक थम्मनबहादुर रजालीले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उक्त अफिम नष्ट गरिएको हो । प्रहरीले यहि मंसिर १५ गते राती उक्त अफिम सहित मुसिकोट ११ का ३४ वर्षिय प्रेमबहादुर गिरीलाई पक्राउ गरेको थियो । गिरीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भैरहेको प्रहरी निरिक्षक रजालीले बताउनुभयो...
खेलकुदमन्त्रीलाई गृहक्षेत्रमा भव्य स्वागत
२८ मंशीर-सानीभेरी समाचार डेस्क/गृह जिल्ला रुकुममा रहनुभएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री दलजित शेर्पालीले जिल्लाका पुर्वी भेगका विभिन्न ठाउँमा जनभेटघाट तथा छलफललाई जारी राख्नुभएको छ । उहाँ अहिलेसम्म सहिद शुक्र उच्च मावि मोरावाङ, काक्रीको खावाङ बगर, त्रिवेणी मावि काक्रि, शिद्धचौर उच्च मावि लुकुम लगाएतका ठाउँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको छ । उहाँलाई उक्त ठाउँमा बाजागाजा सहित स्वागत गरिएको थियो । त्यस्तै मन्त्री शेर्पाली आफुले अध्यन गरेको रोल्पा जिल्लाको थपाङमा रहेको बलभद्र माविमा पनि पुग्नुभएको छ । उहाँलाई बिद्यालयले अभिनन्दन गरेको...
शहरी विकास राज्य मन्त्रीलाई अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुमद्धारा स्वागत
सानीभेरी समाचार डेस्क मंशीर २८/ अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल रुकुमले शहरी विकास राज्य मन्त्री मिठु मल्ललाई स्वागत गरेको छ । महिला परामर्श भवन मुसिकोटमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि सञ्जालले राज्य मन्त्री मल्ललाई स्वागत गरेको हो । स्वागत सहित सञ्जालले निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको परामर्श भवनको निर्माणका लागि पहल गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै जिल्लाका ग्रामिण स्तरका महिलाहरुको चेतना स्तर बढाउने खालका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन पनि माग गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री मल्लले जिल्लाका महिलाहरुको शसक्तिकरणका लागि...
राङशीको सेपेधुरीमा टावरमा खराबी
रुकुम रुकुम राङ्शीको सेपेधुरीमा रहेको नेपाल टेलिकमको स्काई टावरमा खरावी आउँदा त्यस क्षेत्रका नागरिक फोन सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । करिब २ महिना देखि फोन सेवा अवरुद्ध हुँदा राङ्सी सहित रन्मामैकोट, हुकाम, जाङ लगाएत गाविसका नागरिक मारमा परेका छन् । मोवाइलमा टावर देखिने गरेपनि फोनगर्दा काम नगर्ने समस्या रहेको स्थानिय सुविन मगरले जानकारी दिनुभयो । मर्मतका लागी सम्बन्धित पक्षसंग पटक पटक अनरोध गर्दापनि आजसम्म कसैले चासो नदिएको स्थानियको गुनासो छ...
रुकुममा करिब ४ हजार लिटर घरेलु मदिरा नष्ट
रुकुम जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुमले करिब ४ हजार लिटर अवैध घरेलु मदिरा नष्ट गरेको छ । १ महिनादेखि थालिएको मदिरा नियन्त्रण अभियान अन्तरगत हालसम्म करिब ४ हजार लिटर घरेलु मदिरा बरामद गरी नष्ट गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता, प्रहरी निरिक्षक थम्मनबहादुर रजालीले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी सदरमुकाम मुसिकोट नगरपालिकाबाट घरेलु मदिरा बरामद गरिएको उहाँको भनाई छ । त्यस्तै जिल्लाका चौरजहारी नगरपालीका, रुकुमकोट, आठविसकोट, झुल्नेटा, सिम्रुतु, बाँफकोट, छिवाङ लगाएत ठाउँमा पनि मदिरा नष्ट गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । घरेलु...
वैकल्पिक शिक्षा लिएका बालबालिका विद्यालय भर्ना
२७, मंशीर–रोल्पा । वैकल्पिक शिक्षामार्फत दक्षिण रोल्पाका ३५१ बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । मानव अधिकार सचेतन केन्द्र रोल्पाले हालै दक्षिण रोल्पाका जौलिपोखरी, जेद्वाङ, करेटी, कोर्चवाङ, तालावाङ, गैरीगाउँ र घर्तीगाउँ गाविसमा गरेको सर्वेक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो । यद्यपि सो क्षेत्रमा अझै विद्यालय उमेरका ११५ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकामध्ये अधिकांश घरमा अभिभावक नभएका रहेको शिक्षा अधिकृत प्रमिला घर्तीमगरले बताउनुभयो । गरिबीका कारण सानै उमेरमा...
अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) हुम्लाको एकता भेला सम्पन्न
हुम्ला सिमकोट मसिंर २६गते अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) हुम्लाको एकता भेला आईतबार सिामकोटमा सम्पन्न भएको छ । भेलाले सिता शाही सुस्मीताको अध्यक्षतामा ५१ सदसिय जिल्ला कमिटी गठन गरेको छ । उपाध्यक्षमा कुसुम कार्कि कोपीला,कोषध्यक्ष वविता लामा, सचिवमा गिता खड्का विरता र सह सचिव डंङशिला ऐडी संगिता सहित जिल्ला कमिटि चयन भएको नवर्निर्वाचित अध्यक्ष शाहीले जानकारी गराउनु भयो । भेलामा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) ६ नं. प्रदेशका फायक्सन इन्चार्र्ज र्पावती थापाले निर्वाचित कमिटीको घोषण गर्ने भयो । ने क पा माओवादी केन्द्रका पोलिट...
११ वर्षिया बालिकाको बलात्कार गर्ने ८२ वर्षिय वृद्धमाथि ८ वर्ष जेल सजाय
मंसिर २५: गाउँकै नातिनी नाता पर्ने ११ वर्षिय बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालत रुकुमले एक वृद्धलाई ८ वर्ष कैद र ५० हजार क्षतिपुर्ति तिर्ने फैसला गरेको छ। खारा गाविस वडा नं. १ बस्ने ८२ वर्षिया शिवराम खड्काले जबर्जस्ती करणी गरेको ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले फैसला सुनाएको अदालतका श्रेस्तादार तेजप्रसाद शर्मा पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्ला न्यायाधिस डण्डपाणी शर्माको एकल इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो। खड्काले घरमा कोही नभएको मौका छोपी बालिकालाई २०७३ भदौ २२ गते जबर्जस्ती करणी गरेका थिए। दोषीलाई कानुनी कारवाहीको...
मूर्ति लिएर भाग्दै गरेका तस्कर प्रहरीको गोलीबाट घाइते
२६, मंशीर जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिरको मूर्ति लिएर भाग्दै गरेको चोरको समूहमाथी बर्दिया प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जना घाइते भएका छन् । बर्दिया बाँसगढी–११ का ४७ वर्षका रामबहादुर सिंह र जाजरकोट सिमा–९ की ३७ वर्षकी राधिका सिंहले चन्दननाथ मन्दिरको बुद्धको मूर्ति लिएर भागिरहँदा प्रहरी पिछा गरेको हो । मैनापोखर बजार नजिक डेउडाकला जंगल हुँदै भाग्दै गर्दा प्रहरीले गोली चलाउँदा रामबहादुर सिंह घाइते भएको बर्दियाका प्रहरी प्रमुख एसपी भरत बहादुर बोहोराले बताउनुभयो । सिंहको घुँडामा गोली लागेको र उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएको उहाँले बताउनुभयो...
सुर्खेतका बाढीपहिरो विस्थापितहरुको टुङ्गो लाग्ने
करिव दुई वर्षदेखि त्रिपालमा बस्दै आएका सुर्खेतका बाढीपहिरो विस्थापितहरुले भुकम्प पीडित सरह अनुदान पाउने भएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयले अवको दुई महिना भित्र टुङ्गो लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएपछि सुर्खेतका विस्थापितहरुले भुकम्प पीडित सरह अनुदान पाउने भएका हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोईरालाको नेतृत्वको सरकारले भुकम्प पीडितसरह नीजि घर पुनर्निर्माण अनुदान दिने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । सुर्खेतसहित बाँके, बर्दिया, दाङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका बाढी पहिरो विस्थापितहरुले अव भुकम्प...
आईपरे भौतिक हिसावले नै जाईलाग्ने न्यौपानेको चेतावनी
सानीभेरी समाचार डेस्क/रुकुम अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानले नेपाली जनताको बलिदानिबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत हुन नदिने षड्यन्त्र भैरहेको बताउनुभएको छ । विभिन्न शक्तिहरु नेपाली जनताको बलिदानीलाई कुल्चिन लागि परेको भन्दै त्यसलाई सफल हुन नदिन विद्यार्थीहरुको भुमिका महत्वपुर्ण हुने बताउनुभयो । अखिल क्रान्तिकारी रुकुमको २५ औं जिल्ला सम्मेलनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै न्यौपानेले अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलन प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्ने र शिक्षामा देखिएको माफियाकरणलाई अन्त्य...
रुकुमलाई देशको २६ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दिवाकर ढुंगेल
रुकुमलाई देशको २६ औं साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक दिवाकर...
रुकुमका १३८ ओटा विद्यालयमा विद्यालय सरसफाई कार्यक्रम लागु हुने
मनिष खड्का बैशाख, रुकुम । रुकुमका १ सय ३८ ओटा विद्यालयमा विद्यालय सरसफाई कार्यक्रम लागु हुने भएको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रमसंगको साझेदारीमा एकिकृत विकास समाज नेपालले पौष्टिक आहार कार्यक्रम लागु भएका जिल्लाका १ सय ३८ ओटा प्राथमिक विद्यालयमा कार्यक्रम संचालन गर्न लागेको हो । विद्यालय स्तरमा सरसफाई सम्वन्धी विभिन्न ज्ञान अभिवृद्धी गर्ने उदेश्यले जिल्लाका २४ गाविसका विद्यालयमा उक्त कार्यक्रम संचालन हुन लागेको एकिकृत विकास समाज नेपालका समन्वयकर्ता जगननाथ भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रम लागु...
वाईसिएल रुकुमको पहिलो पुर्ण बैठक
बैशाख १७, रुकुम वाईसिएल रुकुमको चौथो जिल्ला सम्मेलन पछिको प्रथम पुर्ण वैठक मुसिकोट खलंगामा सम्पन्न भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष शैलेश कुमार शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको वैठकले २ वटा आयोगलाई पुर्णता दिएको छ । विष्णु ओली प्रमुख रहेको अनुशासन आयोगको सदस्यमा लालवहादुर विष्ट र प्रेम वुढा रहनुभएको छ भने हरि भण्डारी प्रमुख रहेको लेखा आयोगको सदस्यमा वालकृष्ण वुढाथोकी र किरण भण्डारी रहनुभएको छ । वैठकले अन्य ४ वटा विभागहरु पनि गठन गरेको छ । खेलकुद विभाग प्रमुखमा संगठनका उपाध्यक्ष मानवहादुर चदारा, संगठन विभाग प्रमुखमा सचिव लक्ष्मण ओली, उत्पादन...
सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क लिईरहेका सम्वन्धमा छानविन गर्न नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीको माग
मनिष खड्का बैशाख १६, रुकुम नेपाल विद्यार्थी संघ र अखिल क्रान्तिकारी रुकुमले माध्यामिक तह सम्म सरकारले निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले विभिन्न शिर्षकमा शुल्क उठाईरहेको भन्दै छानविन गर्न माग गरेका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संयुक्त रुपमा माग पत्र पेश गर्दै २ विद्यार्थी संगठनले संविधानमै माध्यामिक तह सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने व्यवस्था भएपनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुले शुल्क लिइरहेकोले तत्काल छानविन गरी कानुन बमोजिम निर्देशन गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष माग गरेका हुन्...